Myanmar 18 Plus: ဆံပင်ညိုညိုလေး
၁၉၃၃ ခုနှစ်၏ အေးမြသော ဆောင်းညတွင်ဖြစ်ပါသည်။ မီးလင်းဖိုမှ လွန့်လူးသောမီးရောင်သည် ဖြာကျလျက် ရှိနေသည်။ ၁၈ နှစ်သမီးလေး ထွေးငယ် သည် ခိုက်ခိုက်တုန်လျက်ရှိသည်။ ဆောင်းကြောင့် မဟုတ်၊ ကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့်တည်း။ သူမတစ်ကိုယ်လုံးတွင် အ၀တ်အစားမရှိ၊ မီးရောင်သည်
သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ပြေးလျက်၊ မွှေ့ယာခုံကြီးပေါ်တွင် ကွေးကွေးလေး၊ ခုံပေါ်တွင် ဒူးထောက်လျက်သားမှ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသည် ခုံ နောက်မှီ အထက်တွင် တွဲလောင်းဖြစ်လျက်ရှိသည်။ သူမ၏ ရင်သား များသည် တွဲလောင်းဖြစ်လျက်၊ ခြေထောက်များသည် ခုံ လက်ရမ်းတစ်ဖက်စီတွင် ကျဲကားလျက်၊ သူ့ အဖုတ်နှင့် တင်ပါးတို့သည် ဖြဲထားသလိုဖြစ်နေကြောင်း ခံစားမိရသည်။ သူမသည် ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်လျက် ရှိသလို အားကိုးရာလည်း မဲ့လျက်ရှိသည်။ မမြင်ရသော်လည်း နောက်ကျောဖက် တွင် သူ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်သူ သခင်ကြီးဒေးဗစ် ၏ အ၀တ်အစားများ ချွတ်ချ ပစ်နေသံကို ကြားနေရသည်။ သခင်ကြီးဒေးဗစ် အိမ်တွင် အိမ်ဖော်အဖြစ် မိဘမဲ့ကျောင်းမှ ရောက်လာသည်မှာ တစ်လ သာ ရှိပါသေးသည်။ ထိုစဉ်က
သူမသည် ကံကောင်းသူတစ်ဦးဟု ထင်ခဲ့မိသည်။ ခန်းနားသောအိမ်ကြီး၊ အခန်းကြီး များအား သန့်ရှင်းပြင်ဆင် ရမည်ဟု ဂုဏ်ယူခဲ့ရသည်။ အစားအသောက်များက ကောင်းမွန်သလို နေထိုင်ရပုံကလည်း သူကြုံခဲ့ဘူးသည့် မိဘမဲ့ကျောင်းနှင့် မယှဉ်သာအောင် မြင့်မားလှပေသည်။ ဤသို့သော အလုပ်မျိုးကိုရခဲ့သည်မှာ သူမကံကြီးပေလို့သာ။ စီးပွားပျက်ကပ်အတွင်း ဆင်းရဲခြင်း အနာကို ခံစားကြရသူများအလယ် သူကား ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဟု ဆိုရမလို၊ သူနှင့်အတူ မိဘမဲ့ကျောင်းတွင် နေခဲ့ပြီး ၁၈ နှစ်ပြည့်သွားသူတို့အဖို့ ကံဆိုးမှုများ ဆက်တိုက်ကြုံကြရချိန်တွင် သူ့ဘ၀က အပေါ်စီးရောက်ခဲ့ သည်။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် သခင်ကြီးဒေးဗစ် ၏ အပျိုရည်ဖျက်မှုကို ကိုယ်တုံးလုံး စောင့်နေရသော အဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ပေသည်။ အမှန်ကတော့ သူ အလုပ်စ၀င်သည်မှသည် အဆိုး မှ ပို၍ဆိုး ဆိုး လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အစမှာတော့ တကိုယ်လုံး အ၀တ်အစားမပါသလို စူးစူးရဲရဲ အကြည့်ခံရရာ မှသည် သူအလုပ်လုပ်နေစဉ် မတော်တဆ ထိမိတွေ့မိသည် သို့
ပြောင်းလာခဲ့သည်။ ဖန်ခွက်ကွဲ သည်ကို ဒဏ်ပေးရာမှ သူမ၏ ဖင်ပိုင်းတစ်ခုလုံး သူ့ပေါင်ပေါ်သို့တင်ကာ အတွင်းခံ ပေါ်သည်အထိ လုံချည်ကိုလှန်၍ အရိုက်ခံရသည့်အခါ
ဗိုက်ကို မာတောင်နေသော သူ့ပစ္စည်းဖြင့် ထိုးထားခြင်း ခံရ သည်။ နေ့စဉ်ပင် သူ၏လုပ်ရပ်များက တစ်နေ့တခြားသိသာလာကာ ည အချိန်များကတော့ ဖြင့် အဆိုးဝါးဆုံးပင် ဖြစ်သည်။ သူမကို စာကြည့်ခန်းအတွင်းသို့ခေါ်သည်။ ညအိပ်အ၀တ်ရှည်ကို ၀တ်ထားသော်လည်း ယင်းအောက်တွင် ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်နေမှန်းမကြာခင်တွေ့ရသည်။ သူ့ရှေ့တွင် သူမကို ရပ် နေခိုင်းကာ ကိုယ်လုံးကို ပွတ်သတ်သည်။ နောက် ပိုင်းတွင် သူ့ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ခိုင်းကာ လရေ ထွက်သည်အထိ အစုတ်ခိုင်းသည်။ ယခုညတော့ဖြင့် သူမသည် ခုံပေါ်တွင် ကိုယ်တုံးလုံး ကုန်း နေရပြီ။ ဒီည သူ့ကို လိုးတော့မည်ဟု လည်း ကြိုပြောထားသည်။ သူမနောက်ကျော တွင် ရပ်လျှက် ဖြဲထားသော သူ့ အဖုတ်ကို တောင်နေသော လီးကြီးနှင့် ပွတ်၍ နေသည်။ သူ့ အပျိုရည်ကို လုံးဝပျက်စီးသွားအောင် အပျိုမှေးကို ဖောက်၍ ထိုးထည့်လိုက်သည့်အခါ အော်ငိုမိသည်။ သူ့ပါးစပ်မှ ညည်းညူသံများထွက်လာသည့်တိုင်အောင် သူမ၏ သွေးများနှင့် ချောမွေ့စေသွားသော အဖုတ်အတွင်းသို့ စကာ လိုးနေလေပြီ။ ထွေးငယ်
သည် ငါးပေ ငါးလက်မ ကျော် အရပ်ရှိသည်ဖြစ်ရာ မိန်းကလေးထဲတွင် အတန်မြင့်သည်။ ဆံပင် ညိုညို ရှည်ရှည်မှလွဲ၍ သူ့တွင် ထူးခြားသော သွင်ပြင် မရှိလှပါ။ ယခုတော့ ယင်းဆံစများသည် သူမ၏ ခါးကိုကျော်ကာ တင်ပါး ပေါ်ထိ ဖုံးလျက်ရှိသည်။ ထွေးငယ် ၏ဘ၀ တွင် ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာဆို၍ ဆံပင်ရှည်ကိုသာ ပြရပေမည်။ မိဘမဲ့ကျောင်းတွင် အစားအသောက် ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ပင် ကိုယ်လုံးက သေးသွယ်သည်။ သူ့ရင်သားများသည် သေးငယ်သော်လည်း မာကျစ်သည်။ နို့သီးများမှာ ညိုဖျော့ဖျော့၊ လက်သန်းဖျားခန့်ရှိမည်။ ခါးသေးပြီး လုံးဝန်း ကျစ်လျစ်သော တင်ပါးများရှိသည်။ နီညိုရောင် အမွှေးများက သူ့ အဖုတ်လေးကို ၀န်းရံထားသည်။ အဆိုးနှင့်စခဲ့သည့်
ထွေးငယ်၏ ဘ၀က ၁၈ နှစ် အရွယ်တိုင်အောင် ထူးပြီး ကောင်းလာခဲ့သည်ကို မတွေ့ရ၊ ၃
နှစ်သမီး အရွယ်တွင် သူ့မိဘနှစ်ပါးလုံး မီးထဲပါသွားခဲ့သည်။ ဆွေမျိုးများက လည်း မစောင့်ရှောက်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ အစိုးရ လက်ထဲ သို့ ထိုးအပ်လိုက်ကြသည်။ ယင်းမှသည် သူသည် မိဘမဲ့မိန်းကလေး ကျောင်း အဆင့်ဆင့် ကို ပြောင်းရွေ့ လာခဲ့ရရာ ကလေးမွေးစားလိုသည့်သူ များ ၏ လာရောက် ကြည့်ရှုခြင်းကို တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံရသော်လည်း အတော်များများ မိသားစုများ က မွေးစားလိုသည်မှာ နို့စို့ ကလေး
အရွယ်သာဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် မဟုတ်ကြရာ အရွယ်ရောက် လာသည်နှင့် အမျှ မျှော်လင့်ချက်နည်းပါးလာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျသည်နှင့် အမျှ မိဘမဲ့ကျောင်းနေဘ၀ကလည်း ကြပ်တည်းလာသည်။ နဂိုကမှ အစားအသောက် ပါးရှားသော ကျောင်းတွင် ပို၍ ပင် လျော့နည်းလာသည်။ ကိုယ့်ကလေးကိုယ် မကျွေးနိုင်တော့သော မိသားစုများ တိုးလာသည်နှင့် အမျှ အဆောင် အခန်းများတွင် လူဦးရေများလာကာ ၂၀ ဆန့်သော အခန်းတွင် ၃၀ နေရသည်။ ကလေးငယ်များကို အကြီးများနှင့် တွဲ အိပ်စေသည်။ ၁၈ နှစ်ပြည့်သည်နှင့် အစိုးရက ထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်ဖြစ်ရာ ရက်စက်သော လောက အတွင်းသို့ လွှတ်လိုက်ခြင်းခံရတော့သည်။ စီးပွားပျက်ကပ် ဆိုးရွားလာသည်နှင့်အမျှ အလုပ်လက်မဲ့ တိုးပွားလာကာ အသက်မွေးပညာ နည်းပါးသူတို့ သည် ပြည့်တန်ဆာများအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားကြတော့သည်။
ထွေးငယ် ကတော့ သူ့ဘ၀ က နောက်ဆုံးတွင် အကောင်းသို့ရောက်လာပြီဟု ထင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောလက သူမ၏ ၁၈ နှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင် တနလာင်္တစ်ရက်မှစခဲ့သည်။ အဆောင်ထဲက အများပင် သူတို့ ၁၈ နှစ်ပြည့်မည့်နေ့ကို တွေးကြောက်ကြသလို ပင် ထွေးငယ် လည်းကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ မိန်းမဆောင်က သူ့ကို ပညာသင်ပေးခဲ့သော်လည်း အသက်မွေးနိုင်မည့် တစ်ခုခု ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တတ်ခဲ့သည်လည်းမဟုတ်ပဲ အပြင်လောကသို့ဝင်ရတော့မည် မဟုတ်ပါလား။ ထွေးငယ် သည် ရုံးခန်းက အခေါ်ခံရပြီ။ ဦးဖေခင် သည် ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ၅ နှစ်ကြာခဲ့ပြီ။ သန့်ရှင်းရေး များပင် မိန်းကလေးများဖြစ်သော ဤ တ၀န်းလုံးတွင် သူသည်တစ်ဦးတည်းသော ယောကျာ်းဖြစ်သည်။ ဗိုက်ခေါက်ထူ ထူ ထိပ်ပြောင်ပြောင်နှင့် ၄၅ နှစ် အရွယ်ခန့်ရှိမည့် ဦးဖေခင်အတွက် တော့ အစားအသောက် နွမ်းပါးသည် မရှိပေ။ အဆောင် မှာသာ အစာပြတ်ချင်ပြတ်မည်။ သူကတော့ လစာ အထောက်အပံ့နည်းသည်ကို အကြောင်းပြ၍ ကျောင်း စားစရိတ်များမှ ဖြတ်ယူထားသည်။ ချမ်းသာသော တကိုယ်ရည်တကာယ များထံ မိန်းကလေးများ ဆက်သွင်းသည့်
အလုပ်ဖြင့်လည်း ပိုက်ဆံရှာသည်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ကြပ်သည်ဆိုသော်လည်း အလွန်အမင်းကြွယ်ဝနေသူများက ရှိနေသည်။ အိမ်စေများဖြင့် သူတို့၏ ချမ်းသာမှုကို
ပြသကြရုံသာမက သူတို့မွေးထားသော အိမ်ဖော်များဖြင့် မိတ်ဆွေ များကို ဧည့်ခံကြသည်။ ကြာလာလျှင် အရသာပျက်သွားနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အပျိုနုနုထွတ်ထွတ်လေးများ အမြဲ လိုနေသည်။ ဦးဖေခင်၏ မိဘမဲ့ကျောင်းသည် ယောကျာ်းလေးများနှင့် မထိတွေ့နိုင်အောင် ထိန်းထားပေးသည် ဖြစ်ရာ သူတို့ အကြိုက်များကို မွေးပေးနိုင်သည်။ မိန်းကလေးများအတွက် ကာမကိစ္စ ဆို၍ အမြင့်ဆုံး မှာ အကြီးများက အငယ် များကို သင်ပေးတတ်သော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြေ ဖျောက် ခြင်းမျှလောက်သာ တတ်ကြသည်။ ဦးဖေခင် သည် သူ့လုပ်သက်တလျှောက်
ယင်း သူဌေးများ လိုချင်သော အနေအထားများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထွေးငယ် ကို မနှစ်က စ၍ သတိထားမိလာသည်။ သူမ၏ ဆံပင်ညိုညိုလေးသည် သူ့ကျေးဇူးရှင်ဖောက်သည် များအတွက် အကြိုက်တွေ့နိုင်ပေသည်။ သူသည်တစ်ခါတလေ ထွေးငယ်ကို ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် ဆံပင်များ တင်ပါးပေါ် ဖုံးလျှက်၊ နီညိုရောင် စောက်မွှေးများက အဖုတ်ပတ်လည် ၀န်းရံလျက် မြင်ကြည့်ဘူးသည်။ ကလေးမကို သူသည် ဦးဆုံး လိုးရသူဖြစ်ချင်သည်။ သို့ရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက် သူ့ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးမည့် သူများကလည်း ရှိနေပေသည်။ သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးမည့် အပျိုမငယ်များစွာက အရန်သင့်ရှိနေပေသည်။ သူ့တွင် အာသာဖြေစရာ တစ်ယောက်တော့ အမြဲရှာထားသည်။ ရုံးခန်းသို့တစ်ပတ် တစ်ခါလောက်ခေါ်ကာ ကျောင်းတွင်း အမှားတစ်ခုခုကြောင့် ဒဏ်ပေးရာမှ စ၍ လိုင်းသွင်းယူသည်။ ရုံးခန်းတံခါးကိုပိတ်၊ အ၀တ်အစားများချွတ်ပြီး ခုံပေါ်တွင် ကုန်း ခိုင်းပြီး ကြိမ်နှင့် ဆော်သည်။ သူ့ကြိမ်ရိုက်ချက်သည် အလွန်နာသည်ဖြစ်ရာ ဒဏ်ပေးခံရသူ ကလေးမငယ်ခမျာ တစ်ပတ်ခန့် ဆက်တိုက်နာနေရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တော့ ထိုဒဏ်ကို
မခံနိုင်သော မိန်းကလေးသည် ပါးစပ် အတွင်း အလိုးခံရခြင်း မှသည် နောက်ဆုံးဖင်
အလိုးခံရခြင်းအထိ ကြိမ်ဒဏ်မှ သက်သာအောင် လုပ်ပေးရရှာတော့ သည်။ တံခါးခေါက်သံကြားရပြီး
ထွေးငယ် အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာသည်။ ဒေးဗစ် သည် အခန်းတစ်ဖက်တွင် ထိုင်နေကာ ဦးဖေခင် က စားပွဲနောက်တွင်ထိုင်နေသည်။ သူသည် ထွေးငယ် နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေးဗစ် သဘောကျပါက ကျပ် ၅၀၀ ဖြင့် လွှဲပေးရန် သဘောတူပြီးဖြစ်သည်။ ၅၀၀ ဆိုသောငွေသည် သူ့လစာ ၆ လစာလောက်ရှိသည်ဖြစ်ရာ အငန်းမရ လိုချင်နေသည်နှင့် အတူ ထွေးငယ် အား တင့်တင့်တယ်တယ်ဖြစ်စေရန် ၂ ကျပ်ဖိုးခန့် အရင်းတည်၍ အ၀တ်အစား သစ်များဆင်ပေးထားပေသည်။ ထွေးငယ် သည် ဦးဖေခင် လှမ်းခေါ်လိုက်သော အခန်းတွင်း၌ လူစိမ်းတစ်ဦး ရှိနေသည်ကို အံ့သြသွားသည်။ သူ့ကို အ၀တ် သစ်များဆင်ပေးထားသည် ကို သတိထားမိသော်လည်း ယင်းမှာ မနက်ဖြန် တွင် ကျောင်းမှ
ထွက်ရတော့ မည်ဖြစ်၍ ဟုသာ ထင်နေသည်။ မ၀တ်ဘူးသော အ၀တ်များဖြင့် သူ့ဘ၀တွင် အလှဆုံးဖြစ်နေသည်။ ဘလောက်စ် အကျီ င်္ နှင့် စကတ်ထမီ သည် သူ့ကိုယ်လုံးကို ပေါ်စေသည်။ ၀တ်စုံပေါ်တွင် သူ့ဆံပင်ညိုလေးများက ၀ဲကျလျက်၊ ဒေးဗစ် က သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေကြောင်းသတိထားမိသည်။ “ဆရာကြီး ကျွန်မကို ခေါ်သလားရှင်” “ဟုတ်တယ်၊
ထွေးငယ်။ ငါ ညည်းကို သတင်းကောင်း တစ်ခုပြောမလို့။ မနက်ဖြန်ဆိုရင် ညည်းလည်း
၁၈နှစ် ပြည့် ပြီ ဆိုတော့ ကျောင်းက ထွက်ရတော့မယ်။ တိုင်းပြည်ကလည်း စီးပွားကျနေတော့ အလုပ်အကိုင်ရဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ဘူး။ ခုတော့ ငါ့ မိတ်ဆွေ ဦး ဒေးဗစ် က အိမ်ဖော် အသစ်တစ်ယောက် လိုချင်နေတာနဲ့ အံကျသွားတယ်။ ညည်း အကြောင်း လည်း ငါပြောပြထားပြီးပြီ” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာကြီး။ သမီးလည်း ဒီနေ့ပြီးရင် ဘာလုပ်ရမယ် ဆို တာ မသိပါဘူး။ အဆောင်က ထွက်သွားတဲ့ အမ တွေလည်း အဆင်ပြေတယ် ကြားရတယ်ကိုမရှိဘူး။ လမ်းပေါ်မှာ ပဲ လို့ကြားနေရတာ..” “ဒေးဗစ်၊ အဲဒါ ထွေးငယ် ပဲလေ” “အေး၊
ထွေးငယ်၊ ငါ က အိမ်ဖော် တစ်ယောက် လိုချင်နေတာ။ ငါ့ခြံက မြို့စွန်မှာ။ အိမ်က အခန်း ၁၅ ခန်း၊ အိပ်ခန်းချည်းပဲ ၆ ခန်းရှိတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေပေမယ့် ဧည့်သည်တွေ ဧည့်ခံရတာ တစ်ခါတလေ ရှိတတ်တယ်။ ညည်းအတွက် အခန်းတစ်ခန်းနဲ့နေရမယ်။ လစာလည်း ကောင်းကောင်းရမယ်။ အ၀တ်အစားလည်း ဆင်ပေးမယ်။
ငါဆင်ပေးတဲ့ အ၀တ်အစားတွေဝတ်ရမယ်။ အလုပ်ကတော့ တစ်ပတ်ကို ၇ ရက်လုံး အချိန်မရွေး လိုအပ် တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ပေးရမယ်။ ငါ့ကို သခင်ကြီးဒေးဗစ် လို့ခေါ်ပြီး ငါလိုအပ်တာတွေကို အစအဆုံးလုပ်ပေးဖို့ပဲ။ သက်သက်သာသာ တော့ နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရမယ်။ ညည်းအတွက် အခန်းကိုယ်က ရေချိုးခန်းတွဲလျက် အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နေရမှာ။ လစာကလည်း ဒီခေတ် လူတွေ ရဖို့မလွယ်တဲ့ ပိုက်ဆံမျိုးပေးမှာပဲ။ အဲတော့… ငါ့အလုပ်ကို လက်ခံနိုင်မလား ကလေးမ” ထွေးငယ် သည် ဒေးဗစ် ကို စိုးရွံ့စွာကြည့်မိသည်။ သူသည် ဦးဖေခင် နှင့် ရွယ်တူလောက်ဖြစ်ရာ သူလို ၁၈ နှစ် အရွယ်အတွက်တော့ အဘိုးကြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဦးဖေခင် ထက် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အများကြီးသာသည်။ အရပ်က၅ ပေ ၁၀ လက်မလောက်ရှိကာ အသားညိုညို တောင့်တောင့်တင်းတင်းဖြင့် ပို၍ နုပျိုပုံရှိသည်။ သူသည် အိမ်ကြီးတစ်ခုတွင် သခင်ကြီးတစ်ဦးနှင့် အတူနေရမည်။ သို့ရာတွင် သူ့အတွက် ရွေးချယ်စရာ များများမရှိ။ မနက်ဖြန် တွင် လမ်းပေါ်သို့သွားမလား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရသည့်အလုပ်ကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ရမည်သာဖြစ်သည်။ အလုပ် သည် မလွယ်မှန်းသူသိသော်လည်း သူ့ဘ၀တွင် လွယ်သည့်အလုပ်လည်း မရှိခဲ့ဘူးသေး။ “ဟုတ်ကဲ့ပါ သခင်ကြီး ဒေးဗစ် ။ သမီး ..အဲ ကျွန်မ သခင်ကြီး သဘောကျအောင် နေပါ့မယ်။ သမီးကို ယုံကြည်လို့ အလုပ်ရှာပေးတဲ့ ဆရာကြီး ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဦးဖေခင် သည် ဒေးဗစ် ကို ပြုံးပြသည်။ “ဒါဆို မင်းကို နက်ဖြန်မနက် ၁၀ နာရီ ကားနဲ့လာခေါ်လိမ့်မယ် ထွေးငယ် ညည်း ပစ္စည်းတွေ အဆင်သင့် သိမ်းထုတ်ထားပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်ပေတော့။ ကိုဒေးဗစ်ရေ ခင်ဗျားလည်း သူ့ကို သဘောကျမှာပါ။ သူလည်း လမ်းပေါ်အရောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆောင်းလည်းဝင်လာပြီဆိုတော့ အပြင်မှာ အတော် ချမ်းနေပြီ။ ထွေးငယ် ညည်းလည်း အခန်းပြန်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို နှုတ်ဆက်ပေတော့။ နက်ဖြန်ဆို ညည်းဘ၀ စပြီ။ Good luck” “ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာကြီး ဦးဖေခင်၊ သခင်ကြီးဒေးဗစ်ကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မကို စိတ်ပျက်စရာ မဖြစ်စေရပါဘူးရှင်” ထွေးငယ် အခန်းထဲမှလှည့်ထွက်သွားသည်နှင့် မျက်လုံးများက သူမ ဖင်ပေါ်တွင် ကပ်ပါသွားကြ သည်။ ထွေးငယ် ပျောက်သွားတော့မှ ဒေးဗစ် ဦးဖေခင် ဖက်သို့လှည့်လိုက်သည်။ “သူ့ကြည့်ရတာ မဆိုးပါဘူး။ အကြာကြီး သင်ပေးနေရမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး။ ခင်ဗျား ကြည့်ရတာ သူ့ကို သဘောကျနေပုံပဲ။ ၂ လ လောက်ဆို လာခဲ့လေဗျာ။ ခင်ဗျားကို ခွဲကျွေးမှာပေါ့။ သူက အရင် ဟာတွေနဲ့စာရင် တကဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးပဲ။ ကဲ ဒီမှာ
ငွေ ၅၀၀။ ဆံပင်ညိုညိုလေးဆိုတော့ ကျုပ် မိတ်ဆွေတွေလည်း အကြိုက်တွေ့လောက်တယ်ဗျ။” ဒေးဗစ် ပိုက်ဆံပေးပြီး ထွက်သွား တော့သည်။ ဒေးဗစ်တို့
ထွက်သွားသည်နှင့် ဦးဖေခင် သည် ငွေများကို ရေတွက် လျက်ကျန်နေခဲ့သည်။ သူသည်အပျော်ကြီး ပျော် လျက်၊ ထွေးငယ် ကို စဉ်းစားရင် တောင်လာသော သူ့ လီးကို ဆန္ဒဖြည့်ဖို့ ကြံနေတော့သည်။ “ဒေါ်ကေသီ ရေ နော်နော့်ကို ကျွန်တော့် ရုံးခန်းလွှတ်ပေးပါ။ ခင်ဗျားလည်း ဒီနေ့ ရုံးစောစောဆင်းချင်ဆင်တော့ဗျာ။ ခင်ဗျားလည်း မိုးချုပ်မှ ပြန်ရတာ များနေပြီဆိုတော့ ဒီနေ့ စောပြန်ဖို့ တန်ပါတယ်။” ဦးဖေခင် သည် ပြုံးလျက်၊ သူသည် သူ၏ နောက်ဆုံး သားကောင်ဖြစ်သော နော်နော် ကို စားချင်နေသည်။ ဒေးဗစ် သည် ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်နေသော ထွေးငယ် ကို
ဖက်လျက် လိုးနေပုံ၊ သူမ၏ ဆံပင်ရှည် ညိုညိုများ သည် ကုတင်ပေါ်တွင် ပြန့်ကျဲလျက် ရှိပုံ၊ ဒေးဗစ်၏ လီးကြီးက နက်ရှိုင်းစွာ လိုးသွင်းလျက်ရှိပုံ တို့ကို မှန်းလျက် သူ့ လီးမှာ မာတောင်လျက်ရှိသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ဦးဖေခင်၊ ကျေးဇူးပဲရှင်၊ ကျွန်မကလေးတွေတော့ စောစောပြန်လာတာမြင်တာနဲ့ အံ့သြကုန်ကြတော့မှာ ပဲ၊ နော်နော့် ကို ဒဏ်ပေးမလို့မဟုတ်လား၊ သူ မနေ့ကဒေါ်ဝင်းမ ရဲ့ အတန်းမှာ ပေါက်ကရလုပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မ ကြားပါတယ်” ဒေါ်ကေသီသည် ဦးဖေခင် က နော်နော်ကို ကာမလွန်ကျူးနေမှန်း ရိတ်စားမိသည်။ သို့ရာတွင် သူ့ အလုပ် မဟုတ်၊ သူ့တွင် လစာသင့်သောအလုပ်ရှိနေပြီး ဒီလို ခပ်မိုက်မိုက် မိဘမဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကြောင့် အလုပ်ပြုတ် ခံရလို့ မဖြစ်ပေ။ “အေးဗျာ။
ဒီကလေးမကတော့ ကျုပ်တို့ကျောင်းကို ဖျက်ဆီးတော့မှာပဲ။ အပတ်တိုင်း သူ့ကို တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုး နဲ့ ဒဏ်ပေးနေရတယ်။ အင်းလေ။ ကျုပ်တို့ ကျောင်းက ထွက်လို့ ဆိုးဝါးတဲ့လောက ထဲ ရောက်မသွားခင် တတ်နိုင်သမျှတော့ လူ့စည်းကမ်းတွေ
နားလည်အောင်သင်ပေးရမှာပါပဲ။ ကျောင်းပြင်ကတော့ ဆိုးဝါးတဲ့လောက ပဲဗျို့။ ဒီနေ့ ကောင်းသတင်းကတော့ ခုနက သခင်ကြီးဒေးဗစ် က ထွေးငယ် ကို အိမ်ဖော် ခေါ်သွားဖို့ သဘောတူလိုက်ပြီဗျ။ နက်ဖြန် မနက် ၁၀ နာရီ လာခေါ်လိမ့်မယ် သူ့ကို အဆင်သင့် လုပ်ခိုင်းထားလိုက်အုံးနော်” “ဟုတ်လား ထွေးငယ် က နည်းနည်း ရိုးပေမယ့် လိမ္မာတဲ့ကလေးပဲ၊ ကောင်းတာပေါ့။ အိမ်ဖော်အလုပ်ကတော့ ကောင်းကောင်း
လုပ်နိုင်မှာပဲ” ဒေါ်ကေသီသည် ဦးဖေခင်၏ မိတ်ဆွေ သူဌေးများနော်ပါသွားသော သူ့ကျောင်းသူ လေးများ မည်သို့ဖြစ်သွားကြသည်ကို သိပါသည်။ သူတို့သည် သူတို့မလုပ်ချင်သော တစ်ခုခုကို လုပ်ကြရပေလိမ့် မည်။ သို့ရာတွင် မိဘမဲ့ကလေးဘ၀အတွက် ထင်သလောက်တော့ ဆိုးမည်မဟုတ်ဟု သူတွေးသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို ကျွန်မသွားတော့မယ်ဆရာကြီး ၊ နော်နော့် ကို ခဏချင်းရောက်အောင် လွှတ်လိုက်ပါမယ်နော” ဒေါ်ကေသီ ပစ္စည်းများ ကိုသိမ်း၊ တံခါးကိုပိတ်ကာ နော်နော် ကို ဆရာကြီး ဦးဖေခင် ခေါ်နေကြောင်း သွားပြောရန်ထွက်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ကေသီ သည်
အပျိုပေါက် ကလေးငယ်များ နေရာ အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။ နော်နော် သည်တော့ ထွေးငယ် လို ကံကောင်းမည်မဟုတ်၊ ဦးဖေခင် သည် သူ့ကို ကောင်းကောင်း စားနေပြီမို့ အပျိုစင် ရိုးရိုးလေးများကို သာကြိုက်သည့် သူ့ မိတ်ဆွေ သူဌေးများထံ ရောင်းမည့် ပုံမရှိ၊ ထိုသူတို့သည် အပျိုလေးများကို အရှက်ကုန်အောင် အစုံလုပ်ခိုင်းပြီးမှ အပျိုရည်ကို အရယူ ခြင်းဖြင့် အရသာခံတတ်ကြသည်။ လမ်းပေါ်မှာ အချိန်မရွေး ၀ယ်လို့ ရနိုင်သည့် အတွေ့အကြုံရှိပြီး မိန်းကလေးများကို မလို ချင်ကြ၊ “နော်နော်၊ ညည်းကို ဆရာကြီး ဦးဖေခင် က ရုံးခန်းကို ချက်ခြင်း လာဖို့ ခေါ်နေတယ်။ ညည်းမနေ့က ဒေါ်ဝင်းမ အခန်းမှာ ပေါက်ကရ လုပ် အသံပေး တယ်မဟုတ်လား။ ဒဏ်ပေးဖို့ ပဲဖြစ်မယ်။
ညည်း သင်ခန်းစာပဲယူမလား နောက်ထပ်ပဲ ဆက်ဒဏ်ပေးခံနေအုံးမလား စဉ်းစားပေတော့” ဒေါ်ကေသီ သည် ပြောရင်း ကလေးမကို စိုက်ကြည့်သည်။ သူ့အတွက် စိတ်ထဲကတော့ မကောင်း။ သို့သော် ဒီကိစ္စသည် သူ့ နေ့စဉ်ဘ၀အတွက် ဘာမှတော့ အရေးမပါလှပေ။
နော်နော် သည် အိပ်ယာထဲမှ တုန့်ဆိုင်းတုန့်ဆိုင်း ထလာရသည်။ သူတော့ ဦးဖေခင်
၏ ကာမကျူးမည့် ဒဏ်ကို ခံရပေအုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိနေသည်။ တစ်ခါက သူ့ပါးစပ်ထဲတွင် ပြီးသွားသည်အထိ လီးကြီးကို စုတ်ပေးခဲ့ ရဘူး ပြီ၊ အရင်အပတ်ကလည်း ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင် ကိုယ်တုံးလုံး မှောက်ခိုင်း၊ ဖင်ကိုမြှောက်ခိုင်းပြီး သူ့ အဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် အပျိုရည်ဖျက်ခဲ့ဘူးပြီ။
နောက်တစ်ခါဆိုရင် ဖင်ချခံရမည် ဟုလည်း ပြောလိုက်သေးသည်။ သူလို ကလေးတစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲ လီးကြီးထည့် လိုးလို့ရမယ်လို့တော့ မယုံနိုင်၊ သူ့ဖင်ပေါက်သည် သေးသေးလေးဖြစ်ပြီး သူတွေ့ဘူးသည့် ဦးဖေခင်၏ လီးကြီးက အလွန်ကြီးသည်ဖြစ်ရာ ဘယ်လိုမှ မဆန့်နိုင်ဟုသာ ထင်မိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အ၀တ်အစားများကို ဆွဲဖြန့်သတ်ယတ်အောင် လုပ်ပြီး ဦးဖေခင်၏ အခန်းဖက် သာသာလျှောက်လာကာ တံခါးကို
ခေါက်သည်။ “လာလာ နော်နော်၊ ၀င်ခဲ့၊ ငါ စောင့်နေတာ” ဦးဖေခင် သည် ပုဆိုးအောက်မှ လီးကြီးကို ပွတ်နေရင်း နော်နော် ၀င်လာ သည်ကို ကြည့်နေသည်။ “ တံခါးပိတ်ပြီး မင်းတုန်းချလိုက်” အမိန့်ပေးသည်။ နော်နော် သည် ထွေးငယ် နှင့်
အရပ် အတူတူလောက်ရှိသော်လည်း ကျန်တာ ဘာမှ မတူ။ နော်နော်၏ ဆံပင်များသည် မည်းညစ်ညစ်၊ နို့ကြီးများက အတန် ကြီးပြီး ဖင်ကတော့ လျှောသည်။ သူသည် အလိုးခံဖို့ မွေးလာသည်ဟုသာ စဉ်းစားပြီး ရသလောက် အမြတ်ထုတ်ဖို့သာ ဦးဖေခင် စဉ်းစားသည်။ “ဒေါ်ဝင်းမက မနေ့ကသူ့အတန်းထဲမှာ ညည်း စကားများတယ် လို့တိုင်တယ်
ဟုတ်လား၊ ဘာမှ အတွန့်တက်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့၊ ဘယ်လို အဆော်ခံရမယ် ဆိုတာ နင်သိတယ် မဟုတ်လား” ဦးဖေခင် ပြောရင်း ခုံကို စားပွဲမှလွတ်အောင် ဆွဲထုတ်သည်။ သူ့ပေါင်ပေါ်တွင် နော်နော် မှောက်ဖို့ နေရာ ရအောင် ခြေထောက်ကို ချဲလိုက်ပြီး မှောက်ချဖို့ လက်ဖြင့် ပြသည်။ နော်နော် သည် ဦးဖေခင်၏ အမိန့်စကား သံအကြားတွင် ရှက်ကြောက်ခြင်းဖြင့် ခေါင်းများပူကနဲဖြစ်သွားသည်။ သူ့ဖင်ကို သုံးလေးရက် ထိုင်လို့မရအောင် ရိုက်အုံးတော့မည်ထင်၏။ ကြိမ်လုံး ဆိုသည့် စကားတော့ မကြားရ သဖြင့် နည်းနည်းများသက်သာလေမလား တော့ မျှော်လင့်နိုင်သည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ပါဆရာကြီး ရှင့်” ဦးဖေခင်နား တိုးကပ်သွား ပြီး ပေါင်ပေါ်တွင် အသာလေး မှောက်ချလိုက်ရသည်။ သူ့ခေါင်းသည် ကြမ်းပြင်သို့ စိုက်နေပြီး တင်ပါးမှာ ပေါင်ပေါ် တွင် ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးသလိုဖြစ်နေသည်။ ဦးဖေခင်၏ လီးကြီးတောင်နေသည်ကို သူမ၏ ဗိုက်တွင် သိနေရ သည်။ သူမ၏ကျောပေါ်တွင် သူ့လက်ဖြင့် ပွတ်ကာ အရသာယူရင်း ဖင်ကို ပွတ်နေကြောင်း ခံစားမိသည်။ လုံချည်ကို လှန်တင်လိုက်ကာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားလိုက်တာ ခံရသည် သောအခါ ကိုယ်ကို ကျုံ့လိုက်မိသည်။ လုံချည် မှာ ခါးအထိ အတွင်းခံပေါ်အောင် ဆွဲလှန်ထားခံလိုက်ရပြီး ပြောင်ရှင်းနေသော ခြေထောက်များ ကို လက်ဖြင့် ပွတ်သတ်ခြင်းခံနေရပြီ။ဦးဖေခင် သည် နော်နော် ၏ ချောမွတ်သော အသားကို အရသာ
ခံ၍ နေရင်း လုံချည်ကို ခါးအထိ ဆွဲလှန်သောအခါ အတွင်းခံ ကောဆက် ရှင်မှီး သည်
ရင်ပတ်မှ ပေါင်ကြားထိ တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်နေကြောင်း သတိထားမိသွားသည်။ “ဒီ ဟာကြီးဝတ်ထားလို့တော့ နင်နဲ့ မဖြစ်ဘူး။ ငါက ဖင်လှန်ရိုက်မှာ။ အဲတော့ မတ်တတ်ရပ်ပြီး အ၀တ်တွေ အားလုံး ချွတ်လိုက်စမ်း နော်နော်.” နော်နော် တွေ
နေသည်။ ဤအမိန့်သည် သူ့ အတွက် တုန်လှုပ်မှုကို ပိုတိုးစေသည်။ သူ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်ရတော့ မည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ သူ မတ်တတ်ရပ်၍ အ၀တ်များကို ချွတ်ချပစ်ရသည်။ ပြီးတော့ ခဏရပ်နေသည်။ ထို့နောက် တစ်စတည်းနှင့် ချုပ်ထားသော
ရှင်မှီးအတွင်းခံကို ဆက်ချွတ် ရသည်။ သူ့ရင်သားများသည် ကြပ်တည်းစွာချုပ်နှောင် ထားရာမှ လွတ်ထွက်သွားသည်။ အစကို ဆွဲချသည်နှင့် အဖုတ်လည်း ပေါ်လာတော့သည်။ အားလုံးကို ကြမ်းပေါ်သို့ ချွတ်ချပြီးသောအခါ လက်တစ်ဖက်က ရင်ပတ်ပေါ် နောက်တစ်ဖက်က အဖုတ်ကို ဖုံးဖို့ကြိုးစားသည်။ ခေါင်းကို ငုံ့ထား သည်။ ဦးဖေခင်၏ မျက်လုံးများကို သူရင်မဆိုင်ချင်။ “မတ်တတ်
ဆန့်ဆန့်ရပ်ပြီး လက်တွေကို ဘေးချထားစမ်း။ နင့်ကိုယ်လုံးက လှတော့ ငါ သေချာ ကြည့်လို့ရအောင်” နော်နော်၏ လက်များ ဘေးသို့ ချလိုက်ရသည်။ ရင်သားများသည် ကြီးသော်လည်း တင်းနေသည်။ အတန်ကြီး သော နို့သီးခေါင်းများမှာ အခန်းတွင်းလေအေးကြောင့် ထောင်မတ်၍ နေသည်။ “ခြေထောက်တွေကို ချဲလိုက်” အမိန့်အရ နော်နော့် ခြေထောက်များ ချဲလိုက်ရသောအခါ အဖုတ်ဝသည် ဖြဲပြီးဖြစ်သွားသည်။ နော်နော့်မျက်နှာတွင် ရှက်ရိပ်နှင့် ရဲ နေသည်ကို ကြည့်ရင်း သူ့ လီးတောင်လာသည်။ “တုံးလုံးနေရတာ ရှက်မနေပါနဲ့ဟ။ ညည်းက ကိုယ်လုံးလှတာပဲ။ ချွတ်ကြည့်ရတာ ငါတောင် သဘောကျသွားပြီ။ ကဲ ခုနအတိုင်းပြန်နေတော့။” နော်နော် သည် ဦးဖေခင်၏ ပေါင်ပေါ်တွင် မှောက်ရပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတွင် တော့ သူမ၏ အကာ မပါတော့သော ရင်သားများသည် သူ့ခြေထောက်များကို ထိလျက်နေသည်။ တောင်နေသောလီးကြီးက သူမဗိုက်ပြောင်ပြောင်ကို ထိုးမိနေသည်။ လက်များဖြင့် ပြန်ပွတ်လာတာကို ခံစားရသည်။ တင်သားများကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်သဖြင့် ရဲ လာသည်။ လက်တစ်ချောင်းသည် ဖင်ကြားထဲသို့ တိုးဝင်လာသဖြင့် ဖင်ကို ရှုံ့ထားမိသည်။ “ဖြန်း”
အသံသည် တစ်ခန်းလုံးကြားရအောင် ကျယ်သည်။ ဦးဖေခင် သည် နော်နော် ၏ ညာဖက် တင်ပါးကို အရမ်းနာ အောင် လက်ဖြင့် လွှဲရိုက်လိုက်ပြီး ဖင်ရှုံ့ထားခြင်းရှိမရှိ ပြန်ကြည့်သည်။ ထို့နောက် ဘယ်ဖက် တင်ပါးကို လွှဲရိုက်
ပြန်သည်။ တဖြန်းဖြန်းအသံများ တစ်ခန်းလုံးဆူသွားသည်။ သူမ၏ ညည်းသံနှင့် အတူ တင်ပါးများ ရဲတွတ်လာသည် ကို ဦးဖေခင်မြင်နေရသည်။“ဆရာကြီးရယ်။ အရမ်းနာတယ်။ တော်လောက်ပါပြီနော်” သူမ တိုးတိုးတောင်းပန်သည်။ တောင်းပန်လို့ မရမှန်း လည်း သူမ သိသည်။ ရိုက်လိုက်တိုင်း သူမဗိုက်ကို ထိုးနေသော လီးကြီးက တင်းကနဲဖြစ်သွားမှန်း သတိထားမိ သည်။ ခုလို ရိုက်ရတာ သူကျေနပ်နေပုံရသည်။ ဘယ်တစ်လှည့် ညာတစ်လှည့် ရိုက်ချက်များက ဆက်၍ ကျရောက် လာသည်။ တစ်ချက်ထက် တစ်ချက် ပိုအားပါလာသည်။ ပို၍ စပ် နာ လာ ရင်း ဗိုက်ကို ထိုးနေသော လီးကြီးက ပိုတင်း လာနေရင်း သူ့ပေါင်ပေါ်တွင် သူမ လိမ်တွန့်နေသည်။ ဦးဖေခင် သည် သူ့ရှေ့မှ လွှဲရိုက်ခံနေရသော ကိုယ်တုံးလုံးမလေးဗိုက်က သူ့လီးကြီးကို သူ့လီးကြီးကို ပွတ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေတာကို ဖီးတက်နေသည်။ ၁၅ ချက်လောက် ဆက်တိုက်ရိုက်ပြီးသောအခါမှ ခဏ နားလိုက်သည်။ ဖင်ကိုရိုက်ခံရတာ ရပ်သွားသောအခါ နော်နော့် ဖင်သည် မီးလောင်သကဲ့သို့ပူနေပြီ။ သူမ ညည်းတွားရင်း
မျက်ရည် တွေကျနေသည်။ ပူနေသော တင်ပါးများကို ဆက်အပွတ်ခံရသောအခါ အရမ်းစပ်သည်။ ဦးဖေခင်၏ လက်များသည် စားပွဲပေါ်မှ အုန်းဆီပုလင်းကို လှမ်းယူလိုက်သည်။ ပုလင်းကို ဖွင့်ပြီး သူ၏ အသားပြောင်ပြောင်ပေါ်သို့ တစ်စက်ချင်း ချသည်။ စပ်နေသော အသားပေါ်သို့ ဆီဖြင့် ပွတ်ပေးနေသည်။ “ဖင်ကို
ရှုံ့မထားနဲ့ လျှော့ထားစမ်း။ ငါ ဆက်ရိုက်လိုက်ရမလား” နော်နော် ဖင်ကို ဆန့်ပေးလိုက်ရသည်။ သူ၏ ဆီစွတ် ထားသော လက်ချောင်းများသည် ဖင်ကြားသို့ စမ်းဝင်သွားသည်။ ဖင်ဝကို ပွတ်လိုက်သောအခါ သူမ အသာ ဖင်ရှုံ့လိုက် ပြန်မှန်းသတိထားမိသည်။ “ငါ နောက်ဆုံးသတိပေးတာနော်၊ နော်နော်။ ဖင်ကို လျှော့ထားစမ်း” နော်နော် လျှော့ချလိုက်ရပြီး လက်ချောင်းများသည် ဖင်ကြားထဲသို့ တိုးဝင်ကာ တင်ပါးနှစ်ခုကို ဆွဲ ချဲ့သွားသည်။ဖင်အဖြဲခံရသည်
နှင့် နော်နော် အရမ်းရှက်နေသည်။ လေအေးတိုးမှုကြောင့် ဖင်ဝ ဖြဲခံထားရမှန်းသိနေရသည်။ ဆီများ ပိုစိုလာပြီး ဖင်ဝကို အသာထိုးထည့်လိုက်သော လက်ချောင်းသည် စွပ် ကနဲ အတွင်းထဲထိ တိုးဝင်သွားသည်။ ဦးဖေခင် ၏ လက်ချောင်းကို သူမ ဖင်က ညှစ်လိုက်သည်။ ပြုတ်တူနှင့် ညှပ်ထားသလိုဖြစ်နေသည်။ ဖင်ထဲသို့ လီးထိုး ထည့်ပါက မည်သို့ ခံစားရမည်ကို သူ စဉ်းစားမိနေသည်။ ဒီညတော့ ဒီကလေးမ ဖင်ကို ချရမည်။ ဖင် အတွင်းထဲသို့ နက်နက် နှိုက်လိုက်သောအခါ သူ့ပေါင်ပေါ်တွင် တွန့်သွားမှန်း သိနေသည်။ သူမ ကိုယ်ကို တင်းလိုက်ပြန်ပြီ။ “လျှော့ထား နော်နော်။ ငါ နင့်ဖင်ကို ဖွင့်ပေးနေတာ။ ငါ့လီးထည့်လို့ရသွားအောင်။ ခု နေ နင် သည်းမခံရင် ခဏနေ လီးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ နင် ကွဲသွားမယ်” ဖင်ထဲသို့ လက်ထည့်ခံနေရသည်မှာ အခံရဆိုးလှသည်။ ပေါင်ပေါ်တွင်တွန့်လိန်၍ နေသည်။ ဒီလို တွန့်သည်ကပင် သူ့အတွက် ဇိမ်ကျအောင် လီးကြီးကို ဗိုက်နှင့် ပွတ်ပေးလိုဖြစ်နေသည်။ လက်ချောင်းတစ်ဆုံး ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့် မသက်မသာ ဖြစ်လျက်ရှိသည်၊ လက်တစ်ချောင်းမှသည် နှစ်ချောင်း ဖြစ်လာပီး ဖင်ဝကို ဆွဲဖြဲ သောအခါ “အရမ်းနာတယ်။ တော်ပါတော့ ဆရာကြီးရယ်” ဟု တောင်းပန်ရပြန်သည်။ လက်များသည် ဖင်ထဲသို့ မြွေဝင်ထွက် နေသည့်နှယ် ဖြစ်နေသည်။ ဖင်ထဲသို့ ဆီတွေ အတော်လေးဝင်ကုန်ပြီ။ ဦးဖေခင် သည် သူမ နှုတ်ဖျားမှ အားကနဲထွက် အောင် ပြင်းပြင်းနက်နက် တစ်ချက် စိုက်သွင်းလိုက်ပြီး လက်ကို ပြန်နှုတ်ယူလိုက်သည်။ “ကဲထစမ်း။ ငါ့ကို ကျောပေးပြီးရပ်” နော်နော် သည် ဦးဖေခင်၏ ရှေ့တွင် ကျောပေးပြီး ရပ်နေ ရသည်။ ဦးဖေခင် က သူမ၏ ပေါင်များကို ဆွဲယူပြီး သူ့ဖက် တိုးကပ်သည်။ သူ့ ပေါင်များကို ကျောပေးလျက် ခွ စေပြီး ခြေထောက်ကို ၃ ပေခန့် ဆွဲကားလိုက်သဖြင့် သူမ ပေါင်များကြားသို့ မာတောင် နေသော လီးကြီး နှင့် ထိုးမိသွား သည်။ လီးကြီးသည် ပေါင်ကြားတစ်လျှောက် လျှောက်သွားနေသည်။ခြေထောက်များဖြဲကား ထားရသဖြင့် ဖင်ဝ ဟပြဲနေသော နော်နော်ကို ဦးဖေခင် ပေါင်ပေါ်သို့ အသာ ဆွဲချသည်။“ဖင်ဝကို
လျှော့ထားနော် နော်နော်၊ ဒါဆို နင်အတော်လေး သက်သာမယ်” အ၀င်ချောစေရန် သူ့လီးကြီးကို ဆီ ဖြင့် ပွတ်လိမ်းသည်။ သူ့လီးထိပ်ကြီးကို သူမ ဖင်ဝက အသာလေးမြိုနေသည်ကို ခံစားကြည့်နေသည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွား နေပြီ။နော်နော်
သည် သူ့ကို ဆွဲ နှိမ့်ချခံရသောကြောင့် ဖင်ထဲသို့ လီးကြီးဝင်လာနေမှန်း အထိတ်တလန့်သိနေရသည်။ “ဖင်ကို မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာကြီးရယ်။ အဖုတ်ထဲပဲ ချပါလားဟင်။
ဘာများထူးလို့လဲ” သူ ကြောက်လန့်စွာအော် သည်။ ဦးဖေခင် သူ့စကားကို အလေးထားမည်ဟု ထင်ပုံရသည်။ ဖင်ဝသို့ ထိုးနေသော လီးကြီးလက်မှ လွတ်ရာလွတ် ကြောင်း ပြောမိသည်။ သူ့လက်များကတော့ ဖင်ထဲသို့ လထစ်ကြီးဝင်သွားအောင် ဆွဲ ချနေသည်။ နော်နော် ရုန်း၍ မရ။ “မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။ အရမ်းနာတယ်” သူမ၏ မျက်ရည်များ တရောသောပါး ကျဆင်းလာသည်။ ဦးဖေခင် သည် နော်နော် ကို ဖင်ဝထဲ ထည့်ခံထားရသည့် အနေအထားတွင် ခဏလေး အနားပေးလိုက်သည်။ သူမသည် ထိုင်တစ်ဝက် ထတစ်ဝက် ဖြစ်နေသည်။ ဖင်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ လီးကြီးနှင့် ထိုးဖြဲခံထားရသည်။ ခုဆိုလျှင် လထစ် ကြီး သာဝင်သေးသည်။ အပြင် ၆ လက်မလောက် ကျန်နေသေးကြောင်း သူမ သိ သည်။ သူသည် ကလေးမ၏ အသားများကို ပွတ်သတ်ပေးနေရင်း အသာ ဆွဲနှိမ့်ချတော့သည်။ ဖင်ထဲရှိအပူငွေ့က လီးကြီးကို နွေး တေးတေး ဖြစ်စေမှုကို ဇိမ်ယူနေသည်။ “ကဲ အတော်လေးဝင်သွားပြီ။ ငါ့လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး ၀င်အောင်ထည့်ရမယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်ထိုင်စမ်း နော်နော်။” တစ်ကိုယ်လုံးကို လှုပ်ခံနေရရင်း နော်နော် ငိုနေသည်။ လက်ဖြင့်
သူ့ကိုယ်လုံးကို ဆွဲချခံရသောအခါ ဖင်ထဲသို့ စို့ ကြီး ထိုးခံရသလို နာကျင်ရသည်။ လီးကြီးပေါ်မှ အကြောများ အဖု အထစ်များကို သူ့ဖင်က သိနေသည်။ သူ့ကို ဆွဲ ချလိုက် မတင်လိုက်လုပ်သည်။ ထို့နောက် ပို နိမ့်အောင် ဆွဲချသည်။ အရေပြားများ ပြဲစုတ်ကုန်သလို ခံစားရသည်။ စိုနေသလို လည်းခံစားရသည်။ ဆီ တွေစိုနေတာလား သူမ၏ သွေးတွေလား သူမသိ။ ဖင်ထဲသို့ နက်နက် စိုက်အောင် ဆွဲချခံရသည့် အခါတိုင်း နော်နော် စူးနေအောင် အော်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူသည် လီးကြီး တစ်ချောင်းလုံး စိုက်ဝင်လျက် ဦးဖေခင်၏ ပေါင်ပေါ်တွင် ထိုင်မိနေကြောင်း သတိထားမိသည်။ “ခဏလေး နေပါအုံး ဆရာကြီးရယ်။ လှုပ်လိုက်တာနဲ့
နာလွန်းလို့ပါ။” ငြိမ် ထိုင်နေရသောအခါ နည်းနည်းသက်သာသည်။ ဖင်ထဲတွင် လီးကြီး တစ်ချောင်း လုံး ၀င်နေသည်ကို မနှစ်မျို့သော်လည်း ဆွဲထုတ်ခံရသည်ထက်တော့ သက်သာပါသေးသည်။ ဦးဖေခင် သည် သူ့လီးကြီးကို နော်နော်၏ ဖင်ခေါင်းတလျှောက် နှိပ် နယ် ပေးနေသလို ခံစားရခြင်းအား ကျေနပ် လျက် ရှိသည်။ ဖင်ဝကြွက်သားများက သူ့လီးအားတွန်းထုတ် ညှစ်ပေးနေသည်။ သူ့လက်များက နော်နော့် နို့တွေကို ပွတ်သတ်နေသည်။ နို့သီးခေါင်းကို ညှစ်ခြင်း၊ ချေပေး လှိမ့်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် နို့သီးများ မာလာအောင် လုပ်သည်။
နော်နော် သည် သူမ၏ အပျိုနို့ နုနု လေးများအား နာကျင်အောင် ညှစ်ခံရသဖြင့် ရုန်းသည်။ ဖင်ထဲသို့ လီးကြီးက ပို၍ ဆောင့်ဝင်လာသည်။ နို့ကနာလိုက် ဖင်က နာလိုက် ဖြစ်နေရသည်။ “ကဲ ငါ့ကို နင့်ဖင်ဝနဲ့ လိုးပေးစမ်း နော်နော်။ ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်လုပ် မလုပ်နိုင်ရင် ကြိမ်လုံး သာ ကြည့်ထားပေတော့” အမိန့်စကား ကြောင့် နော်နော် တွန့်သွားသည်။ သူ့လီးကို သူမ ဖင်ဖြင့် လိုးခိုင်းနေသည်။ အလွန်အမင်းလည်း နာလှသည်။ မလုပ်ပေးပါလျှင် ကြိမ်လုံးစာမိမည်။ ကြိမ်ဖြင့် အဆော်ခံရပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဖင်ချခံရအုံးမည်သာ ဖြစ် နိုင်ပေသည်။ နော်နော် အားယူ၍ တင်ပါးဆုံကို အသာဆွဲတင်သည်။ လီးကြီးသည် အသာလေး လျှောထွက် ကျန်ခဲ့သည်။ ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ
ဖင်ထဲမှာ ဟာသွားသည်။ ဖင်ဝ ကြွက်သားက လဒစ်ကြီးကို ညှစ်ထားသည် အထိ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဦးဖေခင်၏ လက်များ သူ့ တင်ပါးဆုံပေါ် ပွတ်သောအခါ သူ့ကို ပြန်ထိုင်စေချင်မှန်း သိလာရသည်။ သူမ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထိုင်ချရသည်။ သူက တော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း သွက်သွက် လုပ်စေချင်နေပုံရသည်။ဦးဖေခင် သည် နော်နော် ကို ဆွဲချလိုက်သည်။ သူ့ လီးကြီးသည် ဖင်ထဲသို့ တိုးဝင်သွားသည်နှင့်အမျှ ညှစ်ထားခြင်း ခံရပြန်သည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲချခြင်းဖြင့် သူ့ လီးကို ပိုမာတောင်လာအောင်လုပ်သည်။ နော်နော် ပါးစပ်က အော် ညည်းသံ ထွက်လာသော်လည်း အပျိုစင်ဖင်ကို လိုးနေရသည့်အတွက် ပို၍ ထန်လာသည်။ လီးကြီးတစ်ချောင်း လုံး အရသာရှိရှိ ၀င်နေအောင် ဆွဲဆောင့်ချလိုက်ပြီးမှ “ပြန်ထ၊ ငါ့လီးကို ဖင်ထဲက ထုတ်ပလိုက်စမ်း” အမိန့်ပေးပြန်သည်။ နော်နော် သည် အသားကို စူးထိုးခွဲသကဲ့သို့ လီးကြီး ၀င်ထွက်နေအောင် တွန်းတင် တွန်းချ ခံနေရသည်။ သူ့
ဖင်သည် ရက်စက်သောလီးကြီး၏ အကြမ်းပတမ်း လိုးသွင်းခြင်းကိုခံစားရသည်။ လက်ဖြင့် အတွန်း အဆွဲ က အလိုးကို ပို၍ မြန်ဆန်လာစေသည်နှင့်အမျှ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်က တွန်းကန်ထုတ်နေသည်။ လီးအသွင်းက ပို၍ နက်ရှိုင်းလာပြီး သူ့ အူလမ်းကြောင်း ကို ထိုးခွဲလာသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူ့ကိုယ်တွင်းသို့ အနက်ဆုံးဖြစ်အောင် ဖိချခံရပြီးသောအခါ လီးကြီး ၏ ဆတ်ကနဲ တုန်ခါမှုနှင့်အတူ လရေများ ထိုးသွင်းခံလိုက်ရသည်။ သူမ ငိုသည်။ သူ့ဖင် သည် လရေထုတ်စရာနေရာတစ်ခု
ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ သူ၏ ဖင်ပေါက်သည် အဖုတ်ကဲ့သို့ပင် ဦးဖေခင်၏ လီးကြီးအား ဂွင်းတိုက် ပေးစရာ ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်ရခြင်းကို မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်။ ဖင်ထဲသို့ ပူနွေးသော လရေများ ဆက် တိုက် ထပ်ဝင်လာသည်။ ဦးဖေခင် သည် နော်နော့် ဖင်အပြည့် လရေများ ထုတ်ပြီးသွားသောအခါ သူ့လီးကြီးကို ညှစ်ပေးသလိုဖြစ်နေသော လှပသည့် ဖင်ဝလေးကို ကြည့်နေသည်။ ခွေကျသွားသော နော်နော်ကိုကြည့်ရင်း ပျော့ကျလာနေသော သူ့လီးကြီးကို လျှော့လိုက်ကာ “ငါ့လီးကို ထုတ်လိုက်တော့” ဟု အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ သူ့ပေါင်ပေါ်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထသွားစဉ် ဖင်ထဲမှ လီးကြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာကာ နီရဲ ကာ
ဟောင်းလောင်းပေါက်ဖြစ်ကျန်ခဲ့သော ဖင်ဝ လေးကို သေချာကြည့် နေသည်။ ဖင်ဝမှ လရေများ ပွက်ကနဲ ထွက်ကျလာသည်ကို မြင်ရသည်။ သူမကို အသာတွန်းဖယ်လိုက် ပြီး “အ၀တ်တွေပြန်ဝတ်ပြီး အခန်းပြန်တော့ နော်နော်၊ နောက် အတန်းထဲမှာ ကောင်းကောင်းနေ၊ မှတ်ထား” ဟု ပြောကာ ရုံးခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်။ အခန်းထဲတွင်
ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် နော်နော်သည် မျက်ရည်များက ကျဆင်းလျက်၊ လရေများက ဖင်ဝမှ
သည် ပေါင်များတလျှောက် စီးဆင်းလျက် ကျန်ခဲ့တော့သည်။
အပိုင်း (၂) နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင် ထွေးငယ် တစ်ယောက် အကြီးအကျယ် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ တစ်ညလုံး အိပ်၍ မရ၊ သူငယ်ချင်းများကို နှုတ်ဆက်သည်။ သူ့အနာဂတ်ကို တွေးတောနေသည်။ မိဘမဲ့ကျောင်း၏ လုံခြုံသောအရိပ်မှ ထွက်ရတော့မည်ကို လည်း ကြောက်ရွံ့သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း အားမာန်တွေက ရှိနေသည်။ သူသည် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ရတော့မည်ဟု ယုံကြည်နေသည်။ ဦးဖေခင် သည် သူ့ဘ၀အတွက် မျှော်လင့်သလို ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးခဲ့သည်ဟုထင်သည်။ သူလုပ်ရမည်မှာ “သခင်ကြီးဒေးဗစ်” လိုချင်တာ ပြည့်စုံဖို့သာဖြစ်မည်။ သူ့အနေနှင့် သခင်ကြီးဟု ခေါ်ရမည်ကတော့ အနည်းငယ် ထူးဆန်းနေသည်။ သို့ရာတွင် သူရမည့် အခွင့်အရေးနှင့် စာလျှင် စာဖွဲ့နေစရာမရှိ၊ ထွေးငယ် သည် သူမ၏ ရှိမဲ့စုမဲ့လေးများကို ထုတ်ပိုးကာ အကြိုကိုစောင့်နေသည်။ ခန်းနားသော အမဲရောင် ကားကြီးတစ်စီး သည် သူ့ကို ခေါ်ရန်ရောက်လာခဲ့သည်။ သူသည် ကားများအကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ဈေးကြီးသော ကားကြီးများအကြောင်း နားမလည်သော်လည်း အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှန်းတော့ သိသည်။ ကားတွင်းသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့် သူမ၏ မျက်နှာပေါ်တွင် တောက်ပသောအရိပ်များ ပေါ်လာသည်။ သူ့ဘ၀သစ် စခဲ့လေပြီ။ရာဂျူး သည် ထွေးငယ် ကို တံခါးဖွင့်ပေးရင်းပြုံးနေသည်။ ကားထဲသို့ငုံ့ဝင်စဉ် သူ့ကို ကျောခိုင်းသွားသော ထမီတို အောက်မှ ဖူးထွက်လာသော တင်ပါးဆုံ လေးကို ကြည့်သည်။
သူသည် ဒေးဗစ်၏ ကာမဆန္ဒနှင့် ဒေးဗစ်တို့ အသိုင်းအ၀န်း၏ အရသာခံစားမှု အမျိုးမျိုးကို ကောင်းကောင်းသိပေသည်။ သူသည် ဒေးဗစ်တို့ သူငယ်ချင်းများ၏ ပါတီအပြီး ညသန်းခေါင်များ တွင် အမျိုးသမီးတို့ကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးရတတ်သည်။ ယင်းတို့သည် အားလုံးကို အကြိမ်ကြိမ် အသုံးတော် ခံပြီး ပြန်လာရသည်သာဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ တွင် အကြမ်းပတမ်းလုပ်ခံလာရသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့ ကာလတွင် ငွေသည်
အပျိုစင်ဖြစ်မှုနှင့်တကွ အားလုံးကို ၀ယ်ယူနိုင်နေလေပြီ။ ယခုတစ်ကြိမ်သည် ဒေးဗစ်၏ အိမ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် အချိန်ပြည့်အိမ်ဖော်တစ်ယောက် ထားရှိမှု ဖြစ်သည်။ အရင်က အိမ်ဖော်မှာ တစ်ပတ်သာ ခံခဲ့သည်။ ယခင်ကမူ ဒေးဗစ်သည် ညအလုပ်လုပ်ပေးမည့် အချိန်ပိုင်း အိမ်ဖော်များ သုံးစွဲခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့်မှာ အ်ိမ်ကို စောင့်ရှောက်နိုင်သည့် အတန်ရင့်ကျက်သူများသာဖြစ်သည်။ ထွေးငယ် ကမူ တစ်မူ ထူးနေသည်။ ဒေးဗစ် က သူ့သူငယ်ချင်းများအား သူ့အတွက် အထူး လိင်ကျွန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာမည့် ကိုယ်ပိုင် အိမ်ဖော်တစ်ယောက် ခေါ် ထားတော့မည့်အကြောင်း ပြောနေသံကို သူကြားခဲ့ဘူးသည်။ သူငယ်ချင်းများက ၀ိုင်းအားပေးရင်း သူတို့ကိုလည်း အမြည်းပေးပါရန် တောင်းသည်ကို ကြားခဲ့ရသည်။ ထွေးငယ် ပေးမည့် အရသာ များကို သူလည်း တစ်ယောက် ရှယ်ရာ ပါရလေမည်လားဟု စိတ်ကူးယဉ်ရင်း ရာဂျူး လီးကြီးတောင်လာသည်။ သူသည် ထွေးငယ် အတွက်တော့ အနည်းငယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလိုရှိသည်။ သို့သော် ထွေးငယ်တွင် ဒီအလုပ်မလုပ်ဖို့ ငြင်းနိုင်သည့်အခွင့်အရေး ရှိသဖြင့် ထူးထူးခြားခြား စာနာပေးစရာတော့မရှိ။ သူမနေအဖြင့် ငွေကိုယူပြီး ဒေးဗစ်လိုတာပေးမလား၊ သူ့သိက္ခာကို ပဲ ထိန်းသိမ်းနေမလား ရွေးနိုင်သဖြင့် ကံဆိုးလှသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ ဒေးဗစ် သည် အလုပ်ရှင်ကြီး တစ်ဦး၏ ဟန်ပန်အပြည့်ဖြင့် ထွေးငယ် ရောက်လာသည်ကို တံခါးဝမှ ဆီးကြိုသည်။ “ညည်းနေရမယ့်အခန်း လိုက်ပြပေးမယ်။ ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့။”
ခန်းမလည်ရှိ ခန်းနားသောလှေခါးကြီးမှ အပေါ်ထပ်သို့ တက်ခဲ့ကြသည်။ “တစ်ခန်းကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ အိပ်ခန်းအားလုံးက ဒီအထပ်မှာရှိတယ်။ နောက်ထပ် အိပ်ခန်းတစ်ခန်းက တော့ အောက်ထပ်က ငါ့ရဲ့စာကြည့်ခန်းဘေးမှာ၊ တစ်ခါတလေ အလုပ်လုပ်တာ ညဉ့်နက်သွားရင် ငါ အဲဒီမှာ အိပ်တတ်တယ်။ ညည်းအခန်းကတော့ ဒီခန်းမအဆုံးမှာ” ဒေးဗစ် သည် ခန်းမအဆုံးရှိ တံခါးတစ်ချပ်ကိုဖွင့်လိုက်သည် “ငါ့အခန်းက ဟိုဖက် အပေါက်ပဲ။ ညည်းအခန်း ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်က အခန်းတွေက ဧည့်သည် နေတဲ့ အခန်း တွေ၊ တစ်ခါတလေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ငါ့ အိမ်မှာ ဧည့်ခံပွဲလုပ်ရင် သူတို့ ဒီအိမ်မှာ ပဲ အိပ်ကြလေ့ရှိတယ်။” ထွေးငယ် သည် ဤမျှ ခန်းနားသော အခန်းမျိုး ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူး။ သူ့မိဘမဲ့ကျောင်းရှိ အဆောင် တစ်ခု နီးပါးမျှ ကျယ်သည်။ အခန်းတစ်ထောင့်တွင် ကုတင်ကြီးတစ်လုံးရှိသည်။ ကုတင်ခြေထောက်များသည် အကြီးဆုံးနေရာ၌ အချင်း ၃ လက်မခန့်တုတ်ပြီး သိမ်သွားကာ အဖျားတွင် လက်ချောင်းများသဖွယ် ဖြာထွက်သွားသည်။ ခေါင်းရင်း တွင် နာနတ်သီးပုံ ပန်းပုလက်ရာများ နှင့် ဖုလုံးများရှိသည်။ မဟော်ဂနီရောင်သည် အခန်း တွင်းရှိ ပရိဘောဂများနှင့် လိုက်ဖက် လျက်ရှိသည်။ ခန်းနားသော ဆက်တီကြီးလည်းရှိသည်။ အခန်းစွန်တွင် ရေချိုးခန်း တံခါးပေါက်ရှိသည်။ ခြေထောက်များပါသော သတ္တု ရေချိုးကန်သည် ရေချိုးခန်းအတွင်းတွင်မရှိပဲ အိပ်ခန်းတွင်း ထိုင်ခုံအနီးတွင် ရောက်နေသည်မှာ
ထူးခြားသည်။ ထွေးငယ် အတွက် အဆန်းဖြစ်နေသော်လည်း မိဘမဲ့ကျောင်းတွင် နေခဲ့ရသော ဖတ်ဘူးသည့် စာအုပ်များထဲက လောက်သာ သိသော သူမအတွက် ဘာမှ ထူးပြီး နားမလည်ပေ။ ဒေးဗစ် သည် အခန်းတွင်းရှိ မှန်ချပ်ကြီးများစွာကို ပြသည်။ နံရံတိုင်းတွင် မှန်ချပ်ကြီးများရှိပြီး ယင်းတို့သည် အိပ်ယာ နှင့် ရေးချိုးကန်တို့ ကို အရိပ်ထိုးထားကာ မျက်နှာကျက်ပေါ်တွင် မှန်အကြီးကြီး ရှိသည်။ “ဒီအခန်းက ငါ့အမေ မသေခင်က နေခဲ့တဲ့အခန်းပဲ။ သူက အိုမင်းတဲ့အချိန်ထိအောင် လှတုန်းပဲ။ သူ့ကိုသူကြည့်ချင်လို့ ဒီမှန်တွေကို တပ်ထားခဲ့တာ။ ငါက အမေကို သတိရတဲ့အနေနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲထားခဲ့တာပဲ။ ညည်းလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည့်ချင်တိုင်း ကြည့်လို့ရတာပေါ့။ ဟုတ်လား” ထွေးငယ် လှည့်ပတ်ကြည့်သည်။ သူ့အရိပ်ကို နံရံများတွင် မြင်ရသည်။ သူ့ကိုယ်သူ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟု မထင်သည့် အတွက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစား ရအုံးမည်။ မိဘမဲ့ဘ၀ ကကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မွေးနိုင်ခဲ့သည်လည်းမဟုတ်။ သို့သော် -- “ဟုတ်ကဲ့ပါ…… သခင်ကြီးဒေးဗစ်” စကားကို အမြန်ဖြည့်ပြောလိုက်သည်။“
ဘီရိုထဲမှာ ညည်းနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေထည့်ထားပေးတယ်။ ငါပေးတဲ့ အ၀တ်တွေကို ပဲ ၀တ်ရမယ်။ ဘာမှ ချုပ်တာ ပြင်တာမျုိုးလည်း မလုပ်ရဘူး ။ ငါ့အလုပ်သမား အနေနဲ့ ငါ စိတ်ကူးထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်းပဲနေရမယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွန့်တက်တာ မကြားချင်ဘူးနော်။ ငါ ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို မကြိုက်ရင် ညည်းအနေနဲ့ အချိန်မရွေး အလုပ်ထွက်လို့ရတယ်။ ကြားလား” ဒေးဗစ် က ဘီရိုကိုဖွင့်ပြသည်။ချိတ်ဆွဲထားသော ဘလောက်စ် အင်္ကျီများနှင့် စကပ်များကို တစ်ဖက်တွင်တွေ့ရသည်။ အောက်ခြေတွင် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များ၊ အတော်များများက ခုံအမြင့်ကြီးများနှင့်။ ဒေးဗစ်က အံဆွဲ နှစ်ခု ကို ဆွဲထုတ်ပြသည်။ “အောက်ခံအ၀တ်တွေက ဒီမှာ၊ ပိုး အတွင်းခံတွေနဲ့ ပိုးခြေအိပ်တွေ ၀တ်ရမယ်။ ည၀တ်
ဆိုရင်လည်း ပိုးချုံထည်နဲ့ ည၀တ်ထည်တွေပဲ” ထွေးငယ် သည် ဤမျှလှပသော ၀တ်စုံများကို တစ်ခါမျှမမြင်ဘူး။ အတန်ကြမ်းသော ပိတ်စများသာ ၀တ်ခဲ့ဘူးသည် မဟုတ်ပါလော။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့် သခင်ကြီး သဘောအတိုင်း ၀တ်ပါ့မယ်။ အရမ်းလှတဲ့ အ၀တ်တွေပါပဲ ရှင်။” “အေး။ ညည်းကို နာရီဝက်အချိန်ပေးမယ်။ အ၀တ်အစားလဲပြီး
အောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တော့။ အိမ်ရဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ တာဝန်တွေ ငါရှင်းပြမယ်။ အချိန်တိကျအောင်လုပ်၊ ပြောတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျ ရိုရိုသေသေ လိုက်နာမယ် မဟုတ်လား” ဒေးဗစ် ပြောပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားသည်။ တံခါးကို ပြန်ပိတ်ပေးသွားသည်။ ထွေးငယ် သည် သူ့အိပ်ကို အခန်းထောင့်တွင် ချထားလိုက်သည်။ ငါ ဒါတွေ မလိုတော့ပါဘူးလေ ဟုစဉ်းစားသည်။ ဘီရိုနားသွားကာ အဖြူရောင်အင်္ကျီနှင့် စကပ် အနက်ရောင်တစ်စုံကို ထုတ်ူးသည်။ အံဆွဲထဲတွင် ကြိုးပျောက် အဖြူရောင်ပိုးဘော်လီ နှင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကိုတွေ့ရသည်။ ယင်းနှစ်ထည်မှာ အစွန်းတွင် အဆက်ရှိသည်။ ပိုးခြေအိတ် တစ်စုံကိုလည်း ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ခါးပတ်ကလည်း အဆင်သင့်။ ဘီရိုထဲတွင် အမြင့်ဆုံးမဟုတ် သော်လည်း တစ်ခါမှ မ၀တ်ဘူးသည့် အနက်ရောင် ထောက်မြင့်ဖိနပ် ကိုပါ ထုတ်ယူသည်။ အ၀တ်များကို
ချွတ်ကာ အိတ်ထဲသို့ ပစ်ထည့်သည်။ နက်ဖြန်ဆိုလျှင် ယင်း အထုတ်ကို လွှင့်ပစ်ရပေတော့ မည်။ မှန်နံရံတွင်ကြည့်သည်။ သူ့ကိုယ်ကို ခြုံလွှမ်းထားသော ဆံပင်ညိုညိုလေးကို စစ်ဆေးသည်။ ထွေးငယ် အတော်တော့ ပိန်သည်။ အထူးသဖြင့်တော့ ရင်သားတွေက သေးသေးငယ်ငယ်။နို့သီးညိုညိုများသည် လတ်သော သူ့အသားအရေ တွင် ထင်းလျှက်၊ ခြေထောက်များကြားမှ အညိုရောင် စောက်မွှေးများကလည်း ၀င်းပလျှက်ရှိ၏။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကိုယူဝတ်သည်။ တိုင်းထားသည့်ပမာ အတိအကျ တန်နေသည်။ ထို့နောက် ဘော်လီကြိုးပျောက်ကို ၀တ်သည်။ အ၀တ်များကိုကြည့်ရင်းပင်
သူ့နို့သီးခေါင်းလေးများ မာတင်း နေသည်။ ခါးပတ်ပတ်ပီး ပိုးခြေအိတ်တို့ကို ဆင်သည်။ နောက် မှန်ကို ကြည့်ပြန်သည်။ အံ့သြစရာပင် သူသည် အတော်လေး sexy ဖြစ်နေသည်။ နို့သီးများသည် ချွန်လျက်။ အကျီ င်္ ကိုဝတ်သည်။ နောက်မှ စကတ်ကိုစွတ်သည်။ အတော်လေးတော့ကြပ်သည်။ တင်သားများပေါ်ထင်လှသည်။ ပြီး ဒေါက်ဖိနပ်ကို စွတ်သည်။ မှန်ကြည့်ပြန်တော့ သူ့ကိုသူ မယုံချင်။ ခုတော့ သူမသည် မိဘမဲ့ကလေးမဟုတ်တော့။ ကာမ ဆွဲဆောင်မှုပြည့်သည့် မိန်းမကြီးဖြစ်နေလေပြီ။ ထွေးငယ် တစ်ယောက် စာကြည့်ခန်းသို့ဆင်းခဲ့သည်။ ၄ လက်မဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များသည်
သူ့နှင့် နေသားမကျသေး။ မည်သို့ဖြစ်စေ ဒေးဗစ်၏ စာကြည့်ခန်းလောက်ရောက်သောအခါ
သူအတော် အားရနေပြီ။ အခန်းပြင်တွင် ခဏရပ်ပြီး အ၀တ်များကို သတ်ချ၊ စစ်ဆေးသည်။ ငါကတော့ လမ်းပေါ်မရောက်တာ သေချာပြီ ဟု တွေးမိသည်။ သက်ပြင်းချရင်း
တံခါးကို အသာခေါက်သည်။ “၀င်ခဲ့လေ။ ထွေးငယ်,” ဒေးဗစ် က ထူးသည်။ စာကြည့်ခန်း ကား စာကြည့်တိုက်တစ်ခုမျှ ကြီးမားသည်။ မဟောဂနီ ရောင် စားပွဲ ကြီးသည် မိဘမဲ့ကျောင်းက ညစာစားပွဲထက် ကြီးသည်။ နောက်တွင် အနက်ရောင် သားရေဖုံး ထိုင်ခုံရှိ သည်။ မီးလင်းဖိုနားတွင် ပက်လက်ကုလားထိုင်ကြီးရှိသည်။
မီးတောက် က ၀င့်ထည်လျက် ပြင်ပလေအေးကို တွန်း ထုတ်နေသည်။ နံရံတစ်ဖက်တွင် စာအုပ်စင်။ ကြမ်းပြင်မှ မျက်နှာကျက်ထိ စာအုပ်တွေမို့ စာအုပ်နံရံ ဟုသာပြောရ မည်။ စာအုပ်တက်ယူရန် လှေခါး နှစ်စင်း ပါတွေ့ရသည်။ ဒေးဗစ် သည် ခုံတစ်လုံးတွင်ထိုင်လျက် သူဝင်လာသော တံခါး ကိုကြည့်နေသည်။ သူမ ၀တ်ဆင်ထားပုံကို သဘောကျနေဟန်ပြုံးသည်။ “လာစမ်း အနားကို။ ၀တ်ထားတာ ကြည့်ရအောင်” မီးလင်းဖိုအနားမှဖြတ်ကာ သူ့ထံသွားရသည်။ ဒေးဗစ် က လျှောက် လာပုံကို ကြည့်နေသည်။ စကပ်သည် သူ့တင်ပါးဆုံတွင် တိတိကျကျ ဖြစ်နေသည်။ လမ်းလျှောက်သောအခါ အနည်းငယ် လှုပ်ခါသည်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကြောင့် အရပ်က ပိုမြင့်လာသည်။ သူသည် ခါးပတ်နှင့် ခြေအိတ်သာ ၀တ်ဆင် ထားသော ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်ပေါ်မှ မိန်းကလေးအဖြစ်မြင်ကြည့်နိုင်နေသည်။ မကြာခင်တော့ သူမသည် သူ့ကို ပျော်တော်ဆက်ရပေတော့မည်။ ပိုးအင်္ကျီလေးကိုသဘောကျနေသည်။ နို့ကလေးတွေသည် သိပ်မကြီးသော်လည်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကိုမြင်နေရသည်။ “ကဲ လှည့်ပြစမ်း။ အဲ
ဟုတ်ပြီ ရပ်တော့” သူမ ဖင်ကို ကြည့်သည်။ စကပ်သည် တင်သားများကို ချုပ်စည်းထားသည်။ ဒေးဗစ် သည် ဖင်ကြိုက်သူ။ မိန်းမ များတွင် ဖင်ထက် စိတ်ဝင်စား စရာ မရှိဟု ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သူမကို ကျောခိုင်းနေစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထွေးငယ် သည် သူမ မီးလင်းဖိုဆီလျှောက်လာစဉ်ကပင် ဒေးဗစ်၏ မျက်လုံးများကို သတိထားကြည့်နေသည်။ သူမ အ၀တ်များကို ချွတ်ကြည့်နေသည့် မျက်လုံးများကြောင့် အနည်းငယ် ကြောက်ရွံ့စိတ်လည်းဝင်လာသည်။ သူ စိတ်ကူး ယဉ်နေတာ ဖြစ်မှာပါဟုလည်း ဖြေ တွေး သည်။ ငါ့အလုပ်ငါလုပ်ရမှာပဲလေဟု စဉ်းစားသည်။ စုန်ချည်ဆန်ချည် ကြည့် နေခြင်းကို သူနားလည်သည်။ နောက်လှည့်ခိုင်းသောအခါ သူ့အ၀တ်အစား ပုံကျမကျ ကြည့်ခြင်းဟု သာ ထင်သည်။ ဆန်းတော့ဆန်းသည်။ ဒေးဗစ် ကို မမြင်ရတော့လည်း ငေးကြည့်နေမှန်းတော့ ခံစားမိသည်။ အကြာကြီး ရပ်ခိုင်းထား သောအခါ မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်သည်။ ပြန်လှည့် ရသောအခါ သူမမျက်နှာ ရှက်သွေးဖြင့် ရဲ လာသည်။ “အ၀တ်အစားတွေ နဲ့ တန်သားပဲ- ထွေးငယ်၊ နေ့တိုင်း ဒီလိုပုံဖြစ်ပါစေပေါ့။ ငါ ညည်းကို အ၀တ်အစား စာရင်း တစ်ခု လုပ်ပေးထားမယ်။ ပေးထားတဲ့အတိုင်း ချွင်းချက်မရှိ ၀တ်ရမယ်။ ဒီအတွက် အမှားမခံဘူးနော်။ ငါပြောတဲ့အတိုင်း မလုပ်တဲ့နေ့ အလုပ်ပြုတ်ပြီသာမှတ်ထားပေါ့။ မင်း အခုရထားတဲ့
ရာထူးအတွက် တန်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ အများကြီး ရှိတယ်၊ သူတို့ တော်တော်များများဟာ မင်းထက် ပိုလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိကြတယ်။ ငါပြောတာ နားလည်တယ် မဟုတ်လား ထွေးငယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါ” သူမ လက်ခံပါသည်။ သူမတွင် ထူးထူးခြားခြား ဆွဲဆောင်မှု မရှိလှပေ။ ဒေးဗစ်၏ ဓန နှင့်ဆိုလျှင် ကြိုက် ရာ မိန်းကလေးကို ရနိုင်ပေးသည်။ သူမအပေါ် စိတ်နှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် သာကြိုးစားဖို့ပဲရှိသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်”. “မင်းရဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး
စည်းကမ်းတွေ ပြောထားမယ်။ ပထမအချက်ကတော့ ဒါဟာ ငါ့ရဲ့အိမ်ပဲ။ မင်းက ဒီမှာ ရောက်နေတယ်။ မင်းက မိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ငါ့အိမ်ပဲ။ ငါ့သဘောအတိုင်းပဲ ရှိရမယ်။ ငါ့မှာ မိတ်ဆွေတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ယောက်ျားတွေ၊ မိန်းမတွေ အစုံပဲ။ ငါတို့တွေ ဒီမှာ ပါတီပွဲတွေ ခဏခဏလုပ်ကြ တယ်။ အဲဒီအခါမှာ မင်းက စီစဉ်ပြင်ဆင်ပေးရလိမ့်မယ်။ မင်းအနေနဲ့ မမြင်ဘူး မတွေ့ဘူးတာတွေ၊ အထူးအဆန်း တွေ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို မင်းအနေနဲ့ ကြိုက်ဖို့၊ မကြိုက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ဝေဖန်စရာလည်း မလိုဘူး။ မင်းတာဝန်က ငါတို့ကို လုပ်ကိုင်ပေးဖို့ပဲ။ ဒီအခါမှာ မင်းက အံ့သြတဲ့ပုံ၊ မကြိုက်တဲ့ပုံ။
အပြစ်တင်ချင်တဲ့ပုံ ပြတာနဲ့ မင်းအလုပ် ပြုတ် ပြီ ဆိုတာ သေချာမှတ်ထားပါ။ ငါတစ်ယောက်ထဲနေတဲ့အခါမှာလည်း ငါ က မင်း မမြင်ဘူးတဲ့ အ၀တ်အစား ၀တ်ရင် ၀တ်မယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ်တုံးလုံးပဲ နေနေ ခုနက အတိုင်းပဲ။ မင်း ဖက်က ငါမကြိုက်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုး မလုပ်မိစေနဲ့” ဒေးဗစ် က ပြောရင်း သူ့မျက်နှာတွင် မကျေနပ်မှု တစ်ခုခု ပြမပြ ကြည့်နေသည်။ ဘာမှ မတုန့်ပြန်တော့မှ
ဆက်ပြောသည်။ “ငါ့ အိမ်သားအားလုံး အတွက် စည်းကမ်းက တင်းကြပ်တယ်။ ၀န်ထမ်းအားလုံးဟာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ရ မယ်။ နမော်နမဲ့တွေ ငါ မကြိုက်ဘူး။ အမှားတစ်ခုခု ကျူးလွန်တာနဲ့ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ အဲဒီအခါမှာ အလုပ်ထွက်ရင် ထွက်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပေးခံရတယ်။ ဒါကလည်း နောက်တစ်ခါ အပြစ်မလုပ်မိအောင် သတိပေးတဲ့ သဘောပဲ” ပြောရင်း ထွေးငယ်မျက်နှာတွင် အနည်းငယ် ကြောက်လန့်ရိပ် ကို တွေ့သည်။ သူမအနေဖြင့် အပြစ် ပေးခံရမှု ဆိုသည်မှာ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ မစဉ်းစားတတ်။ ဒေးဗစ်သဘောကျနေသည်။ သူမတော့ ခဏခဏ သူမကြိုက်တာလုပ်မိပြီး ဒဏ်ပေးတော့ ခံရတော့ မှာပဲ ဟု စဉ်းစားနေသည်။ သူ ကတော့ မိန်းကလေးရဲ့တင်ပါးကို ရိုက်ရသည် အထိ စောင့်မည်မဟုတ်။ “မင်းအနေနဲ့ ငါ လိုအပ်ရင် တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်။ တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီ အသင့်ရှိရမယ်။ သင့်တော်တယ်ထင်တဲ့ အချိန် တွေ မင်း အနားယူလို့ရမယ်။ အားလပ်ရက်မှာလည်း ငါ့ရဲ့ လက်ထောက် အဖြစ်နေရမှာပဲ။ မင်း ဒီမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွက် ခံစားခွင့်တွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကတော့ ငါက အမြဲတမ်း ခိုင်းစေ နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေဆို ငါ အိမ်မှာ မနေပဲ အကြာကြီး သွားနေတတ်တယ်။ မင်း အတွက်
အေးအေးဆေးဆေး နားစရာ အချိန်ရမယ်။ အိမ်အလုပ်မရှိတဲ့အချိန် ငါ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်လို့ရမယ်။ အမြင်လည်း ပိုကျယ်လာတာပေါ့။” သူ့တွင် စာအုပ်များစွာ ရှိသည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်တွေ လည်း အတော်များသည်။ သူမကို ဒါတွေ ဖတ်စေချင်သည်။ သို့မှသာ သူနှင့် သူ့မိတ်ဆွေများ၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဖို့ အတတ်ပညာ စုံမည် မဟုတ်ပါလား။“ငါ့ မိတ်ဆွေ တွေ ပြောစကားကိုလည်း နာခံရမယ်။ မင်းအနေနဲ့ သူတို့လည်း ငါလိုပဲ။ မင်းသခင် တွေလို့ မှတ်ထား ရမယ်။ တစ်ခုခု ပြဿနာလုပ်မိတာနဲ့ အပြစ်ပေးခံရမယ် ဆိုတာ မှတ်ထားပါ” ပြောပြီး သူမ ဘယ်လို သဘောထား လဲ စိုက်ကြည့်ပြန်သည်။ သူ့မိတ်ဆွေများသည် ဆံပင်ညိုညိုလေးကို စိတ်လှုပ်ရှားကြပေလိမ့်မည်။ သူတို့သည် စောက်မွှေး နီနီလေးကို သဘောကျမည်မှာသေချာပေသည်။ထွေးငယ် သည် ဒေးဗစ် ၏ စည်းကမ်းများကို စဉ်းစားနေသည်။ မဆိုးလှပါ။ သူမသည် အလုပ်အကိုင် မညံ့။ အမှား များများ ပြုမိမည်ဟုလည်း မထင်။ မှားလို့ အပြစ်ပေးခံရလည်း သူ့အတွက် သိပ်နစ်နာစရာ ရှိမည်ဟု မထင်မိပေ။ ဒေးဗစ် ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်နေတတ်သည် ဆိုသည်ကို တော့ နည်းနည်း ပူသည်။ သူသည် ယောကျာ်း ကိုယ်တုံးလုံး ကို မိဘမဲ့ကျောင်းတုန်းက အတန်းကြီး သော အမကြီး များက ဖုံးဖုံးဖိဖိ ပြဘူးသည့် ဓာတ်ပုံ တချို့ကလွဲ၍ မမြင်ဘူး။ သို့သော် ဒေးဗစ်၏ အိမ်ဖြစ်သဖြင့် သူနေချင်သလိုနေ နိုင်သည်ကို လက်ခံသည်။ “ဟုတ်ကဲ့။ သခင်ကြီးဒေးဗစ်။ ကျွန်မ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာပါ့မယ်။
ကျွန်မကို သဘောကျရပါစေ့မယ်” သူမ ပြုံး၍ပြောသည်။ ဒေးဗစ်က သူမနောက်ကွယ် တွင်
ပြုံးနေသည်။ “ကဲ ခုတော့ မင်းတာဝန်က ငါ့အခန်း၊ ဒီ စာကြည့်ခန်းနဲ့ မင်း နေတဲ့အ ခန်းတွေ ကို ရှင်းဖို့ပဲ။ တစ်ခါတလေ တစ်အိမ်လုံး ရှုင်းတဲ့အခါ ၀ိုင်း ကူရမယ်။ အစားအသောက်ကိုတော့ မီးဖို ၀န်ထမ်းတွေက လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့က တခြား အလုပ်သမားတွေလိုပဲ ည ၇ နာရီကိုပြန်တယ်။ ပါတီပွဲရှိရင်သာ နေတာ။ မင်းက ငါ့ကိုယ်စား သူတို့ကို အုပ်ချုပ် တဲ့ သဘော လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ ငါခိုင်းတာ ပြီးရင် ကျန်တဲ့အချိန်နားနေပေါ့။ ညဖက် ငါ နားတဲ့အချိန်မှာ ရေချိုးတယ်။ အဲဒီအတွက် တော့ ည ၉ နာရီတိုင်းမှာ ရေချိုးဖို့ အဆင်သင့်လုပ်ပေးထားရမယ်။ မလိုတဲ့နေ့တွေဆို ငါကြိုပြောမယ်။ ဒါက နေ့တိုင်း ပုံမှန်ပဲ။ ငါ့အခန်းက ခေါင်းလောင်းက မင်းအခန်းနဲ့ တခြား အခန်းအားလုံးကို ဆက်ထားတယ်။ အသံကြား တာနဲ့ ချက်ခြင်းငါ့ဆီလာရမယ်။ ဒါ အရေးကြီးတယ်။ မင်း တာဝန်က ငါ့ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား” ထွေးငယ် ခေါင်းညိမ့်သည်။ “ဟုတ်ကဲ့။ သခင်ကြီးဒေးဗစ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်မက အအိပ်လည်း ဆတ်ပါတယ်။ သခင်ကြီး လိုတဲ့အချိန် ပြုစုပေးပါမယ်။” …ဒါပေါ့။ မင်းငါ့ကိုကောင်းကောင်းပြုစုရမှာပေါ့ ထွေးငယ်၊ မင်း ငါ့ကို လိုချင်တာဘာမဆိုပေးရမယ်။ မင်းရဲ့ အပျိုရည်ကို လည်းပေးရမှာပေါ့။… ဒေးဗစ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရေရွတ်နေသည်။ “ကဲ သွားနိုင်ပြီ။ ရာဂျူး က မင်းကို အိမ်တစ်ပတ်
လိုက်ပြလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာ ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကို ..” သူ လက်ကိုဝှေ့ယမ်းပြလိုက်သည်။ ထွေးငယ် အခန်းထဲက ထွက်သွားသည်ကို ကြည့်နေသည်။ မြင့်သော ဒေါက်ဖိနပ်ပေါ်တွင် ထွေးငယ်၏ ခြေလှမ်းတိုင်း၌ လှုပ်ခါနေသော ဖင်များ ကိုကြည့်ရင်း လီးတောင်လျက်ရှိသည်။
ရာဂျူး သည် စာကြည့်ခန်းအပြင်တွင် စောင့်နေသည်။ “အဆင်ပြေလား ထွေးငယ်” “အင်း။ ကျွန်မ ရှင်နဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရမလားရာဂျူး” “ရတာပေါ့ ထွေးငယ်၊ ငါဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောပါဘူးဟ” “ဒီနေ့
ပြောတာ နည်းနည်းဆန်းတယ်ရှင့်။ သူက ကျွန်မ မှားတာရှိရင် အပြစ်ပေးမယ်တဲ့။ နောက် သူနဲ့ သူ့ မိတ်ဆွေ တွေနဲ့ ပါတီပွဲတွေ အကြောင်းလည်းပြောတယ်။ ဘာများ ကျွန်မ စိတ်ပူစရာရှိလဲ ဟင်” “အင်း။ ထွေးငယ်။ ငါ အမှန်အတိုင်းပြောပါ့မယ်။ ဒေးဗစ် က အင်မတန်ချမ်းသာတယ်။ ထူးလည်း ထူးခြားတယ်။ သူဌေး တွေဟာ အဲလိုပဲထင်ပါတယ်။ သူတို့က နင်တို့ ငါတို့လို ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေကို သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်ကြတယ်။ ငါတို့က ရွေးစရာ မရှိဘူးလေဟာ။ သူတို့ ခိုင်းတာလုပ်ရင်လုပ် ပြီးရင် ကောင်းကောင်း နေမလား။ ဒါမှမဟုတ် မလုပ်ပဲ ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀ ပြန်သွားနေမလား။ ဒါပဲရှိတယ်။ ငါကတော့ ငါ့သဘောအတိုင်းပဲ။ ပထမဟာပဲရွေးခဲ့တယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်း တွေ လမ်းဘေးမှာ အများကြီးပဲ။ သူတို့ တွေ ဘ၀ပျက်နေကြတယ်။ သူတို့လိုတော့ ငါက မဖြစ်ချင်ဘူးကိုး။ အရင် လ က ဒေးဗစ် က နင့်နေရာမှာ တစ်ယောက် ခန့်ဘူးတယ်။ တစ်ပတ်ပဲကြာတယ်။ ဒေးဗစ် က အပြစ်တွေ အများကြီး တွေ့တယ်။ အပြစ်ပေးဖို့လုပ်တယ်။ တင်ပါးကို ရိုက်မယ် လည်း လုပ်တယ်။ ကောင်မလေးက ဒါဟာ သူမှားတာထက် ပို အပြစ် ပေးခံရတယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတော့တာပဲ။ တစ်နေ့က နောက်ဆုံး ငါကြားတာတော့ အဲဒီ ကလေးမ လမ်းဘေး ရောက် နေပြီ။ သူဟာ နင့်လို မိဘမဲ့ကလေးပဲလေ။ အတတ်ပညာ ဘာမှ ရှိတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဖာသည် အဖြစ်နဲ့ ပဲ ဘ၀ ဆုံးမှာ သေချာပေါက်ပဲ။ နင့်ကြည့်ရတာ မိန်းမကောင်းလေးပဲ။ smart ဖြစ်ပါတယ်။ ထွေးငယ်။ ငါက တော့ နင့်ကို အကြံပေးချင်တာက ဒေးဗစ် ကို ဆန့်ကျင်မယ် စိတ်ကူးရင် သေချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်ပါ။ ဒါက နင့်အတွက် တစ်ခု တည်းနဲ့ နောက်ဆုံး အခွင့်ကောင်း ပဲ။ ကန့်လန့်မတိုက်မိစေနဲ့” “သူက မိန်းကလေး တင်ပါး ကို ရိုက်ဖို့ လုပ်တယ် ။ ဟုတ်လား ရာဂျူးရယ်။ နည်းနည်းတော့ ဆန်းတယ်နော်။ ကျွန်မလို ကလေးမ ငယ်ငယ် လေး အတွက် ပြောတာပါ။” ထွေးငယ် သည် ပဟေဠိ မျက်နှာဖြင့် ရာဂျူးကိုကြည့်သည်။ ငါ့ ဖင်ကို ရိုက်မယ်ဆို ငါဘာလုပ်ရမလဲ.. စဉ်းစားနေသည်။ “သူဌေးတွေဟာ ထူးဆန်းတာပဲဟ။ နင်စဉ်းစားရမှာက ငါတို့ အသက်ရှင်အောင် ဘယ်လို မွေးမလဲ ပဲ။ စီးပွားရေးက တပြည်လုံးကျနေတာ။ လုပ်စားကိုင်စား လို့ ကောင်းလာတဲ့ အချိန်ထိ ငါတို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေဖို့ လိုတယ် ဟ။ ငါကတော့ နင့်အနားမှာ ကူညီဖို့ အမြဲရှိနေမှာပဲဆိုတာ တော့မှတ်ထား။” ရာဂျူး က ထွေးငယ် ကိုကြည့်နေသည်။ ဒေးဗစ်က တွယ်ချင်သလို တွယ်ပြီးရင်တေ့ာ ငါ ဒီဟာမလေးကို စားလို့ရမှာပဲလို့ တွေးနေသည်။ သူသည်လည်း စောက်မွှေးနီနီနှင့် အဖုတ်လေးကို ချချင်သည်။ စဉ်းစားရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်း ကားထားသော သူမ ကိုယ်ပေါ် ရောက်ကာ သူ့လီးက ဆယ်ကျော်သက် အဖုတ်လေးထဲ နစ်ဝင်နေ သလို ခံစားကာ လီးက တောင်လာသည်။ “အင်း။
ဟုတ်ပါတယ် ရာဂျူးရယ်။ ကျွန်မ တာဝန်က ဒီအလုပ်မပြုတ်ဖို့ပဲ။ ကျွန်မလည်း ရှင်နဲ့ ပေါင်းရတာ သဘောကျ ပါ တယ်။ မိတ်ဆွေကောင်း တွေလို့ သဘောထားပါရှင်” “ကောင်းတာပေါ့။
ကဲ ငါ တစ်အိမ်လုံး လိုက်ပြမယ်” တစ်နေ့လုံး ရာဂျူး က တစ်အိမ်လုံး၏ ဆောင်ရန်
ရှောင်ရန် များကို လိုက်ပြ ပြောပြသည်။ “ကဲ ငါ ပြန်ချိန်ရောက်ပြီ။ ဒေးဗစ် လည်း ညစာစား တော့မယ်။ နက်ဖြန်မှတွေ့ကြ တာပေါ့ ။ မင်း ရဲ့ ဒီအိမ်မှာ ပထမည ဆိုတော့ အဆင်ပြေပါစေဗျား။” ရာဂျူး ပြုံးလျက် ထွက်သွားသည်။ ဒီည ထွေးငယ် တစ်ယောက် ဒေးဗစ် ဘာလုပ်တာ ခံရမလဲတော့ မသိ။ထွေးငယ် ညစာကို မီးဖိုထဲတွင် စားသည်။ ဒေးဗစ် ကတော့ စာကြည့်ခမ်းမှာ စားနေသည်။ အစားအသောက်တို့ သည် သူမဘ၀တွင် အကောင်းဆုံး အရသာ အရှိဆုံး တွေဖြစ်သည်။ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ အသားဆိုတာ ရှားရှားပါးပါး။ ပန်းကန် များဆေးပြီးသောအခါ အိပ်ခန်းသို့ဝင်သည်။ ၈
နာရီ ၄၅ တွင် ဒေးဗစ်၏ အိပ်ခန်းသို့ထွက်ခဲ့သည်။ တံခါးခေါက်သည်။ ဖြေသံမကြား။
အခန်းထဲဝင်သည်။ သူမ အိပ်ခန်းလောက် ကျယ်သော ရေချိုးခန်းကို ဖွင့်သည်။ ရေချိုးကန်ကို ရေနွေးဖြင့် ဖြည့် သည်။ ဆပ်ပြာရည် အနည်းငယ်ကို ထည့်စပ်သည်။ ရေချိုးကန်ပေါ် ကုန်းကြည့်နေစဉ် နောက်မှာ တစ်ယောက်ယောက် ရောက်နေကြောင်း ခံစားမိသည်။ “အံမလေး လန့်လိုက်တာ” ထွေးငယ် သည် တံခါးဝတွင် ဒေးဗစ် သူ့ကို ကြည့်နေသည်ကို တွေ့သည်။ “ကြာပြီလား သခင်ကြီး” “မကြာသေးဘူး။ ဒီအိမ်မှာ အခန်းထဲမ၀င်ခင် ညည်း တံခါး မခေါက်နဲ့။ အချိန်ကုန်တယ်။ အမြဲလို ညည်းနဲ့ ငါ နှစ် ယောက် ပဲ ရှိတယ်။ ငါက privacy သိပ် မလိုဘူး။ ဒါက ငါ့အိမ်၊ ပြီး ညည်းက ငါ့အတွက် ကူညီဖို့ထားတာ။ နင့် အခန်း အပါအ၀င် ငါ ကြိုက် တဲ့နေရာ ငါသွားမယ်။ တံခါးတိုင်းမှာ သော့လည်း မရှိဘူး။ အပြင် တံခါးတွေပဲ ရှိတာ။ နားလည် လား။ ထွေးငယ်” “ဟုတ်ကဲ့။ သခင်ကြီးဒေးဗစ်” ရေကို ပိတ်ပြီး ရပ်လျက် ဖြေသည်။ “နောက်
တစ်နာရီကြာရင် ငါ ရေချိုးပြီးလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန် တစ်ခေါက်ဆင်းလာ။ ရေချိုးခန်းကို သန့်ရှင်း၊ ပြီးရင် စာကြည့်ခန်းကို လာခဲ့။ လာတဲ့အခါ ည၀တ်အင်္ကျီဝတ်ခဲ့။ မင်းဝတ်ရမယ့် ဟာတွေ ငါ မင်းကုတင်ပေါ်မှာ တင်ထား ခဲ့ပြိ၊ ဟုတ်ပြီနော်” ဘာပြန်ပြောမလဲ ဒေးဗစ် စောင့်ကြည့်သည်။ ဘာမှ ပြန်မပြော။ “ရေချိုးခန်း
ရှင်းပြီး အ၀တ်လဲ ရရင် ကြာများကြာသွားမလား သခင်ကြီး” သူမအား ည၀တ်အကျီ င်္နှင့် မမြင်စေလိုသဖြင့် ကြိုးစား အတွန့်တက်ကြည့်သည်။ “ညည်းကို မေးနေတာမဟုတ်ဘူး ထွေးငယ်၊ အမိန့်ပေးနေတာ။ ငါ့ကို အတွန့်တက်နေတာလား” ဒေးဗစ် အသံကို မြှင့် ၍ ပြောသည်။ ထွေးငယ် ကို ခြောက်ကြည့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။“မဟုတ်ပါဘူး
သခင်ကြီးဒေးဗစ်၊ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ကျွန်မလုပ်မှာပါ။ နောက် ကို မမေးတော့ပါဘူးရှင်” ထွေးငယ် အမြန် ပြန်ဖြေသည်။ မရစ်မိစေနဲ့ ထွေးငယ်၊ သူစဉ်းစားသည်။ ငါ အလုပ်မပြုတ်ဖို့နဲ့ လမ်းဘေးမရောက်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ဟု တွေးသည်။“ကဲ သွားတော့” ချက်ခြင်း မောင်းထုတ်သည်။ သူမ ထွက်သွားနေရင်း မျက်လုံးထောင့်စွန်းတွင် သူ အ၀တ်ချွတ်နေ သည် ကို တွေ့သည်။ အမြန် လျှောက်သည်။ သူ တုံးလုံး ချွတ်နေတာ သူမ မကြည့်ရဲ။ အိပ်ခန်းသို့ သူမပြန်သွားသောအခါ အိပ်ယာပေါ်တွင်ဖြန့်ထားပြီးသား ည၀တ်စုံကိုတွေ့ရသည်။ အပိုင်း နှစ်ပိုင်းသာ။ အနက်ရောင် ည၀တ်လွှာစနှင့် နက်ပြာရောင် ခါးစည်းကြိုးသားဖြစ်သည်။ ချည်စသည် ထွင်းဖောက်မြင်သာပြီး အ၀တ် မ၀တ်သကဲ့သို့သာဖြစ်သည်။ ကြမ်းပြင်တွင်မူ ထောက် ၃ လက်မခန့်ရှိမည့် ဖိနပ်တစ်စုံ။ ထွေးငယ် အ၀တ်များကို ချွတ်ပြီး ချိတ်ဘီရိုထဲထည့်သည်။ အ၀တ်လဲနေရင်း သူ့ ၀တ်လက်စအထည်နှင့် ခြေအိတ်များ ကို လျှော်ဇလုံထဲထည့်စိမ်သည်။ ရှင်မီးခံဝတ်ရမလား။ မဖြစ်ပါ။ သူ့ကို ချပေးထားသည်မှအပ မ၀တ်ရ ဟု ဆိုပြီး မဟုတ်ပါလား။ နှုးညံ့သော အစသည် သူ့အသားများကို ပွတ်တိုက်ပြီး နှုးညံ့သောအသားများကို တင်းမာစေသည်။ မှန်တွင်ကြည့်သောအခါ ညိုသော သူ့ အမွှေးအမြှင်များသည် အနက်ရောင် တွင် ထင်းနေကြောင်းတွေ့လာရသည်။ ၁၀ နာရီထိုးကာနီးပြီ။ သွားတော့မှပဲ။ ငါ့အ၀တ်တွေ တန်မတန်ကြည့်ရုံပဲဖြစ်မှာ။ ပြီးရင် အိပ်ချိန်ရောက်ပြီ ဟုတွေးသည်။ ထွေးငယ် စာကြည့်ခန်းထဲဝင်သည်။ တံခါးမခေါက်တော့ပါ။ ဒေးဗစ် က မီးလင်းဖိုရှေ့မှာ။ “လာ။
မီးဖိုရှေ့မှာရပ်စမ်း။ မအေးဘူးလား။” ဒေးဗစ် က သူလျှောက်လာသည်ကို ကြည့်နေသည်။ “ငါ့ဖက်လှည့်။ လက်တွေကို ဘေးချထား။ ဟုတ်ပြီ” “အ၀တ်တွေ တန်သားပဲ။ ကောင်းတယ် ထွေးငယ်၊ လှည့်လိုက်စမ်း ငါ့ကို ကျောခိုင်းပြီးရပ်။ အင်း။ အဲဒီလို” ထွေးငယ် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်သည်။ ခုထိတော့သဘာဝကျဆဲ။
သူမ တုန့်နှေးမှုမရှိ။ သူ့နောက်ကျောကို စိုက်ကြည့် ခံနေရမှန်းတော့သိနေသည်။ မိနစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ထပ် အမိန့်မရပဲ ကျော်သွားသည်။ “ကဲ ငါ့ဖက်လှည့်စမ်း ထွေးငယ်၊ ခါးပတ်ကို ဖြေချလိုက်စမ်း။ ငါ ည၀တ်သက်သက်ကြည့်မယ်” ထွေးငယ်မျက်နှာ ရှက် သွေး ရဲလာသည်။ ခုလိုစိတ်လှုပ်ရှားအောင်တမင်လုပ်နေခြင်းပင်။ “ငါထပ်မပြောဘူးနော်” အသံကိုမြှင့်ပြောသည်။ ထွေးငယ် စိတ်တွေ အမှန်ဖက်ရောက်အောင်ပြန်ထိန်းလိုက်ပြီး ခါးစည်းကို ဖြည်ချသည်။ သူမမျှော်လင့်သော အမိန့် မဟုတ်ပါလား။ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အ၀တ်စနှင့် သူမ ရပ်နေပြီ။ သူ့ရင်သားတို့မှာ မကြီးလှသော်လည်း နို့သီးခေါင်းတို့က တင်းမာနေသည်။ “အဲလိုမှပေါ့။ ထွေးငယ်၊ ညတိုင်း မင်းငါ့စာကြည့်ခန်းကိုလာရမယ်။ ငါရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့။ နားလည်လား။ ထွေးငယ်” “ဟုတ်ကဲ့
ရှင့်” သူသည် သူမကိုယ်ခန္ဓာကို ငေးကြည့်နေသည်။ ထောက်နေသော နို့သီးများမှသည်
၃လက်မ ဒေါက် ပေါ်မှ ခြေချောင်းများအထိ။ ကိုယ်တုံးလုံးနီးပါး ရပ်ပြနေရမှုကြောင့် သူမ မအီမသာဖြစ်နေသည်။ “ကဲ ဟိုဖက်လှည့်ပြီး မီးဖိုနဲ့ပိုကပ်လိုက်အုံး” “ဟုတ်ပြီ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးချ။ ခြေထောက်ကို ခုထက်ပိုခွဲလိုက်။ ထပ်ချဲအုံး” ငါတော့ ပိုပြီး တုံးလုံးဖြစ်ပြီ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်” ၃ ပေလောက်ထိ ခြေထောက်ကို ကားထားရသည်။“ငါမပြောမချင်း ထပ်မလှုပ်နဲ့တော့” ထွေးငယ် ဒေးဗစ်၏ ၀တ်ရုံလှုပ်ခတ်သံ၊ အသက်ရှုသံတို့ကို ကြားနေရသည်။ ငါးမိနစ်ကျော်ကြာသည်။ ခြေထောက် တွေတောင် ညောင်းလာသည်။ ထို့နောက်. . “ကဲ အိပ်တော့။ မနက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့” ထွေးငယ်
ခါးစည်းစကို ဆွဲယူပြီး မပြေးရုံတမယ် အခန်းထဲကထွက်ခဲ့သည်။ သူမအခန်းသို့ရောက်သည်နှင့် ၀တ်စုံကို ချိန်ကာ အိပ်ယာထဲဝင်တော့သည်။ စောင်ကို
လည်ပင်းထိချုံပြီး မျက်စေ့မှိတ်ထားသည်။ မျက်လုံးထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့သမျှ ကို ပြန်မြင်နေသည်။ ဒေးဗစ်၏ မျက်လုံးအောက်တွင် အ၀တ်ပါးနှင့် ရပ်နေခဲ့ရခြင်းကြောင့် ထူးဆန်းသောခံစားမှု။ ဆင်းရဲမှုကြောင့် သူမသည် အရှက်တကွဲဖြစ်ရသည်ဟု ထင်သကဲ့သို့ပင် လွှမ်းမိုးမှုကြီးသောသူတစ်ဦး၏ အရှိန်အ၀ါ
ကြောင့်လဲ ခုလိုဖြစ်ရခြင်း။ စဉ်းစားနေရင်း သူမလက်များက အဖုတ်ဆီရောက်သွားကာ
ပွတ်တိုက်နေမိတော့သည်။ အဖုတ်ထဲမှာ စိုရွှဲနေကြောင်း အံ့သြစွာသိလိုက်ရသည်။ ဒေးဗစ်ရှေ့တွင် ကိုယ်တုံးလုံးရပ်လျှက်၊ ခြေထောက်များကား ကာ အဖုတ်ကို ဖြဲ ထားရသလို စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာရင်း အဖုတ်ကို ပို၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်မိကာ လက်ချောင်းများကို ပေါင်ကြားတွင် အတင်းညှပ်ထားရင်း သူမ ပြီးသွားတော့သည်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ထွေးငယ် စိတ်ထဲတွင် အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်စဉ်းစားသည်။ ငါ ဒီည
ခုလို ထပ်လုပ်ရအုံးမှာပဲ။ ဒါဆို ဘာဖြစ်မလဲ။ အင်း ..ဘာမှ မဖြစ်ဘူး သိပ်လည်း
မဆိုးပါဘူး.. ဟု စဉ်းစားသည်။ နေ့ခင်းဖက်တွင် ထွေးငယ် တစ်ယောက် အရင်က ဒေးဗစ် လုပ်သလိုပင် အနားမှ ကပ်သွားတတ်သည်။ ဒေးဗစ်က တစ်ခါတစ်ခါ အနားကပ်လာ ရင်း သူမကို ပွတ်သွားလိုက်၊ လက်ဖြင့် ပုခုံး သို့မဟုတ် ကျောကို ပွတ်သွားလိုက် လုပ်သည်။ သို့သော် ညင်ညင် သာသာ အပြစ်ကင်းကင်းပင်။ ညရောက်သောအခါ ဒေးဗစ် ရေချိုးပြီးချိန် စာကြည့်ခန်းသို့ ထွေးငယ် ရောက်သွားပြီး မီးရောင်အောက်တွင် ရပ်ရပြန်သည်။ နောက်ထပ် ၂ ရက် ဒီအတိုင်း ဆက်ဖြစ်သည်။ ဘာမှ မပြောင်းလဲ။ ခုညတော့ ထွေးငယ် တစ်ယောက် ဒေးဗစ် ရေချိုးစဉ် “မင်္ဂလာ ညပါ သခင်ကြီး” ဟု နှုတ်ဆက်ရင်း ရောက်သွားကာ ပြုံးလျက် ရေ စပ် ပေးနေသည်။ “ကောင်းသောညပါ ထွေးငယ်၊ ဒီည ညည်းကို ငါရေချိုးနေတုန်း နေစေချင်တယ်။ ငါ့ကျောကုံးကို နည်းနည်း ချေးတွန်း ပေးစမ်းပါ။” ထွေးငယ် အံ့သြစိတ်ဖြင့် သူ့ကို စိုက်ကြည့်သည်။ မငြင်းနိုင်သည့်အတူ . . “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်၊ လုပ်ပေးပါ့မယ်” ရေချိုးကန် ရေပြည့်သောအခါ ဒေးဗစ် အ၀တ်ချွတ်နိုင်စေရန် ထွေးငယ် နောက်ဆုတ်ပြီး ကျောခိုင်းပေးသည်။ “မလိုဘူး
ထွေးငယ်၊ ငါက သူတော်စင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါနဲ့အတူတူနေရင် ငါ့ကိုယ်လုံးကို မမြင်စရာလည်း မရှိဘူး။ ခုနလိုပဲ နေစမ်း” သူမပြန်လှည့်လာသည်ကို စောင့်ကြည့်ရင်း အ၀တ်များကို စချွတ်နေသည်။ ဘောင်းဘီကို ချွတ်သော အခါ သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသော်လည်း မျက်လုံးများက ခါးအောက်ကို မဆင်းချေ။ “ရေနွေး က
အနေတော်လေးပဲ။ ထွေးငယ် ညည်း ငါ့အကြိုက်ကို သိသား..” သူ ရေ၀င်စိမ်သည်။ ထွေးငယ် စိတ်လှုပ်ရှားစွာအနားတိုးလာပြီး ချေးတွန်း ဖော့တုံးကို ယူကာ ဆပ်ပြာနှင့် သုတ်သည်။ “အကျီ င်္ ချွတ်လိုက်အုံး။ နင့်အ၀တ်တွေ စိုကုန်အုံးမယ်။” သူစိုက်ကြည့်ရင်း အမိန့်ပေးသည်။ ထွေးငယ်
၏ လက်များက ကြယ်သီးများပေါ်သို့ ဖြေးဖြေးချင်းရောက်လာသည်။ ထို့နောက် တစ်လုံးချင်း အပေါ်မှ စကာ ချွတ်သည်။ အောက်ဆုံး ကြယ်သီး သို့ရောက်သောအခါ မော့ကြည့်သည်။ ပါးလွှာသော ရင်စီးအောက်မှ ထောင်နေသော နို့သီးခေါင်းများအား စိုက်ကြည့်နေသည်ကို မြင်သည်နှင့် ရှက်သွေးဖြန်းသွားသည်။ ဆက်ချွတ်လိုက် ပြီး
အကျီ င်္ကိုအနီးရှိခုံပေါ်သို့ တင်လိုက်သည်။ ဒေးဗစ်နောက်ကျောသို့ ရွှေ့ကာ ချေးတွန်းပေးရန် ပြင်သည်။ဒေးဗစ် က ခါးကိုင်းပေးသည်။ နောက်သို့လျှောက်သွားစဉ် ရင်စည်းအောက်မှ နို့သီးခေါင်းများကို မြင်လိုက်ပြီး ကျောကုံးကို ဖြည်းညှင်းစွာ အပွတ်ခံရင်း လီးတောင်လာသည်။ “ကောင်းတယ် ထွေးငယ် ညည်းတော်တယ်။ ဆက်လုပ်” ရပ်ခိုင်းသည့်တိုင် ထွေးငယ် ဆက်ပွတ်ပေးနေရသည်။ “ကဲ
သွားလို့ရပြီ။ နာရီဝက်နေရင် ငါ့စာကြည့်ခန်းလာခဲ့တော့။” ဒေးဗစ် အမိန့်ပေးပြီး အပြေးအလွှားထွက်သွား သော ထွေးငယ်ကို ကြည့်နေသည်။ မကြာခင် သူ့လီးကြီးကို သူမကိုယ်တိုင် ချေးတွန်းပေးရပေတော့မည်။ စိတ်ကူးထဲမှာ ထွေးငယ်၏ လက်ကလေးများ သူ့ လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း စုန်ချည်ဆန်ချည် ပွတ်နေသည်ကို မြင်နေသည်။ ထွေးငယ် ညည်းမကြာခင် ငါ့ လီးကို ညတိုင်းဂွင်းတိုက်ပေးရတော့မယ်။ နောက်တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်ဆို စာကြည့်ခန်းထဲမှာ ဒူးထောက်ပြီး ချိုမြိန်တဲ့ အပျိုစင်နှုတ်ခမ်းနဲ့ ငါ့လီးကြီးကိုစုတ်ပေးရမှာ။….. စဉ်းစားရင်း ထုနေသည်မှာ ရေချိုးကန်ထဲသို့ လရေများ ပန်းထည့်မိသည်အထိ။ အင်း… နောက်ဆို ဒါတွေ ညည်းပါးစပ်ထဲ ရောက်မှာပေါ့
နောက်ထပ် ရက်အနည်းငယ်တွင် ထွေး သည် ဒေးဗစ် အနားသို့ ကပ်ရန် ပို ရဲလာသည်။ ခါးကိုင်း၍ အလုပ်လုပ်နေရင်း မော့ကြည့်မိလျှင် ဒေးဗစ် စိုက်ကြည့်နေသည်ကို မြင်ရတတ်သည်။ မီးဖို ကြမ်းပြင်ကို ကုံး၍တိုက် နေလျှင် ဒေးဗစ်ဝင်လာပြီး လေးဖက်ထောက်ထား၍ ဖင်ထောင်နေသည်ကို မုန့်တစ်ခုခု ယူစားရင်း စိုက်ကြည့်နေသည်။
တစ်ခါတစ်ခါ အိမ်တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ရုတ်တရက်ထွက်လာရင်း လက်က ပျံထွက်လာပြီး
သူမရင်ပတ်ကိုပုတ်သည်။ ရုတ်တရက်လို ဖြစ်သော်လည်း နည်းနည်းကြာမှ လက်ဖယ်သွားသည်။ ကြောင်အိမ် နား ကပ်ရပ် ကျောပေး နေစဉ် နောက်က ရောက်လာပြီး သူ့တင်ပါးကို ၀င်ကပ်တော့ တောင်နေသောလီးကြီး၏ အတွေ့ ကို ခံစားရသည်။ နောက်တော့
တစ်ခုက ဖြစ်လာသည်။ ၀ိုင်ခွက်များကို မီးဖိုထဲတွင် ဆေးကြောနေစဉ် ရုတ်တရက် ချော်ပြီး ကြမ်းပေါ် ကျသွားသည်။ လှမ်း ဖမ်းသော်လည်း မမှီလိုက်တော့။ ဖန်ခွက်ကွဲသံသည် တစ်အိမ်လုံးဆူသွားသည်။ သူ ခဏလေး ငြိမ်ပြီး နားစွင့်မိသည်။ ဘာမှတော့မကြား။ အမှားအယွင်းတစ်ခုခုလုပ်မိလျှင် ဒဏ်ပေးခံရမည်ဟု ရာဂျူး က ပြောထား သည် မဟုတ်ပါလား။ သူမကြောင့် ခုလို ကွဲရှသည်မှာ ပထမဆုံး။ မတော်တဆပဲလေ ဟု တွေးမိသည်။ သို့သော်… “ဟေ့ ဘာဖြစ်တာလဲ” ဒေးဗစ် ၏ မေးသံကို ကြယ်လောင်စွာကြားရသည်။ “ဟုတ်ကဲ့၊
သခင်ကြီးဒေးဗစ်။ ကျွန်မ ချော်ပြီး လွတ်ကျသွားပါတယ်။ ဖမ်းပေမယ့် မမိလိုက်လို့ ဖန်ခွက်ကွဲသွားတာပါ ရှင့်။ မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါ။ ခု ပဲ ရှင်းလိုက်ပါမယ်။” သူမ၏ အသံက တုန်ခါနေသည်။ ဒါလောက်နှင့် ပြီးသွား မည်ဟု လည်း မျှော်လင့်နေသည်။ “ဒီဖန်ခွက်က ငါ့အမေ အကြိုက်ဆုံး တစ်စုံထဲက ဟ။ သူဆုံးသွာကတည်းက ငါ နေ့တိုင်း ဒါနဲ့ သောက်ခဲ့တာ။ ခု ခွက် က နောက်ဆုံးပဲ။ ဘယ်လိုလုပ် အစားရမလဲ။ နင့်ကို ငါစိတ်ပျက်တယ် ထွေး။ နင့်ကို ငါ အလုပ်ကောင်းကောင်းပေး တယ်။ ဂရုစိုက်တယ်။ နင်က ခုလိုလုပ်ပစ်တယ်။ ငါ့ကို ဘာနဲ့ အလျော်ပေးမလဲ ဟေ။”“ဆောရီးပါ သခင်ကြီးဒေးဗစ်၊ နောက် မဖြစ်စေရပါဘူးရှင်။ သခင်ကြီးက ကျွန်မအတွက် အကောင်းဆုံး အလုပ်ရှင် ပါ။ ဒီအလုပ်ကိုလည်း ကျွန်မကြိုက်ပါတယ်” ဖြေသိမ့်နိုင်မလားလို့ ကြိုးစားပြောကြည့်သည်။“ငါ လက်မခံဘူး။ နင်တကယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လည်း မယုံဘူး။ အဲတော့.. နင် ဒီည ၇ နာရီခွဲ ငါ့စာကြည့်ခန်းထဲ လာခဲ့။ အလုပ်တွေပြီးအောင်လုပ်ခဲ့။ နင်နဲ့ တန်တဲ့ အပြစ်ပေးဖို့ ငါစဉ်းစားထားမယ်။ ကဲ။ ငါ ဒဏ်ပေးတာ လက်ခံမလား မခံဘူးလား ပြော။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ့် အ၀တ်ကိုယ်ထုတ်ပြီး ခုချက်ခြင်း ထွက်သွားလို့ရတယ်။”ထွေး အလွန်ကြောက်မိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံရတော့မည်သာဖြစ်သည်။ ခုအလုပ်မှာ သူပျော်နေပြီ။ ဒေးဗစ် သည် သူ့ကို ကြောက်လန့်အောင် တမင်ခြောက်နေသည်ဟုသာထင်သည်။ သူဌေးတွေကြားထဲမှ မနေဘူး သဖြင့် သူ နားမလည်နိုင်။ ရွေးစရာလမ်းလည်းမရှိ၊ ၁၈ နှစ်သမီး မိဘမဲ့ တစ်ယောက်အတွက် ခုလို ဆောင်းရာသီတွင် တခြား လုပ်စရာ လည်း ဘာမှမရှိ။ “ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ သခင်ကြီး။ ကျွန်မ ကျေနပ်တဲ့အထိ အပြစ်ပေးခံပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဒေးဗစ်၏ မျက်နှာကို ပြန်မကြည့်ရဲတော့ပဲ အကွဲ အစ များကို ရှင်းရန် လုပ်တော့သည်။ ခံရမှာပေါ့လေ.. ဟု တွေး မိသည်။ ရာဂျူး ပြောသလို တင်ပါးကို ရိုက်တယ် ပဲဆိုဆို ဘယ်လောက် ဆိုးမှာမို့လဲ။ လမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့စာရင် တော်ပါသေးတယ် ဟုတွေးနေရသည်။ ညရောက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ တစ်ခါတလေ တွေးပြီး ပူသော်လည်း ထွေး တစ်နေ့လုံး အလုပ်ဆက်လုပ်နေသည်။ သူ့တင်ပါးကို လက်ဖ၀ါးနှင့် ရိုက်ခံရနိုင်သည်။ အတော်များနာမလား။ သူခံနိုင်မလား။ စဉ်းစားရင်း ညစာကို ဖြည်းဖြည်း စားသည်။ စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် အစာတော့မ၀င်။“အားလုံး OK ပဲလား ထွေး?” ရာဂျူး
အသံကြောင့် သူလန့်သွားသည်။ “အင်း။ ကျွန်မတော့ အခက်တွေ့နေပြီ။ သူ့အမေ စိတ်ကြိုက် ဖန်ခွက်တွေ ထဲက နောက်ဆုံး တစ်လုံးကို ခွဲလိုက်မိတယ်။ ဒေးဗစ် ဒေါဖောင်းနေတယ်။ ဒီည ဒဏ်ပေးခံရမယ်တဲ့။ သူ ကျွန်မကို မရိုက်လောက်ပါဘူးနော်။ ဘယ်လိုထင်လဲဟင်”ရာဂျူး အံ့သြဟန်ပြသည်။ ဒေးဗစ် ဒီမနက်က သူ့ကို စာကြည့်ခန်းထဲခေါ်ပြီး အထူး စီမံထားသော ကုလားထိုင် အရှင် တစ်ခု လုပ်ပေးရန်ခိုင်းခဲ့သည်။ ခုံကို ဘယ်လို မျိုး အသုံးချဖို့ ဆိုတာ သူနားမလည်ခဲ့။ ခုတော့ သူ သဘောပေါက်ပြီ။ ဒေးဗစ် က ရိုက်ဖို့ ခုံ လိုချင်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ခုံ အနေအထားကြောင့် ထွေး၏ ဖင်ကို ပေါ်လွင်အောင် လုပ်ထားပြီး ဖြစ်မည်။ ခုံမှာ တခြား ထူးခြားချက်တွေက ပါသေးသည်။ သူမ ဖင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိတွေ့နိုင်အောင်။ ကိုယ် ခန္ဓာသည် အားကိုးရာမဲ့နေအောင်၊ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ခံရအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး ဒီစနေတနင်္ဂနွေ အပြီး လုပ်ခိုင်းထား သည်။ အင်း၊ ဒီည တော့ သူမ အရိုက်ခံရနိုင်သည်။ သို့သော် အစသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပိတ်ရက်မတိုင်မီ နောက်ထပ် အမှားများ ဆက်တိုက် တွေ့တော့မှာ သေချာပါသည်။ “အင်း။ ငါ နင့်ကို ခင်ပါတယ် ထွေး၊ ပြီး တော့ ဒီမှာ နင် အလုပ်လုပ်တာလည်း အကုန် ကောင်းတာပဲလေ။ ခုတော့ နင် အရစ် ခံရပြီပေါ့။ သူဌေးတွေအကြောင်း ငါလည်း ပြောပြဘူးသားပဲ။ သူတို့က ထူးဆန်းတယ်ဟ။ ဒေးဗစ် ရဲ့ မိတ်ဆွေ တွေဆိုရင် သူ့ထက် ဆိုးတယ်။ ဒါက နင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အချိန်ပဲ။ အနာဂတ်အတွက်လည်း စဉ်းစားရမယ်။ နင့်မှာ သွားစရာနေရာလည်းမရှိ၊ ကျောင်းကလည်း ပြန်လက်ခံတော့မှာမဟုတ်၊ ဆောင်းကလည်း ၀င်လာနေပြီ စဉ်းစား ပေါ့ဟာ။ လမ်းပေါ်မှာ
ဖာဖြစ်ရတဲ့ဘ၀တော့ မရောက်စေချင်ဘူး။ နင့်အသက် ၁၈ နှစ်ဆိုတော့ အဲဒါမျိုးသွားလုပ်လည်း လတ်တလောတော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ နောက် ၃ နှစ်လောက် ဆို လူလည်း ရစရာကျန်မှာမဟုတ်ဘူး။ နင် အဲလို တော့ မဖြစ်ချင်ဘူး မဟုတ်လား “ ရာဂျူး
ပြောတာမှန်ပါသည်။ သူမအတွက် ရွေးစရာ မရှိလှ “အင်း။ ကျွန်မနားလည်ပါတယ်။ ကြောက်စရာပဲ။ ရှုင့်ကို တစ်ခါမှမပြောဘူးဘူး။ ကျွန်မဟာ အပျိုလေးပါ။ တစ်သက်လုံး ကျောင်းမှာပဲနေခဲ့ရပြီး ဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှ လည်း မပတ်သက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဒေးဗစ် က ကျွန်မကို ကြည့်တာ က မရိုးဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ပွတ်တာထိတာတွေလည်း ပါလာတယ်ရှင်” ထွေး တစ်ယောက် ရာဂျူးကို ငေးရင်း ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမလဲ စောင့်သည်။ ဒေးဗစ် သည် အပျိုစင်လေးကို စားပေတော့မည်။ ငါလည်း သူ့ ဟာလေးကို တွယ်ချင်လိုက်တာ။ ဟင်း.. သူဌေး ငမိုက် တွေ။ အပျိုစစ်တွေဆို သူတို့ပဲ စားရတယ်။ ဒီကလေးမလည်း မကြာခင် အတွယ်ခံရတော့မယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိသမျှ အပေါက် တွေ အားလုံး ဒေးဗစ်ပစ္စည်း အထည့်ခံရတော့မှာသေချာတယ်။ ပြီးရင် သူ့သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့တွေ့မယ်။ ဟိုလူတွေက အင်မတန်ဆိုးတဲ့လူတွေ။ ဒေးဗစ်ထက် ကြမ်းတမ်းတယ်။ သူတို့ ပါတီတွေမှာ ငါတွေ့ဘူးတာ ဖာသည်မတောင် ကြောက် လန့်ပြီး ခံရရှာတယ်။ အင်း သူလိုးပြီးရင်တော့ ငါ့ကို လည်း အခွင့်အရေးပေးအုံးမယ် ထင်ပါရဲ့။ အင်း… “နားထောင်စမ်း ထွေး၊ ငါ နင့်ကို ထပ်မပြောချင်တော့ဘူးဟာ။ သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်။ ကန့်လန့်မတိုက်နဲ့။ နက်ဖြန် မှတွေ့ကြသေးတာပေါ့” ရာဂျူး ထွက်ခဲ့သည်။ လီးကတောင်နေသည်။ ကံကောင်းတဲ့ ငနဲတွေ ပါလား။ ရိုက် ဖို့ ခုံ လုပ်ပေးရင်းကို တွေးရင်း တင်း လာနေသည်။ အရင် လုပ်ဘူးသည့် ခုံ တွေနဲ့မတူအောင် ပို ကောင်းအောင် လည်း လုပ်ထားရာ ဒေးဗစ် ကြိုက်မည်မှာသေချာသည်။ တစ်ခါတလေ တော့ ထွေးကို ဒီခုံ မှာ သူ့လက်ထဲများ ထည့်လေမလား ..။ ရာဂျူးစိတ်ကူးယဉ်နေမိသည်.ထွေး အခန်းသို့ပြန်ကာ သန့်ရှင်းသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်ထဲကြည့် အကျီ င်္၊ စကတ်၊ ဒေါက်ဖိနပ်၊ ခြေအိတ်နက် အားလုံး ကောင်းပါသည်။ ဒေးဗစ်သည် သူ့ကို ကြည့်ပြီး သနားလောက်ပါသည်။ စာကြည့်ခန်းဖက်သို့ ဆင်းလာခဲ့ သည်။ ဒေးဗစ် သည် ခန့်ညားသော ထိုင်ခုံကြီးပေါ်တွင် ထိုင်နေသည်။ ခြေထောက်က ရှေ့က ခုံလေးမှာ တင်ထားသည်။ သူမ၀င်လာသောအခါ ဖတ်လက်စ သတင်းစာကို ချလိုက်သည်။ သူသည် ၀တ်စုံပြည့်နှင့်။ “ကျွန်မ အပြစ်ပေးခံဖို့ လာတာပါ သခင်ကြီး။ ကျွန်မ လုပ်ခဲ့မိတာ အပြစ်ရှိတဲ့အတွက် သခင်ကြီးပေးတဲ့ အပြစ်ကို ခံပါ့မယ်” လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ဖြစ်စေရန် ကြိုးစား၍ ပြောရှာသည်။ ဒေးဗစ် က သူမကို ခပ်တည်တည်ကြည့်နေသည်။ “ဒါ နင့်အတွက် ပထမဆုံး အမှားပဲ ဆိုတာ ငါလည်းနားလည်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ပေါ့ပေါ့ထားလိုက်ရင် နောက်ထပ် ဆက်ဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်ရတယ်။ ငါက စည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် အလျှော့ပေးတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အဲတော့ အပြစ် ပေးမှသာ မသင့်တော်တာတွေ ဆက် မဖြစ်မှာလို့ပဲ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီတော့ နင်ဒီည အရိုက်ခံရတော့မှာပေါ့” ဒေးဗစ် ခုံမှ ထကာ “နင် ဒဏ်ပေးခံမယ် မဟုတ်လား”ထိုခဏလေးသည် ထွေး၏ ဘ၀ အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ငြင်းလိုက်သည်နှင့် သူမဘ၀သည် လမ်းပေါ်တွင် ဘာဆက်ဖြစ်မည် မသိ၊ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆိုလျှင် ယခု အလုပ်တွင် တည်မြဲနေမည်။ သူမ ဘာကြောင့် အလျှော့ပေးရမည် နည်း။ သူမ အလုပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေအားလုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရပေမည်။ ခု သူမကို
ရိုးရိုး တန်းတန်း ရိုက် မှာ မဟုတ်မှန်းသူ နားလည်သည်။ ဤသည်မှာ အစသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒေးဗစ် တွင် သူမအား တခြား ရည်ရွယ်ချက် များရှိမှန်း သူမ မကြိုက်တာတွေ လုပ်ရဖို့ ရှိနိုင်မှန်း သိသည်။ သို့သော်.. “ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ သခင်ကြီးဒေးဗစ်” သူမအနာဂတ် လမ်းတစ်ခုကို ရွေးလိုက်သည်။ဒေးဗစ် က အဖြေအတွက် ပြုံးပြီးကျေနပ်နေသည်။ သူ မ ကို သူပိုင်သွားပြီ။ သူမအား ကြည့်ဖို့၊ ထိဖို့ အတွက် အကြောင်း ပြနေစရာမလိုတော့။ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်မည်၊ တွန်းပို့မည်၊ ကြောက်လာအောင် လုပ်မည်။ “အနားလာခဲ့ ထွေး၊ ငါ့အနားကပ်စမ်း” လက်တကမ်းကို ခေါ်သည်။ ထွေး တစ်ယောက် လက်နှစ်ဖက် ဘေးချလျက် ဒေးဗစ် ရှေ့တွင် ရပ်နေသည်။ သူ၏လက်များက သူမကို ကိုင်တွယ် နေသည်ကို ခံစားရသည်။ ခါးကို သေချာ ကိုင်ကြည့်နေသည်။ သူ့လက်များက သူမ၏ ခါးထက်ပင် ကြီးမားနေသလို ရှိသည်။ သူမ ဖြည်းဖြည်းချင်း တုန်လှုပ်လာသည်။ လက်များက သူ့ကို လှည့်ခိုင်းနေသည်။ “လှည့်လိုက်စမ်း။ ဟုတ်ပြီ” ဒေးဗစ် လက်များက စကပ် အပေါ်နားကို အသာကိုင်လိုက်ပြီး တင်ပါးအတိုင်းဖြည်းဖြည်း ချင်း
လျှောဆင်းသွားသည်။ “ငြိမ်ငြိမ်နေနော်” လက်များက ဖင်ကို သေချာကိုင်တွယ်သည်။
“နင့်ဖင်က လုံးနေတာပဲ ထွေး၊ အတီးခံဖို့ လုပ်ထားတာလား။ နင် အရိုက်ခံရဘူးလား”“ဟင့်အင်း၊ သခင်ကြီး” သူမ ချိုသာစွာဖြေသည်။ “တခြားမိန်းကလေးတွေတော့ ဦးဖေခင် ရိုက်တာ ခံရဘူးပါတယ်။ ပြန်တော့ ပြောမပြကြဘူး။ ကျွန်မတော့ ကံကောင်းလို့ တစ်ခါမှ မခံခဲ့ရပါဘူး။”မဟုတ်ပါ။
သူကံကောင်းသည်မဟုတ်။ ဦးဖေခင် သည် ဒေးဗစ်အတွက် စုဆောင်းထားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ တခြား မိန်းကလေးတွေ ဖင်လှန်အရိုက်ခံရသည်။ ကြိမ်ဆော်ခံရသည်။ နောက်ဆုံး သူတို့၏ အပျိုရည်ကို ဦးဖေခင်ထံ ပေး ကြရသည်။ မိဘမဲ့ကျောင်းမှမိန်းကလေးများစွာသည် သူတို့၏ အပျိုပါးစပ်၊ အပျိုအဖုတ်နှင့် အပျိုဖင် တို့ကို ပြင်းထန်စွာ ဖင်လှန်ရိုက်ခံရခြင်းနှင့် ကြိမ်လုံးစာမိခြင်းတို့ နောက်တွင် ဦးဖေခင်၏ စားပွဲပေါ်၌ ပေးခဲ့ကြရသည်။ “နင်လည်း ဒီမှာတော့ သိပ်ကံမကောင်းနိုင်တော့ဘူး ထွေး။ ရက်တောင်သိပ်မကြာသေးဘူး နင် အဆော်ခံရတော့မယ်” သူ့လက်ချောင်းများက သူမ၏ တင်ပါးများကို ပွတ်နေသည်။ ဖင်တစ်ခုလုံး ကို လုံးခြေနေသလို ကိုင်သည်။ “တစ်ပတ်လှည့် လိုက်အုံး” လက်များကတော့ မဖယ်။ “နင့် အကျီ င်္ နဲ့ ရှုပ်မနေစေချင်ဘူး။ ချွတ်လိုက်စမ်း” မေးခွန်း မဟုတ်၊ အမိန့်ပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။
ထွေး သည် ဒေးဗစ် ရေချိုးနေစဉ် က ရှေ့တွင် အင်္ကျီချွတ်နေဘူးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခုတစ်ခါတွင် ယခင် လို မဟုတ်တော့မှန်း နားလည်သည်။ သူမ တင်ပါးပေါ်တွင် အေးဆေးစွာပွတ်သတ်နေသော လက်များက သူမအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကိုပြနေသည်။ သူမသည် ဒေးဗစ် ၏ မျက်လုံးများအောက်တွင် ကြယ်သီးများကို ဖြေးဖြေးချင်း ဖြုတ် နေသည်။ လက်မောင်းနှင့် ပုခုံးပေါ်မှ အသာကျော် ချွတ်လိုက်သည်။ ဒေးဗစ် ကြည့်နေစဉ် အင်္ကျီကို အသာကိုင်ထား သေးသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငုံ့ကြည့်သောအခါ ပိုး ရင်စည်း အောက်မှ ရုန်းကန်ထွက်နေသော နို့သီးခေါင်းများကို မြင်ရသည်။ ဒေးဗစ် က အင်္ကျီကို လှမ်းယူပြီး ဘေးရှိခုံပေါ်တွင် တင်ထားလိုက်သည်။ “နင့်နို့တွေက ငယ်သေးပေမယ့် နို့သီးခေါင်းတွေက ကြီးသားပဲ။ ဟုတ်လား။ ချွတ်ပြစမ်းပါအုံး ကြည့်ရအောင်” ဒေးဗစ် က ပြောရင်း သူမရှက်နေသည်ကို ကြည့်ရင်းပြုံးနေသည်။ “ပြဖို့တောင် မလိုလောက်ပါဘူးသခင်ကြီး။ ကျွန်မမှာ နို့သီးခေါင်းကကြီးပါတယ်။ ပိုးစကြောင့် ထောင်ထွက်နေတာပါ” သူရှက်ရှက်နှင့် အော်မိသည်။ ဘာကြောင့် ခုလို ဇွတ်ပြောမိသည် မသိ။ ဟုတ်ကဲ့ ဟုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်လည်း ရသားပဲ ဟု တွေးမိသည်။ “အေး။ စကတ်ဝတ်ထားရင် ရိုက်တဲ့အခါ နင်သိပ်နာမှာမဟုတ်ဘူး ချွတ်အုံးမှဖြစ်မယ်။ လှည့်လိုက်စမ်း။ ငါချွတ်ပေး မယ်” သူ့လက်များဖြင့် အသာဆွဲလှည့်ရင်း “မှန်ကို သေချာကြည့်ထား။ ငါ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ နင်မြင်မှ ဖြစ်မယ်” အမိန့်ပေးသည်။ သူမရှေ့တွင် ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးတစ်ခုရှိနေသည်။ တစ်ခါမှ သတိမထားမိခဲ့။ ခုမှ ဒီမှန် ကြီး ရှိနေခြင်း၏ အဖြေကို နားလည်ရတော့သည်။ သူမဖင်လုံးပေါ်တွင် လက်များက တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ပွတ်သတ် ပေးနေသည်ကို မြင်ရသည်။ ကြယ်သီးများဆီသို့ ရွေ့သွားပြီး သုံးလုံးလုံး ဖြုတ်ပြီးသောအခါ စကတ်ကို ဖြည်းဖြည်း ချင်းချွတ်ချလိုက်သဖြင့် သူ့ခြေထောက်ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျလာသည်။ ငုံ့ကြည့်လျှင် ရင်စည်းနှင့် ပိုးခြည်ဖြင့် တွဲထားသော အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုမြင်ရသည်။ “သေချာ ရှေ့ကိုကြည့်နေနော်။ စကားနားမထောင်ရင် အပို ပြစ်ချက်တွေ တိုးလာမယ်” သူ့ဖက်သို့ အသာလေး လှည့် ကြည့်လိုက်သော တောင်းပန် မျက်လုံးများကို မြင်လိုက်သဖြင့် စကားသံထွက်လာသည်။ သူသည် ပိုး ဘောင်းဘီ အောက်မှ ဖင်များကို ကြည့်နေသည်။ သူမက လှတော့ လှသည်။ ဒေါက်ဖိနပ်ကြောင့် မြင့်နေသော ခြေထောက်များမှ အနက်ရောင်ခြေအိပ်များတွင် ပေါင်သားတို့သည် တောက်ပလျှက်။ ဘောင်းဘီထဲအစွန်းတွင် တိုးထွက်နေသော အနီရောင် စောက်မွှေးလေးများကိုပင် မြင်နေရသည်။ ဒီညတော့ သူ အတွင်းခံကို ချွတ်ဖို့ စိတ်မကူး။ နောက်တစ်ကြိမ် မှာ
တစ်ဆင့်တိုး လာဖို့ ချန်ထားသည်။ နောက်ဆုံးချိန်ထိ အရသာကို တိုးတိုးခံစားရမည်ဖြစ်သည်။အပြစ် ဘယ်လိုတိုးတိုးခံရဦးမည်လဲ။ သူမသည် ခါးကို ဆန့်ထားသည်။ ပိုးဘောင်းဘီ တလျှောက် လက်များက ပွတ်သတ်နေသည်။ ဖင်လုံးများအား လှုပ်ခါကြည့်နေသည်။ ဖင်ကြားထဲ လက်ထည့်သောအခါ ဖင်ကိုအသာစေ့ ထားမိသည်။ လက်များကအတင်းမတိုး။ ပတ်ဝှေ့သွားနေသည်။ နောက်တော့ ဘောင်းဘီအောက် မှ ပေါင်သားများ ပေါ်သို့ ရောက်သည်။ ပေါင်ကြားတလျှောက် ပွတ်နေပြန်သည်။ “ခြေထောက်
ကိုချဲလိုက်စမ်း ထွေး” ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်ကို လွန်ခဲ့ပြီမို့ သူမသည် အမိန့်နာခံရန်သာရှိတော့သည်။ လက်များက ပေါင်ကြားကို တွန်းထိုးပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ကားသွားအောင် လုပ်ပေးသည်။ “ကားအုံး။ နင်ဒီထက် ပို လို့ရပါသေးတယ် ထွေးရဲ့” ပေါင်များပိုကားလာအောင် ကြားထဲကို လက်ထည့်ပြီးတွန်းပေးသည်။ “နည်းနည်း ပို လိုက် အုံး။ ခုပုံမျိုး မှန်ထဲမှာမြင်ရတာ ကြိုက်ရဲ့လား ထွေး?”ထွေး ခြေထောက်ကို ပိုချဲ့လိုက်သည်။ ခုဆိုလျှင် ၂ ပေခန့် ကားထားပြီးပြီ။ ပေါင်ကြားများသည် ဒေးဗစ်၏ သေချာ ပွတ်ပေးမှုကို ခံနေရသည်။ တစ်ဝက်တစ်ပျက် တုံးလုံးဖြစ်နေသော သူ့ပုံရိပ်တွင် ဘော်လီအောက်မှ ထောင်နေသော နို့သီးခေါင်းမာမာလေးများ၊ ပိုးသား ပင်တီ အဖြူရောင် နှင့် ခြေအိတ်ကို ဆွဲထိန်းထားသော ခါးပတ်စများ ကို မြင်နေရသည်။ သူ့မေးခွန်းကို ဘယ်လိုဖြေရမယ်မှန်းမသိ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှသည်ဟု
တစ်ခါမှမထင်ခဲ့ဘူးပေ။ သူမသည် သာမာန်ရုပ်ရေသာရှိသည်။ နို့အုံများက သေးငယ်သည်။ သို့သော် ဖင်ကကြီးသည်။ “သခင်ကြီး ကျေနပ် ရင် ပြီးတာပါပဲရှင့်” ခုလိုဖြေရင် သဘောကျမည်ဟု ထင်သည်။ “ငါ ကျေနပ်အောင် အမြဲလုပ်နေရင် ခုလို ရိုက်စရာ အကြောင်းမပေါ်ဘူး။ ကဲ ခုတော့ အချိန်ကျပြီ။ ဆိုဖာခုံပေါ်တက်လိုက် စမ်း။ ဒီဖက်ကို။ ဟုတ်ပြီ ဒူးထောက်လိုက်။ မှန်ဖက်ကို ကြည့်ထား” ဒေးဗစ်၏ လက်များက သူလိုချင်သည့် ပုံစံအတိုင်းပြင်ပေးသည်။ ဒေဗစ်လိုချင်သည့် ပုံစံအရ ထွေး သည် မှန်ကို မျက်နှာမူလျက် ထိုင်ခုံပေါ်တွင် လေးဖက်ထောက် အနေအထားဖြစ် သွား သည်။ မေးစေ့ကိုလက်ဖြင့် ပင့်တင်ပြီး သူမ ဘယ်လို လုပ်ခံရသည်ကို ကိုယ်တိုင် မြင်စေရန် မှန်ကို တည့်တည့် ကြည့်စေသည်။ ပေါင်များကို ပွတ်ပြီး ထပ်ကားအောင် လုပ်နေသည်ကို မြင်ရသည်။“ဟုတ်ပြီ။ အကျယ်ဆုံးထိအောင် ပေါင်ကိုထပ်ကားလိုက်စမ်း။ ခုံနဲ့ ထိသွားအောင် ကြိုးစား။” ကားပြီး မှောက်ချလိုက် ရာ တကိုယ်လုံး ဖွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်သွားပြီ “ဟုတ်ပြီ။
ကောင်းတယ်” ကျောကုံးကို အသာဖိချပြီး ခေါင်းကို ထောင် ပေးသည်။ နောက် ဗိုက်အောက်မှ လက်လျှိုကာ ဖင်ကို မြောက်နေအောင် ပြန်လုပ်သည်။ “ကဲ ဒီအတိုင်းနေ။ ထပ် မလှုပ် နဲ့တော့။ ပုံစံပြောင်းသွားလို့မရဘူးနော်” သူ မြင်ချင်သည့် ပုံအတိုင်း မြင်ရ၍ သဘောကျနေသည်။ သူမသည် လေ့ကျင့်ထားသော ခွေးလေးပမာဖြစ်နေသည်။ မှန်ထဲတွင် ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်မယုံချင်။ ဖင်က မြောက် တက်နေသည်။ ပေါင်တွေကကားနေသည်။နောက်က ကြည့်လျှင် ဘယ်လိုမြင်ရမည်ကို စဉ်းစား၍ရသည်။ အလိုးခံရန် အသင့်ဖြစ်နေသည့် ဖာသည်မလေးပမာပင်တည်း။ လက်များက ဖင်ကို လာပွတ်ပြန်သည်။ သူမ အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေ ထွက်လာသည်။ ဘုရားဘုရား။ ငါ အရည်ရွှဲလာတာ သူမသိပါစေနဲ့။ ထွေး ကိုနောက်ကကြည့်ရသည် မှာ အတော်ပင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလှသည်။ ကားထားသော ပေါင်များကြားတွင် စောက်မွှေးလေး များပြူထွက်နေသည်ကို ပင်မြင်ရသည်။ ဖင်ကလည်း ထောင်လျှက်။ စနေနေ့ဆိုလျှင် သူ့အတွက် ခုံ အသစ်ရမည်။ ဒီထက်ပိုကောင်းသော position ကို ချိန်လို့ရပေမည်။ သူ့လက်များက ဖင်ကို ပွတ်ပြန်သည်။ ဖင်ကြားက စေ့ထားသည်။ “ငါ့ပစ္စည်း ကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် သင်ပေးရမှာပဲ” ပထမဆုံး လက်ဝါးက သူမ၏ ညာဖက် တင်ပါးပေါ်သို့ကျ လာသည်။ ဖြန်းကနဲရိုက်သံသည် စာကြည့်ခန်းထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်သွားသည်။ “အား” သူမ၏ ဖင်နုနုပေါ်သို့ ရိုက်ချက်သည် အရိုးမှသည် ဦးဏှောက်ထိ ရောက်သွားသည်။ လှုပ်ဖို့ ကြိုးစား သော် လည်း ဒေးဗစ်၏ လက်များက တင်ပါးဆုံကို မြဲမြဲကိုင်ထားသည်။ အရိုက်ခံထားရသော တင်ပါးကို ပွတ်နေပြန်သည်။
နောက်တစ်ချက် “အား” ဒီတစ်ခါ ဘယ်ဖက် တင်ပါး။ လက်က ပွတ်ရင်း ဖင်ကို မြှောက်ပေးထားသည်။ “အများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဖင်ကို ပြန်မြှင့်ထားစမ်း။ ထောင်ထား” “ခြေထောက်ကို ထပ်ကားအုံး” ပေါင်ကြားထဲက လက်များက ပိုကားအောင် ချဲ့နေသေးသည်။ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို တစ်ချက်စီ အမြန်ထပ်ရိုက်လိုက်သည်။ နောက် ဆက် ပွတ်ပေးနေသည်။ ဘောင်းဘီ အနားစွန်းတွေကို ပွတ်နေခြင်းဖြစ်ရာ ကားသော ပေါင်ကြားထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း လိတ် ၀င်သွားသည်။ ပင်တီတွေ စိုရွှဲလာနေသည်ကို မြင်နေရသည်။ ဒီတစ်ခါ ၂ ချက် ထပ်ရိုက်သောအခါ ရိုက်ချက် သည်
ဘောင်းဘီပေါ်မဟုတ်တော့။ ပေါ်လာနေသော ဖင်သားများပေါ် ဖြစ်နေပြီ ။ ဖင်များ က လိုးချင်စရာ တုန်ခါ နေသည်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ နောက် ထပ် နှစ်ချက်။ “ကောင်းတယ် ထွေး “ လက်များက ပေါင်ကြားထဲရောက်လာ ပြီး အတွင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို ရိုက်သည်။ ပေါင် က ပိုကားသွားကာ ပင်တီ ထဲမှ အမွှေးတွေ ပို ထွက်ကျလာသည်။ သူ့လက်ချောင်းများက ဘောင်းဘီ ခလယ်စွန်းကို ဆွဲလိုက်သဖြင့် ဖင်ကြားထဲညပ်နေသလို ဖြစ် လာသည်။ အဖုတ်ကြား ညပ်နေသော ဘောင်းဘီစမှတစ်ဆင့် သူ့လက်ချောင်းများ စိုလာသည်။ “နင် အဆော်ခံရတာ နဲ့ အဖုတ်တွေရွှဲနေပြီ။ ဟုတ်လား ထွေး?” ထွေး ဒေးဗစ် ကို မှန်ထဲမှကြည့်ရင်း ရှက်လှသည်။ သူမရွှဲနေမှန်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားနေမှန်း သူသိနေပြီ။ ခုလိုပုံစံမျိုး
လုပ်ခိုင်း ၍ စိုလာသည်လား ရိုက်ခံရလို့ စိုသည်လား သူမ မသိ။ သို့သော် နောက်ထပ် ရိုက်ချက်ကို ဆက်ခံရဖို့ သေချာသည်။ “တော်ပါတော့ သခင်ကြီး” လေသံဖြင့် ပြောသည်။ “ကြောက်ပါပြီရှင်”ဒေးဗစ် လက်တစ်ဖက်က ဗိုက်အောက်ကို ထပ်ဝင်လာပြီး ဖင်ကို မြောက်အောင် တွန်းတင်ပြန်သည်။ နောက်ထပ် နှစ်ချက် အမြန်ရိုက်သည်။ သူမ၏ နာကျင်မှု နှင့် ညည်းတွားသံများနောက်တွက် သူ့လီးက တောင်
နေပြီ။ သူ့လက်များက ပေါ်နေသော ဖင်သားများကို ပွတ်နေသည်။ လက်ချောင်းတို့သည် အပျိုလေး၏ လုံးကျစ်သော ဖင်များကြားသို့ ၀င်သည်။ ဒီတစ်ခါတွင် ဖင်သည် စေ့မထားတော့။ ပို၍ အတွင်းကျသော နေရာများထိ လွယ်လွယ် ကိုင်၍ ရလာသည်။ “ဟုတ်ပြီ ထွေး၊ လျှော့ထား။ အဲလိုဖြစ်ရမှာပေါ့” သူ့လက်ချောင်းက ဖင်ကြားထဲသို့တိုးလာသည်။ ဘောင်းဘီကို ဖင်ကြားထဲ ပိုတိုးထည့်လိုက်သည်။ ဖင်ကြားက ညှစ်လိုက်သည်ကို လက်များက သိလိုက်သည်။ လက်က ပေါင်ကြားကို ပိတ်ရိုက်လိုက်သည်။ အရမ်းကို ကားစန့်သွားသော ပေါင်များကြားမှ ပင်တီကို ပွတ်သည်။ ချိုင့်နေသော နေရာလေးနားတွင် စက်ဝိုင်းပုံ ပွတ်ပေးနေသည်။ ဖင်ပေါက်လေးကို ပွတ်သောအခါ တုန်လှုပ်သွားသည် ကို ခံစားမိသည်။ “ဖင်ဝကို ထိုးတာ ကြိုက်ပုံရတယ်။ ဟုတ်လား ထွေး” လက်က ဖင်ကြားထဲ ဘောင်းဘီစခံလျက် တိုးဝင်လာသည်။ သူမကိုယ်ခန္ဓာက ပြန်ညှစ်ထုတ်သည်။ သို့သော် အခြားလက်တစ်ဖက် ရှေ့မှ ပြန်တွန်းနေသည်။ နောက် ထပ် ၂ ချက်ရိုက်ပြန်သည်။ ဖင်ကြားထဲသို့ပင် ထိအောင် ဆော်သည်။ ထွေး သည် သူမဖင်ကြားမှ လက်များကို ခံစားမိနေသည်။ သူ့ဖင်ကို လျှော့ချထားလိုက်ခြင်းဖြင့် လက်ထိုးထည့်မှု ကို ဖွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်နေသည်။ လက်က ဖင်ကြားထဲ ပိုတိုးဝင်နေသည်။ သူဘာဆက်လုပ်မည်ကို မသိသော်လည်း ဖင်ဝကို ကစားနေမှုတွေင် သူမ စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယ်က ပြန်ညှစ်ထုတ်တော့ ရှေ့က လက်တွေက ပြန်တွန်းပြန်သည်။ မှန်ထဲမှာမြင်နေရသည်။ ဒေးဗစ်သည် သူမ၏ မည်သည့် တွန်းလှန်မှု ကိုမျှ မလိုချင်။ နောက်ထပ် ၂ ချက်ရိုက်ပြန်သည်။ ဖင်နှိုက်၍ သူဘယ်လို ဇိမ်ကျသည်တော့မသိ။ သူမကိုယ်မှာ ကြောက်လန့်မှုက ပြည့်နေသည်။ လက်က အောက်ဖက်ပိုရွေ့ကာ အဖုတ်ပေါ်သို့ အုပ်ကိုင်လာသည်။ လက်မက အဖုတ်ထဲ တိုးဝင်သည်။
လက် နှစ်ချောင်း ရှေ့နောက်ထိုးကိုင်ထားမှုမှာ ဘောလုံးညှစ်ထားသလိုဖြစ်နေသည်။
ဒေးဗစ် က သူမ၏ အဖုတ်ကို ဆုတ်ပြီး နောက်ကို ဆွဲခြင်းဖြင့် ပွင့်အောင်လုပ်နေသည်။ “လေးချက် ကျန်သေးတယ်။ နှစ်ခါစီပေါ့။ ဒီတစ်ခါ အဖုတ်ကို
တီးမယ်။ ပွင့်အောင်လုပ်ထား။” လက်များက ပေါင်ကြားကို တွန်းကားကာ လုံးဝ ဖွင့် ပေးထားသည်။ ထွေး သည် နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ရိုက်ချက်များအတွက် စိတ်ကိုတင်းထားသည်။ အဖုတ်ကိုရိုက်မည်ဆိုသည်ကို မည်သို့ မျှ နားမလည်၊ သို့သော် သူ့ကို ထားထားပုံက သေချာပေါက်လုပ်မှာမှန်း သိသာသည်။ အဖုတ်သည် နူးညံ့သော အစိတ်အပိုင်းမို့ လန့်လည်းလန့်သည်။ ပို၍ပင် စိုရွှဲလာသည်။ နာတော့မည်မှန်းလည်း သိသည်။ သိရင်းပင် အရသာ တွေ့သလိုဖြစ်နေသည်။ နှစ်ချက် ဆက်တိုက် တီးခံရပြီ။ စိုနေသော ဘောင်းဘီစ ကို အဖုတ်သွင်းရိုက်သွင်းလိုက် သလို။ “အိုး။ အား။ ဘုရားဘုရား။ ကြောက်ပါပြီ” ဒေးဗစ် လက်များ သူမ၏ အဖုတ်မှ အရည်များကြောင့် စိုကုန်သည်။ စိုနေသော ဘောင်းဘီ ပေါ်မှ အဖုတ်ကို ဆက်ပွတ် ပေးနေခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုကို ဏှာ စိတ်သို့ပြောင်းပေးနေသည်။ မိန်းမပျိုလေးများသည် သူတို့၏ ဏှာ အင်္ဂါ များအား အလွန် နှုးညံ့ အထိမခံ ဟုထင်တတ်ကြသည်။ ဒေးဗစ်ကတော့ ယင်းတို့သည် အကြမ်းပတမ်း အပြစ်ပေး ခံရဖို့ လုပ်ထားသည်ဟု နားလည်သည်။ ထူသော အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများနှင့်
ပန်းရောင်အတွင်းသားများ ကို ရိုက်ပြီး တုန့်ပြန်မှုကို ကြည့်သည်။ နောက်တစ်ခါရိုက်လို့ရမည့် အချိန်ကို စောင့်ကြည့်နေသည်။ မကြာပါ။ သူမသည် ပြန်ကား သွားကာ နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် စောင့်နေလေပြီ။ “နှစ်ချက်ပဲ ထွေး၊ နင်က အတော်ရွှဲနေပြီ။ ပြီး သွားတော့မယ် ထင်တယ်။ အရိုက်ခံရရင် ပြီးတယ်ပေါ့။ ဟုတ်လား” ထွေး ရှေ့မှ မှန်ကိုကြည့်ရာ သူ့မျက်လုံးမှ ရမ္မက် အပြင် ရိုက်လိုက်တိုင်း ည၀တ်အင်္ကျီအောက်မှ တိုးထွက်နေသော လီးကြီး တောင်တက် တက် သွားသည်ကို မြင်နေရသည်။ နောက်ဆုံးရိုက်ချက် နှစ်ချက်ကို အနှေးပြကွက် ကြည့်ရ
သလို မြင်လိုက်ရသည်။ လက်ဖ၀ါးသည် သူမ ဖင်နောက်တွင် ပြောက်ကွယ်သွားသည်ကို မြင်ရပြီး ခဏအတွင်း အလွန် အမင်း နာကျင်မှုသည် အဖုတ်နှုတ်ခမ်း မှသည် အတွင်း အင်္ဂါများအထိ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ “အား” သူမ ဟစ်၍ အော်သည်။ သို့သော် ဖင်ကို ထောင်လျက် အနေအထားမှ မပျက်။ ဒေးဗစ် က လက်များကို အဖုတ်ပေါ်တွင် ကစားနေသည်။ လက်မက အဖုတ်တွင်းဝင်နေသော ရွှဲနေသည့် ဘောင်းဘီ ကို အထက်အောက် သွားနေစေသည်။ သူ မ အဖုတ်သည် ပြီးမည့် အချိန်ကို မျှော်လင့်နေမှန်းသိသည်။ ခုတော့ ဘယ် ရမလဲ။ သူမကို သူ ပြီးအောင် လုပ်မှာပေမယ့် ယခု မဖြစ်စေရပေ။ သူမကို ရွှဲနေသော အခြေအနေတွင် ထားပြီး သူ လို သလို ဆက်လက် သုံးစွဲဦးမည်သာ။ “ညည်း မဆိုးဘူး။ ဒဏ်ပေးတာကို ကောင်းကောင်း ခံတယ်။ ကဲ အခု သင်ခန်းစာ ရထားပြီဆိုတော့ အိမ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီ။ နောက်ဆို ငါ့စကား အတိုင်း သေချာ နေတတ်ထိုင်တတ်ပြီဖြစ်မယ်။”ထွေး
တစ်ယောက် အရမ်းကို ပြီးချင်နေသည်။ သူမသည် ဒေးဗစ်၏ အမိန့်အတိုင်းသာ လုပ်ရကိုင်ရ နေထိုင်ရမည် ကိုလည်း သိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရမှာပေတည်း။ ထရပ်လိုက်ရင်း ၀တ်စုံအောက်မှာ လီးတောင်ထွက် နေသော သူ့ပုံရိပ်ကို မှန်ထဲတွင်တွေ့ရသည်။ “ညည်း မအိပ်ခင် တစ်ခု ပြောထားအုံးမယ်။ ထွေး၊ ခုကစပြီး ငါညဖက်ရေချိုးရင် လာစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် မအိပ် ခင် ငါလိုတာ လုပ်ပေးရမယ်။ကဲ ထပြီး ဒီနားလာစမ်း။ ငါ ညည်းကို ဒီည တစ်ခုသင်ပေးစရာရှိသေးတယ်။ ငါ့ အတွက် ဇိမ်ကျအောင် လုပ်ပေးရမှာ။ လုပ်ပေးမယ် မဟုတ်လား ထွေး”ဒေးဗစ် ပြန်ထိုင်သည်။ ထွေး ဆိုဖာမှ ထလာသည်ကို ကြည့်နေသည်။ သူမသည် အလွန် sexy ဖြစ်နေသည်။ သူ၏ ရိုက်ချက်များကြောင့် ချွေးများပြန်ကာ အသားက ပို၍ စိုနေသည်။ ကားနေအောင် အကြာကြီး ကုန်းထားရာမှ ထလာရ ၍ ဖြေးဖြေးချင်း လှုပ်ရှားနေရသည်။ ဖင်ရိုက်ချက်များအား ဘောင်းဘီစိုစိုဖြင့် ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် လှုပ်တိုင်း နာနေသည်။ သူမကိုယ်ပေါ်မှာ ဘော်လီ၊ ခါးစည်း၊ ပင်တီ၊ ခြေအိပ်နှင့် ဒေါက်ဖိနပ် တို့ သာရှိသည်။ ဒေးဗစ်က ဆိုဖာခုံ ကို ဆွဲဖယ် လိုက်ကာ သူ့ရှေ့တည်းတည့်တွင် ခေါင်းအုံးတ်တစ်လုံးကို ချထားလိုက်သည်။ “ဒီကိုလာ ထွေး” လက်ယပ် ခေါ်သည်။ “ဒီခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ဒူးထောက်လိုက်စမ်း။ အေး ။ ဟုတ်ပြီ” လက်များက ပုခုံးကို
ကိုင်၍ ထိုင်ခိုင်းသည်။ သူမသည် ဒေးဗစ်ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ရင်း ကြောက်စိတ်ဖြင့် တုန်ရင်နေသည်။ သူမ ဘာလုပ်ပေးရမည်တော့သေချာ မသိ။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်သည်မှာ သူ့လီးကို တစ်ခုခု လုပ်ပေးရပေတော့မည်။ လက်ကိုသုံးခိုင်းမလား။ ပါးစပ်နှင့်လား။ တစ်ခုမှ သူမလုပ်ဘူး။ သူ့ခြေထောက်က သူမပေါင်ကြားသို့ဝင်လာပြီး ကားခိုင်းနေပြန်ပြီ။ “ပေါင်ကားပြီး ထိုင်စမ်း။ နင့်ခြေထောက်တွေကားထားတာ ငါသဘောကျတယ်။ ဟုတ်ပြီ ထွေး” ပေါင်ကြားသို့လည်း ထိုးသေးသည်။ “နင် စိုရွှဲနေတုံးပဲ ထွေး၊ ဒီတစ်ခါက ငါ့ကို ပြုစုပေးဖို့ပဲ။ ငါ့ လီးကို ဘယ်လို အရသာရှိအောင် လုပ်ပေး ရတယ်ဆိုတာ သင်ပေးမယ်။ သေချာ သင်ယူပြီး ညတိုင်း လုပ်ပေးရမယ်။ ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးရင် ငါဆုချမယ်။ မကောင်းရင်တော့ ထပ်အရိုက်ခံဖို့သာပြင်ထားပေတော့” သူရှေ့နည်းနည်းတိုးထိုင်လိုက်ပြီး ည၀တ်စုံကို ဟလိုက်ကာ လီးကြီးကို ထုတ်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရစဉ် ထွေး ထိတ်လန့်သွားသည်။ထွေး သည် ၈
လက်မကျော်ရှည်သည့် လူကြီးလီးကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေပြီ။ သူသည် ယောက်ျားတန်ဆာများ အကြောင်း ကြားဘူးသော်လည်း ဤမျှကြီးမားမည်ဟု တစ်ခါမှ မထင်ဘူးခဲ့။ ထိပ်တွင် အဖူးကြီးပါသည်။ နီညိုရောင် ကြီးဖြစ်သည်။ ထိပ်ဖျားတွင်
အပေါက်ငယ်လေးပါသည်။ အရည်လေး အနည်းငယ်ထွက်နေရာ အလင်းရောင်တွင် တောက်လျှက်ရှိသည်။“လက်တွေ ပေးစမ်း ထွေး” သူမအားပြောနေသော်လည်း မကြားနိုင်။ မျက်လုံးထဲမှာ ရှေ့မှောက်ရှိ လီးကြီးကိုသာ အာရုံဝင်စားနေသည်။ သူ့လက်များက ထွေး မေးစေ့ကို မလိုက်ကာ “ငါ့ကို လက်တွေပေး ထွေး၊ မင်း ခု ကိုင်လို့ရ တော့မှာပေါ့” သူမ မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်လိုက်ပြီး လက်ကို လီးအနားတိုးလိုက်သည်။ “လက်တစ်ဖက် မြှောက်ပြီး တစ်ချောင်းလုံးကို အပေါ်အောက် ကိုင်လိုက်စမ်း။ ဖြည်းဖြည်း။ လက်ကို ဖွထား။ ဟုတ်ပြီ။ အင်း… ကောင်းတယ်။ ထွေး
လက်တွေက နုသားပဲ။ ဟုတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းဆင်း။ ကဲ ပြန်တက်၊ ပြန်ဆင်း အဲဒီနားမှာ ခဏနား။ အောက်ခြေကို ဆုတ်ထား ။ နောက် လက်ဝါးတစ်ဖက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်တင်။ ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်။ ကောင်းတယ်။ လထစ်ကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆုတ်လိုက်။ နည်းနည်းကြပ်။ ကဲ တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ပြန်လုပ်။
လထစ်ကိုပါ ပွတ်။ အပေါက်လေး ပေါ်ကို လက်ချောင်းနဲ့ အုပ်။ အသာလေး ပွတ်။ လရည်လေးတွေ ထွက်နေတာ တွေ့လား။ ဟုတ်ပြီ အဲဒါကို လထစ်ပေါ် ဖြန့်ပွတ်လိုက်။ နင်လည်း ရွှဲလာပြီ မဟုတ်လား။ နင့်နှုတ်ခမ်းလှလှလေးကို ဖွင့်ပြီး လထစ်ကို လေနဲ့ မှုတ်လိုက်။ အိုး။ ကောင်းတယ်။ လေနွေးလေးက အတော်ကောင်းတာပဲ ထွေး။ နင် ဂွင်းတိုက်ပေးဘူးလား။ မလုပ်ဘူးဘူးလား။ နင်မဆိုးဘူးပဲ။ သဘာဝအတိုင်း လုပ်တာ ဒါမျိုးလုပ်သက်ရင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ထွေး လက်များက ပူနွေးသော အသားကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ သူမထင်သလောက် မာတောင့် မနေ။ နူးညံ့၍ နွေးနွေးကြီးဖြစ်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကို နားထောင်ရင်း လက်က လီးကြီးကို အစုန်အဆန် ပွတ်ပေးသည်။ လထစ်ကြီးကို ပွတ်သည်။ နွေးသော လရည်များကို စမ်းမိသည်။ လထစ်ပေါ်သို့ အရည်များကို ပွတ်ပေးသည်။ ခိုင်းသည့်အတိုင်း လေဖြင့်
မှုတ်ပေးသည်။ မှုတ်လိုက်လျှင် တောင် တောင် တက်သွားသည်ကို ကြည့်နေသည်။ “ကျွန်မတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပါဘူး သခင်ကြီး” “ကျွန်မလုပ်တာ မှန်ရဲ့လားရှင်” ဒေးဗစ် က သူမလက်တစ်ဖက်ကို ဆုတ်၍ ဂွေးဥများဆီသို့ ပို့ကာ ကိုင်ခိုင်းသည်။ ဒါက တစ်မျိုးဆန်းသည်။ ဥ နှစ်လုံးက ကပ္ပယ်အိတ်ထဲတွင် လှိမ့်၍နေသည်။ အနည်းငယ် ညှစ်လိုက်သောအခါ ဒေးဗစ်၏ ညည်းသံကိုကြားရသည်။ “ဖြည်းဖြည်း ထွေး၊ ဥတွေကို သိပ်မညှစ်နဲ့။ အဲဒီထဲမှာ နင် အရသာခံဖို့ လရည်တွေ တထောကြီးရှိတယ်။” သူခုံပေါ်တွင် သေချာပြန်ထိုင်ရင်း ထွေး ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည်ကို ကြည့်နေသည်။ ခုမှစလုပ်ဘူးသော သူမသည် သင်ယူမှု အတော်လေးမြန်သည်ဟုဆိုရမည်။ အစုန်အဆန် ထုပေးနေရင်း လက်မဖြင့် လထစ်ကို ပွတ်ပေးသည်။ လက်သည်းများက လထစ် အရစ်ကို အသာချစ်သည်မှာ သူ့ကို စ နေသလိုဖြစ်သည်။ “မင်းလက်တွေက အတော် ကောင်းတာပဲ ထွေး။ လီးတစ်ချောင်းကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရန်မှန်းသိနေပြီ”ထွေး အဖုတ်ထဲတွင် ပြန်ရွှဲလာပြန်သည်။ သူ့ လီး ကြီးကို ထုပေးနေရသည့် အလုပ်အပေါ် ဖီလင်ရနေသည်။ ထုသည့် နှုန်းကို နှေးလိုက်သောအခါ ဒေးဗစ် ခါးက ကြွပြီးရှေ့တိုး
လာသည်။ လဥမျာကို ညှစ်သောအခါ နည်းနည်းများသွား လျှင် ဖင်ကြွလာပြီး ညည်းသံထွက်လာသည်။ တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးသော်လည်း နားလည်လာကာ ဒေးဗစ်၏ ချီးမွန်း အားပေး သံတို့က ဆက်တိုက် ထွက်လျက်။ “အင်း။ အား လားလား။ အရမ်းကောင်းတယ် ထွေး။ မြန်မြန်လေး ထုစမ်း။ ငါ ထွက်တော့မယ်။ ထွက်တာနဲ့ ငါ နင့်ပေါ်ကို တည့်တည့်ထားလိုက်မယ်။ နင့်ကိုယ်ပေါ်ကို လရည်တွေ ပန်းပစ်လိုက်မယ်။ ဟုတ်ပြီ လား ထွေး” ထွေး ကျောင်းနေစဉ် တချို့ မိန်းကလေးတွေက လီး က ပူနွေးသော လရည်တွေ ပန်းထွက်လာတတ်မှန်း ပြောတာ ကြားဘူးပါသည်။ သို့သော် ဘယ်လိုဖြစ်မည်ဆိုတာ သူမ မမှန်းနိုင်။ အရည်တွေ ခုနလည်းထွက်လာသားပဲ။ သို့သော်
လထစ်ပေါ်က စိမ့်ရည်မျှသာ။ ဒါမျိုးပဲ ဆိုရင်တော့ သူမပေါ်ကို ပန်းနိုင်မည် မထင်။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်” သူ့လက်များက လီးကြီးကို သူမဖက်ချိန်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ ခုံပေါ်တွင် ထိုင်နေရင်းမှ ဒေးဗစ် သူမနား ပိုတိုးကပ်လာသည်။ လီးကြီးက ပိုမာတောင့်လာည်။ လက်တစ်ဖက်က လထစ်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း တစ်ဖက်က ဥများကို အသာညှစ်ရင်းဖြင့် လည်းကောင်း ထွက်လာအောင် လုပ်ပေးသည်။“ကောင်းတယ်
ကောင်းတယ်။ အား။ ခွေးမ။ ငါ့လရေတွေ ထွက်ကုန်ပြီ” သူ့ကိုယ် ရှေ့သို့ တိုးရင်း ပန်းသည်။ ဒေးဗစ် တစ်ယောက် ဥများအားညှစ်ကာ ရှေ့သို့ ထု ထုတ်ခြင်းကြောင့် အရည်များစွာ ဆွဲထုတ်ခံရသလို ခံစားရသည်။ “အား” ပထမအသုတ် လရည်များ ပန်းထွက်ကာ ထွေး၏ ဘော်လီပေါ်၊ မျက်နှာပေါ် ကျကုန်သည်။ ထွေး က ပထမသုတ် လရည်များပန်းသည်ကို တအံ့တသြ ကြည့်နေသည်။ သူထင်သည်ထက် ပို၍ အရှိန်ပြင်းသည်။ နွေးနွေးအရည်များ သူမကိုယ်ပေါ်ကျလာသည်။ လက်က ဆက်၍ ထုပေးနေသည်။ နောက်တစ်ဖက်က ဥကို ညှစ်ပေး နေသည်။ နောက် တသုတ် ထပ်ထွက်လာပြီ။ တချို့က သူမလက်ထဲကို ပန်းသည်။ လီးကြီးတလျှောက် လရည်များ ပေကုန် သောကြောင့်
ပို ၍ မြန်မြန် ဆက်ထုပေးနေ ရသလိုဖြစ်သည်။ နောက် ထပ် တစ်သုတ်။ လက်ဝါးထဲသို့ကျ သည်။ အားက လျော့သွားသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်လာအုံးမလားလို့ သူမ ပိုမြန်မြန် တိုက် ပေးနေသည်။ ထွက်တော့လာသည်။ လီးထိပ်မှ အရည်များ သာ စီးလာပြီး လီးကြီးတစ်ခုလုံး နှင့် ထုပေးနေသော လက်များကို စိုစေသည်။ “အား။..
သိပ်ကောင်းတယ်။ ပြီးအောင် ဘယ်လိုထုရမယ်ဆိုတာ နင်ကောင်းကောင်းသိသားပဲ” ပူနွေးသော လရည်များ သူမပေါ်တွင် ပေကုန်ပြီ။ “ငါလိုးမ။ အင်း.. ကောင်းတယ်” နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် သူမလက်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ထိုင်ခုံပေါ်သို့ ပစ်ထိုင်ချလိုက်သည်။ လီးကြီးမှာလည်း ပျော့ကျသွားသည်။ “ကိုင်း သွားလို့ရပြီ ထွေး။ နင် ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်တယ်။ သေချာ သင်ယူလိုက်သားပဲ” ထွေး ထလိုက်ပြီး အ၀တ်များကို ကောက်ယူကာ ပြန်မ၀တ်တော့ပဲ ထွက်ခဲ့သည်။ သူမ အလွန်ရှက်နေသည်။ အခန်းထဲ ပြေးဝင်ပြီး တံခါးကို အမြန်ပိတ်သည်။ အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ပြီး မျက်လုံးများကို မှိတ်ထားသည်။ မျက်လုံးထဲတွင် သူမ ဒေးဗစ်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်လျက် လရည်များ ပန်းထွက်ကာ သူမကိုယ်ပေါ်ကျလာတာ မြင်နေသည်။ သူမလက်များက အဖုတ် ဆီရောက်သွားကာ အစေ့လေးကို ပွတ်သည်။ သူမ ဖင်က ကော့တက်လာသည်။ ပိုကြမ်းကြမ်းပွတ်သည်။ “အားလားလား” သူမညည်းသည်။ လက်ကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ပြီးသွားမှုကို အသံမထွက်အောင် ကြိုးစားသည်။ လက်က စောက်ရည်များကို အရသာခံမိသည်။ လျှာဖြင့် လက်ချောင်းများကို လျက် ရင်း ထပ်ပြီးသွားပြန်သည်။ ပါးစပ်ထဲတွင် လက်မှာပေနေသော လရည်များပါ ၀င်သွားသည်။ သူ့ဘော်လီကလည်း လရည်တွေ စိုရွှဲနေဆဲ။
မနက်ကျတော့ ထွေး လန်းဆန်းစွာထလာသည်။ သူ ညက ပြီးသွားတိုင်း ဒီလိုထလာမြဲ။ မိဘမဲ့ကျောင်းက မိန်းကလေး များက သူမကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေး မရှိသော်လည်း အပြန်အလှန် လုပ်ကြကာ ကြီးလာလေ ပိုလုပ်ဖြစ်လေဖြစ်သည်။ ညက သူမ အရှက်ရခဲ့သည် တစ်ကိုယ်လုံး လရည်များ အဖြန်းခံရသည်။ ဒီနေ့ တွေ့လျှင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမည်လဲ သူမသိ။ စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ အ၀တ်လဲပြီး မီးဖိုထဲသွားကာ
မနက်စာ စားသည်။ ရာဂျူးက ရောက်နှင့်နေကာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို မော့နေပြီ။ သူမ၀င်လာသည်ကို ကြည့်နေသည်။ “မင်္ဂလာပါ ရာဂျူး”“ညက အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား ဟ” သူ့မျက်လုံးများက အနည်းငယ်အရောင်တောက်လျှက် မေးသည်။“အင်း။
ပြေပါတယ်” သူမ ညက ဒဏ်ပေးခံရမည်ကို ရာဂျူးသိပြီးမှန်း မေ့နေသည်။ ခုတော့ သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ပြီတီတီ အကြည့် တစ်ချို့မြင်ရသည်ဟုထင်သည်။ သူမ ဘယ်လိုလုပ်ခံရမယ် ဆိုတာ သူ သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်နေမလား။ “ကောင်းတာပေါ့
ထွေး၊ ဒါကြောင့် ငါ နင့်ကို သဘောကျတာ။ နင်က ဘယ်လို နေရမယ်။ ဒေးဗစ် ကျေနပ်အောင် ဘယ်လို ထိုင်ရမယ် သိသားပဲ။ ကဲ သွားတော့မယ်။ နင်လည်း လုပ်စရာတွေ
အများကြီးရှိသေးတယ်မဟုတ်လား” စနေနေ့တွင် အပြီးပေးဖို့ ခုံ ကို အမြန်ဆက်လုပ်ရအုံးမည်။ သူ့ စိတ်ကူး စိတ်သန်းကြောင့် ဒေးဗစ် စိတ်လှုပ်ရှား နေသည်။ ထွေးကို ခုံပေါ်တွင် ကုန်းလျက်၊ ဖင် ဘူးတောင်း ထောင်လျက်၊ ပေါင်များကားလျက် မြင်နေသည်။ တစ်နေ့တော့ ဒေးဗစ်က သူမကို ပေးနိုင်သည်။ သူ လည်း အဲလို နောက်က ဆော်ရမည်ထင်သည်။ ဖင်ကိုပါ ချရလျင် ပိုကောင်းမည်။ စိတ်ကူးနှင့် လီးတောင်လျှက် သူ့ အလုပ်ရုံဆီသို့ သွားသည်။ ထွေး စားသောက်နေစဉ် ဒေးဗစ် မီးဖိုထဲဝင်လာသည်။ ခေါင်းညိတ်ပြပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်ယူကာ ပြန်ထွက်သွားသည်။ နေ့ခင်းကျမှ စာကြည့်ခန်းခေါ်ပြီး နည်းနည်း သွေးတိုးစမ်းကြည့်ဦးမည်။ ထွေး က ဒေးဗစ် ကို နှုတ်ဆက်လိုက်သော်လည်း စကားသံထွက်လာချိန်မှာ ဒေးဗစ်မရှိတော့ပြီ။ ညက ဖြစ်ခဲ့တာ တကယ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဒေးဗစ်သည် သူမကို ရှိသည်တောင်မထင်။ ကဲ ထားပါတော့လေ။ သူမ ပုံမှန်အလုပ်များကို စသည်။ အခန်းများကို ရှင်းသည်။ ဒေးဗစ်၏ အိပ်ခန်း၊ နောက် စာကြည့်ခန်း။ ဆိုဖာခုံကို ကြာကြာကြည့်မိသည်။ သူဒူး
ထောက်ခဲ့ခြင်း၊ ဖင်နှင့် ပေါင်ကြားများကို ရိုက်ခံခဲ့ရခြင်း။ ပြီးနောက် ဒေးဗစ်၏ ထိုင်ခုံ၊ သူမပေါ် လရည်များပန်းချသည် ထိ ထုပေးခဲ့ရသောနေရာ။ ခေါင်းထဲမှ မနည်းထုတ်ပစ်ရသည်။ ပြန်တွေးတိုင် အဖုတ်က စိုလာသည်။ မနက်ခင်းက လျှင်မြန်စွာ ကုန်သွားသည်။ နေ့လည်စာအကြာကြီးစားသည်။ ထို့နောက် အလုပ်ဆက်လုပ်သည်။ ရာဂျူးနှင့် ဆုံသော အခါ သူမ စာကြည့်တိုက်ထဲရောက်နေသည်။ “ဒေးဗစ် က သူ့စာကြည့်ခန်းထဲလာခဲ့ဖို့ခေါ်နေတယ် ထွေး” သူမ တုန့်ပြန်မှုကို စူးစမ်းရင်း လာပြောသည်။ ထွေး အနည်းငယ် အံ့သြသွားသည်။ “ကျေးဇူးပဲ ရာဂျူး” သူမ တစ်ခုခု များ မှားလုပ်ခဲ့မိသေးလား။ထွေး
အခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် နားလည်လိုက်သည်။ ဒေးဗစ် က ခုံမှာထိုင်နေသည်။ ဆိုဖာက
သူ့ရှေ့ကြမ်းပြင်မှာ။ ည၀တ်စုံကို ၀တ်ထားသည်။ “ငါ ဒီည အပြင်သွားစရာရှိတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေ့ အလုပ်ကို ခုပဲ လုပ်လိုက်ရအောင်။ ဒီကိုလာ ထွေး.” သူ့အသံက လောလော လောလော နှင့် တောင်းဆိုသည်။ ထွေး လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးချလျှက် သူ့ရှေ့ရောက်သွားသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်.”သူ့လက်များက
သူမ ခါးကို ကိုင်ကာ ရှေ့ဆွဲလိုက်သည်။ ၀တ်စုံကို အသာဟထား၍ လီးကြီးကို တစ်စိတ်တပိုင်း မြင် နေရသည်။ “ဒီနေ့ နင့်ဖင်တွေနာနေလား ထွေး?” သူမကို လှည့်ပြီး ဖင်ကို ကြည့်သည်။ အသာပုတ်လိုက်သည်။ “ထပ် ချရအုံးမလား” နောက် တင်ပါးတစ်ဖက်ကို ထပ် ပုတ်သည်။“သိပ်မနာတော့ဘူး သခင်ကြီးဒေးဗစ်။ မနက်ကတော့ အတော်နာတယ်။ နည်းနည်းတော့ နာသေးတယ်။ အခု။” သူ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို တင်ပါးများကို ကိုင်ကြည့်နေတာ ခံရသည်။ ပွတ်သတ် ဆုတ်နယ် နေပြန်သည်။“ငါ စကတ် ချွတ်ကြည့်မယ်” ကြယ်သီးများကို အမြန်ဖြုတ်ကာ စကတ်ကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ “ချွတ်လိုက် ထွေး၊ ပြီးတော့ အင်္ကျီ၊ ချွတ်လိုက်စမ်း မြန်မြန်လေး။ ငါအချိန်မရဘူး။”ထွေး အမြန်ချွတ်လိုက်ပြီး ဘော်လီ၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီ၊ ခါးစည်း၊ ခြေအိတ် တို့သာ ကျန်တော့မှ ဒေးဗစ်ကို ကျော ပြန်ပေးလိုက်သည်။ ဒေးဗစ်လက်များက ပိုးသား ပင်တီ ပေါ်မှ ပွတ်နေသည်ကို ခံစားရသည်။ “ပေါင်ကားလိုက်အုံး။ ထပ် ကား။ ဟုတ်ပြီ” ခြေထောက်တွေက ခြဲထားတာ ၃ ပေလောက် ရှိပြီ။ “ခါးကိုင်းပြီး ဒူးတွေကို လက်နဲ့ကိုင်လိုက်စမ်း၊ ဟုတ်ပြီ။ ကုန်း၊” ခါးကို လက်ဖြင့် ဖိချပြီး ဖင်ကို မြောက်နေအောင်လုပ်သည်။ တင်ပါးများက သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ ဖျားယောင်း နေသည်။ “ဟုတ်ပြီ ကောင်မလေး။ ပေါင်ကြားကနေ ငါ့မျက်နှာကို ကြည့်နေနော်။”ထွေး စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး ဖွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်နေသည်။ ဖင်များက သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ။ ပေါင် ကြားမှ သူလှမ်းကြည့်တော့ အားလုံးက စောက်ထိုး။ သူက
သူမ တင် များကို သေချာကြည့်နေသည်။ အသားများကို ပွတ်သတ်နေသည်။ ပေါင်ကြားကို
ပွတ်သည်။ ဘောင်းဘီ စွန်းမှပြူနေသော စောက်မွှေးလေးကို အသာဆွဲ ထုတ်သည်။ နာသဖြင့် သူမညည်းသည်။ ဒေးဗစ်က သူမ၏ ဘောင်းဘီကို ဆွဲပြီး ဖင်လုံးများ ပေါ်လာအောင်လုပ်သည်။ ဘောင်းဘီစက အဖုတ်ထဲသို့ တိုးဝင်သွား ပြီး အဖုတ်နှုတ်ခမ်းများကို ခွဲလိုက်သည်။ လက်ချောင်းများက ဖင်ကြားထဲ ထိုးဝင်ပြီး ရွှေ့ကာ အဖုတ်အထိ ရောက်သွားသည်။ ဘောင်းဘီမှာ စိုလာမှန်းသူသိသွားသည်။ “ရွှဲလာပြန်ပြီလား ထွေး? ပေါင်ကြားမှ သူမမျက်နှာကို စိုက်ကြည့်ရင်း လက်ချောင်းများ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းပွတ်သည်။ ဖင်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပြီး “ဒူးထောက်ပြီး ရှေ့မှာထိုင်စမ်း။ မြန်မြန်” အင်္ကျီထဲမှ လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ “ငါ့ကို ထပ် ဂွင်းတိုက်ပေးစမ်း။ သင်ပေးစရာ မလိုတော့ဘူးမဟုတ်လား။ ဟေ”ထွေး အဖုတ်ထဲမှာ
ယားပြီး စိုနေပြီ။ သူမ ပြန်ရပ်လိုက်ပြီးမှ ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ချလိုက်သည်။ “ရပါပြီ သခင်ကြီး။ ကျေနပ်အောင် သမီး လုပ်တတ်ပါပြီ” လက်တစ်ဖက်က လီးကြီးကိုကိုင်၊ နောက်တစ်ဖက်က ဥများကို အသာ ကိုင် သည်။ ဂွင်း စ ထုပေးပြီ။ လေနှင့်လည်း အသာမှုတ်ပေးသည်။ ဥကို အသာလေး ညှစ်ပေးသည်။ တစ်ဖက်က ဖွဖွလေး စုန်ချီဆန်ချီ တိုက်ပေးသည်။ “ဒီတစ်ခါ ငါ ပြီး ရင် နင့်မျက်နှာကို ပန်းမယ်။ အ၀တ်တွေပေါ် မကျစေနဲ့။ မျက်စေ့ကို လည်း ပိတ်မထားမိစေနဲ့။ ငါ ပြီးရင် နင့်မျက်လုံးတွေကို မြင်ချင်တယ်” ခုံပေါ်တွင် မှီထိုင်ရင်း ချစ်စရာ မိန်းမပျိုလေးက ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည်ကို ခံစားနေသည်။ လေနှင့် မှုတ်ပေးနေသဖြင့်
သူ့ လီးကြီးမှ နှစ် လက်မ လောက်သာ ဝေးသော သူမ မျက်နှာကို သေချာ ကြည့်နေသည်။
အရသာ အလွန်ရှိသည်။ ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပဲ။ သို့သော် ဒီညသည် သူ့ကို ဂွင်းတိုက်ပေးရတာ နောက်ဆုံးညသာ ဖြစ်ပေမည်။ နက်ဖြန် ဆိုလျှင် စနေနေ့။ သူမ၏ ပါးစပ်ကို စသုံးရတော့မည်။ ပြီးရင် လုပ်ခိုင်းထား သော ခုံအသစ်ကို သုံးရမည်။ ကြည့်နေရင်း သူသည် ပြီးကာနီးလာပြီ။ သူမလက်များက လည်း ပိုမြန်လာသည်။ “ကပ်ထား။ နင့်မျက်နှာကို” ပထမဆုံး လရည် တစ်သုတ်က သူမ နှာခေါင်းကိုတည့်တည့်ပန်းသည်။ ရုတ်တရက် ထွက်လာသော လရည်များကြောင့် သူမ နောက်ကို တစ်ချက် တွန့်သွားသည်။ နောက်တစ်ချက်က ပါးပေါ်သို့ ကျသည်။ ပါးစပ်နားသို့ရောက်သည်။ “ငါ မပြောမချင်း သုတ်မပစ်နဲ့အုံး” သူမ ခေါင်းကို ဆွဲကပ်လိုက်ပြီး “ဆက်ထု။ နောက်တစ်ခေါက်ထွက်အောင် လုပ်စမ်း ထွေး ” သူမ ဆက်လုပ်နေသည်။ ဥလေး များကို ညှစ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ သူမနှုတ်ခမ်းများကို ပန်းသည်။ သူက နှုတ်ခမ်းပေါ်က လရည်များကို ဆွဲ စု ကာပါးစပ် တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်စွန်းသို့ ဖြန့်သည်။ “ကဲ နှုတ်ခမ်းတွေပြောင်အောင် လျက်လိုက်စမ်း ထွေး။
ဘာမှ မကျန် စေနဲ့”ထွေး မျက်နှာပေါ်သို့ လရည်များ ပန်းခံရပြီ။ ပူနွေးသော
လရည်များက မျက်နှာပေါ်မှာ စီးနေစဉ် ပို၍ ပို၍ သိမ်ငယ် သွားသလို ခံစားရသည်။ သုတ်မပစ်ဖို့လည်း ပြောသည်။ မျက်နှာကို ဆွဲကပ်ပြီး နောက်ဆုံး တစ်သုတ်ထွက်အောင် လုပ်ခိုင်းသည်။ သူမနှုတ်ခမ်းကို ပန်းချင်မှန်း နားလည်သည်။ နှုတ်ခမ်းက်ိုလျက်ခိုင်းနေပြီ။ သူမ မလုပ်ချင်။ သို့သော် မငြင်းပယ်နိုင်။ ညက သူ့လရည်များကို ကိုယ့်လက်ကို စုတ်ရင်း အရသာခံဘူးပြီ။ လျှာကို အသာထုတ်ကာ နှုတ်ခမ်း များကို သတ်သည်။ ပါးစပ်ထဲ လျက်သွင်းသည်။ ချွဲချွဲ ငံကျိကျိ အရသာကို ခံစားရင်း လျှာဖြင့် နှုတ်ခမ်းကို ထပ်သတ် နေသည်။ “ငါ လရည်ထွက်လာတုန်း နင် နောက်ကို တွန့်သွားတယ်မဟုတ်လား။ နင် နက်ဖြန်ညကျ တစ်ခါ ဒဏ်ပေးခံရမယ်။ ကဲ သွားတော့။ ငါလည်း အပြင် သွားတော့မယ်”ထွေး
အ၀တ်များကို ကိုင်ကာ အပြင်ပြေးထွက်ခဲ့သည်။ နှာခေါင်းနှင့် ပါးပေါ်မှာ လရည်တွေနှင့်။ နက်ဖြန်ည ဒဏ်ထပ် ပေးခံရမည် ဆိုသောကြောင့် မျက်ရည်တွေလည်း ကျဆင်းနေသည်။ ဒီတစ်ခါ ဆို အရင်တစ်ခါထက် ပိုဆိုးမည်မှန်း လည်း သိသည်။ အခန်းထဲပြန်ဝင်ကာ ငိုညည်းနေသည်။ လက်များက ရွှဲနေသော အဖုတ်ဆီရောက်သွားကာ အစေ့
ကို ရှာသည်။ မာတောင်နေသော အစေ့ကို ပွတ်သည်။ ခါးက ကုတင်ပေါ်မှာ တစ်လှုပ်လှုပ်နှင့် ပြီးသွားသည် အထိ ပွတ်နေသည်။ သူမလက်ချောင်း တချို့က မျက်နှာပေါ်က လရည်များကို သုတ်ကာ ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်သည်။ ကျန်လက်များကို ပေါင်ကြားထဲမှာ ညှပ်ထားသည်။ အခန်း (၄)ထွေး အိပ်ယာပေါ်မှာထထိုင်သည်။ မျက်နှာတွင် ထိတ်လန့်ခြင်းဖြင့်။
တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ။ အိပ်မက်ဆိုးမှ လန့်နိုး စဉ် မသက်မသာ ဖြစ်သလိုမျိုးလား။ အာရုဏ်တက်နေပြီ။ ပြူတင်းမှ အလင်းရောင် စတင်ထိုးကျလာနေသည်။ အခန်း ထောင့်တစ်နေရာတွင် လှုပ်ရှားမှု တွေ့လိုက်သလိုရှိသဖြင့် ရုတ်ချည်း လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ အိပ်ချင်မပြေသေး သော
မျက်လုံးများက အရိပ်မည်းတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “သခင်ကြီးဒေးဗစ်၊ ဟုတ်လားဟင်?” အခန်းထောင့် ရှိထိုင်ခုံပေါ်သို့ သူ့မျက်လုံးများက စူးစိုက်ကြည့်မိသွားပြီး ကြောက် လန့်တကြား မေးမိသည်။ ပိုရှင်းရှင်းမြင်ရလာသည်။ ဒေးဗစ်သည် အခန်းထောင့် ခုံပေါ်တွင် ထိုင်နေသည်။ ညက
၀တ်ထားသော ည၀တ်ရုံကို ၀တ်ထားပြီး သူမကို ကြည့်နေသည်။ “ဘာကြောက်စရာရှိလည်း ထွေး။ ဒါ ငါ့အိမ်လေ။ ငါ ကြိုက်တဲ့နေရာကို ကြိုက်တဲ့အချိန် သွားမယ် လာမယ် ပြောထားသားပဲ”ထွေး
စောင်ကို လည်ပင်းထိခြုံလိုက်သည်။ သူမကိုယ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ကြပ်ပိုးအတွင်းခံသာ ရှိကြောင်း သတိရ၍ဖြစ်သည်။ “ခွင့်လွှတ်ပါ သခင်ကြီး၊ အဲဒါပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၀င်လာတာ မသိလိုက်လို့ လန့်သွားတာပါ။” “ငါရှိနေတယ်ဆိုတာ ရိုးနေမှဖြစ်မယ်။ ငါ က နင့်အခန်းအပါအ၀င် တစ်အိမ်လုံးကို အချိန်ပြည့်သုံးမှာပဲလေ။ ကဲ အိပ်ယာ မြန်မြန်ထ၊ ဒီနားကိုလာစမ်း။ ဒီနေ့ စနေနေ့။ နင့်မှာ လုပ်စရာ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ညကျရင်လည်း ဒဏ်ပေး ခံရအုံးမယ်။ ငါ တစ်နေကုန် စောင့်မနေနိုင်ဘူး”ညကျအပြစ်ခံရအုံးမည်ဆိုသောစကားမျှနှင့်ပင်
ထွေး အိပ်ယာထဲက ခုန်ထလိုက်သည်။ နောက်ထပ် အနာခံရမှာ ကြောက်နေသည်မဟုတ်လား။ အတွင်းခံများကို အသာဆွဲဆန့်သည်။ ပိုးစသည် သူမ၏ အရေပြားတစ်ခုနှယ် ကပ် နေသည်။
၀တ်ထားသော်လည်း တုံးလုံး လိုပင်ဖြစ်နေသည်။ အပေါ်ပိုင်းကလည်း ဟိုက်လွန်းသဖြင့် ရင်နှစ်မွှာကြား က ထင်းထင်းပေါ်နေသည်။ ကျန်အ၀တ်အစားတို့က သူမ၏ သေးသောခါး၊ ကျစ်လျစ်သော တင်နှင့် အတူ အဖုတ် ကိုပါ ရေးရေးမြင်နေရသလိုရှိသည်။ သူမ အမြန်လာသည်ကို ဒေးဗစ် ကြည့်နေသည်။ ခြေပြောင်နှင့် လျှောက်လာစဉ် လှမ်းလိုက်တိုင်း တင်ပါးဆုံတို့က ဏှာထဖွယ် လှုပ်ရှားနေသည်။ ညက သူ့မိတ်ဆွေများနှင့် သောက် နေခဲ့သည်။ ထုံးစံအတိုင်း မိန်းကလေးတွေ နှင့်လည်း ဆုံသည်။ သို့သော် သူ ၀င်မပါခဲ့။ စိတ်ထဲမှာ ထွေးကို ဘယ်လို ကျင့်ပေးရမလဲ။ သူကြိုက်သည့် ပုံစံ ဘယ်လို သွင်းယူမလဲ သာ စဉ်းစားသည်။
ဒီခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေတာ တစ်နာရီလောက်ပင်ရှိပြီ။ အိပ်နေသော ထွေးကို ကြည့်နေသည်။ နေရောက်က အခန်းထဲ ၀င်လာတော့ အပြစ်ကင်းသော သူမမျက်နှာကို တွေ့သည်။ ဒီအပြစ်ကင်းမှု ကို မကြာခင် သူမထံမှ သူ ရယူသွားပေတော့မည်။ အသက်ရှုသည်ကိုကြည့်နေရင်း သူ့လီးက တောင်လာသည်။ သူမက ဂွင်းတိုက်ပေးနေသလို စိတ်ကူးယဉ်သည်။ သူမ၏ လျှာလေးဖြင့် စုတ်ပေးခံရသလို ဖီလင်ဖြစ်သည်။ လေနွေး လေးနှင့် လထစ်ကို မှုတ်ပေးနေသလို ခံစားသည်။ ညအထိ သူမစောင့် နိုင်တော့။ ချက်ခြင်းပင် ဆန္ဒဖြည့်ခိုင်းဖို့ လုပ် တော့သည်။ သူ့အနားလာရန် လက်ယတ်ခေါ်နေသည်ကို ထွေး တွေ့ရသည်။ သူ့လီးကို နောက်တစ်ကြိမ် ကောင်း အောင် လုပ်ပြီး သူမမျက်နှာပေါ် ပန်းဦးမည်လား။ မည်သို့ဖြစ်စေ သူ စိတ်ဆိုးမှာ မလိုလားသည့် အတွက် ရှေ့ကိုတိုးလာသည်။ သူ့လက်များက သူမကိုယ်ပေါ် ရောက်လာပြီ။ ဘောင်းဘီအောက်မှာ ချောမွတ်နေသာ တင်ပါးဆုံကို ဆုတ်ကိုင်သည်။ ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ တင်ပါးများကို ပွတ်နေသည်။ သူမ ဖင်ကို လျှော့ထားသည်။ ဖင်ရှုံ့ထားလျှင်လည်း အပြစ် တစ်ခု ဖြစ်ဦးမည်မှန်း သိနေသည်။ သူမခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အပြည့်အ၀ ထိတွေ့ခွင့် ပေးမှသာ ကျေနပ်မည်ဖြစ်သည်။ သူမအသားနုနုကို
ကိုင်တွယ်ရင်း ဒေးဗစ် ကျေနပ်စွာ လီးတောင်နေသည်။ “ခြေထောက်” “ခြေထောက်တွေ ကားပေးစမ်း” ပေါင်ကားလိုက်သဖြင့် အတွင်းခံက ပိုကြပ်သွားသည်။ လက်က ပေါင်ကြားကို နှိုက်သည်။ အဖုတ်ပေါ်မှ အမွှေးနုများကို စမ်းမိသည်။ စောက်မွှေးနီနီလေးများဟု သူမြင်ယောင်သည်။ ချက်ခြင်းပင် ကြည့်ချင်လှပြီ။ “နင်ရေချိုးတာ ငါကြည့်ချင်တယ်။ လုပ်စမ်း” ထွေး သူ့ရှေ့မှာ တစ်ခါမှ ကိုယ်တုံးလုံးမချွတ်ဘူးသေး။ ခုတော့ ချွတ်ခိုင်းပြီး သူရေချိုးသည်ကို ကြည့်မည်ဟု ဆိုလာ သည်။ တွေတွေဝေေ၀နှင့်ပင် ရေချိုးကန်ဆီသူမရောက်သွားသည်။ ရေပိုက်ကိုဖွင့်ပြီး ရေနွေးစပ်သည်။ ဒေးဗစ် သူ့ခုံ ကို ရေချိုးကန်နားရွှေ့လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကန် ခေါင်းရင်းမှာ နေရာချသည်။ အဲဒီနေရာဆိုလျှင် သူမရှေ့ပိုင်းကို သေချာမြင်ရမည်။ ဆပ်ပြာမြှတ်နဲ့ ချိုးရင်
ပုံးသာ ကွယ်သာ ရှိမှာပဲဟု စဉ်းစားနေသည်။ “ငါ့ဖက်လှည့်စမ်း ထွေး၊ ခါးစည်းကို ဖြည်လိုက်။ နင့် နို့တွေ ငါမမြင်ဘူးဘူး။ နို့သီးခေါင်းတွေ ထောင်
နေတာပဲ တွေ့ ဘူးတာ။ နင့် နို့သီးခေါင်းတွေကြီးတယ်လို့ ငါ့ကို ပြောဘူးတယ်မဟုတ်လား။ ကဲ ပြစမ်းပါအုံး။ ဟုတ်လား မဟုတ်လား အမြည်း ပေါ့။” ရယ်ရင်းပြောသည်။ သူမရင်သားများ ကမကြီးလှသော်လည်း ကျစ်လစ်လှပသည်ဟု ဂုဏ်ယူလေ့ရှိခဲ့သည်။ တချို့မိန်းကလေးတွေဆိုလျှင် နို့ကြီး ကြီး များရှိကြပြီး ငါးနှစ်လောက်ကြာရင် ဗိုက်ပေါ်ရောက်တဲ့ အထိ တွဲကျသွားနိုင်သည်ဟု ပြောခဲ့ကြသည်။ ခါးစည်းကို အသာဖြုတ်ရင်း ဘော်လီကို ဖြည်ချသည်။ လက်များက ဖြည်လက်စပုံစံဖြင့် ရင်သားများကို တစ်စိတ်တစ် ပိုင်း ကာကွယ်သည်။ ဒေဗစ်၏ လက်များက သူ့ဘောင်းဘီဆီရောက်သွားပြီး ဇစ်ကို ဆွဲဖွင်လိုက်သည်ကို တွေ့လိုက် ရသည်။ ဇစ်နောက်သို့ လက်ထည့်လိုက်ကာ သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဆုတ်ကိုင်ထားသည်။“နင် ငါ့ကို လီးတောင်အောင် လုပ်တာပဲ ထွေး၊ နင်ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ သိတယ်မဟုတ်လား။ လုပ်မလား?”ကိုယ့်ဟာကို ဂွင်းတိုက်ပြနေသော သူ့လက်များကို သူမငေးကြည့်နေသည်။ သူမကို လုပ်ခိုင်းတော့မည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်” “နို့ကိုပြစမ်း။ နို့သီးခေါင်းကို” ဒေးဗစ် စိတ်မရှည်တော့။ လန့်သွားပြီ။
ထွေးငယ် ဘော်လီကို ခါးသို့ လွှတ်ချလိုက်သည်။ သူမရင်သားများကို ပထမဆုံးအဖြစ်
ဒေးဗစ်ကို ဖော် ပြလိုက်ရသည်။ လက်များကို ဘေးမှာချလျက်။ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ မဆုံးဖြတ်တတ်သေး။ အ၀တ်ချွတ်ခိုင်းခြင်း မှာ သူမ တုန်လှုပ်နေသည်။ သူမကိုကြည့်ရင်း
ဒေးဗစ် နှုတ်ခမ်းများကို လျှာနှင့်သပ်မိသည်။ ဖြူနုသော အသားအရေပေါ် တွင် အညိုရောင် အောက်ခြေ အရစ် မှ ချွန်တက်နေသော ပန်းရောင် နို့သီးခေါင်းလေးများ။
ဆံပင်နီညိုသူတို့သည် အသားဖြူပြီး နေလောင် ခံရတတ်သော အသားအရေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သူမကို မျက်စေ့ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နီညိုရောင် စောက်မွှေး လေးများရှိလိမ့်မည်ဟုလည်း တွက်ထားသည်။ စဉ်းစားရင်း သူ့လီးက ခုန်လျက်။ သူမသည် အလန့်တကြား ငေးလျက်။ သူနှင့် မျက်နှာချင်းမဆိုင်အောင်လည်း လွှဲဖယ်လျက်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် သူမကို လုံးဝ ပြောင်သလင်းခါအောင်လုပ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သော်လည်း - “နို့သီးခေါင်းတွေကို လက်ထိပ်နဲ့ စမ်းကြည့်စမ်း။ မာ တင်း လာတာ ကြည့်ရအောင်”သူမသည် ဤနည်းများဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန္ဓဖြည့်လေ့ရှိပါသည်။ ခါတိုင်းထက်ပိုစွာပင် ဒေးဗစ်ကို ဆန္ဓဖြည့် ပေးရ သည့် အခါအပြီးတွင် လုပ်မိသည်။ သို့သော် သူများရှေ့တွင် တစ်ခါမျှ မလုပ်ဘူးပါ။ ကိုယ့် နို့သီးခေါင်းလေးများကို စိုက်ကြည့်နေသော ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ရှေ့တွင် ပွတ်သတ်မိသောအခါ ပို၍ သိသာသော ခံစားမှုကို ရသည်။ တင်းလာသော နို့များကို ဆက်ပွတ်သည်။ နို့သီးခေါင်းကို လက်သည်းနှင့် ဆိတ်မိပြီးရလာသည့် နာကျင်မှုတွင် ပို၍ အရသာတွေ့သည်။ နှိပ်စက်ခြင်းခံလိုသည့် ဏှာစိတ်မျိုးတွေသူမမှာ ၀င်နေလေပြီ။ ဒေးဗစ်
က သူမ၏ နို့လေ့ကျင့်ခန်းကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ သူမမျက်လုံးများက တစ်ဝက်တပျက် မှိတ်နေပြီး ဖီလင် တက်နေသည်ကို တွေ့သည်။ သူမ ခါးတို့က အနည်းငယ်လှုပ်ခါကာ မည်မျှ စိုနေသည်ကိုပြသည်။ “လက်ကို တံတွေးဆွတ်ပြီး နို့ကိုပွတ် ထွေး” လက်နှစ်ချောင်း ကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ လျှာနှင့် တံတွေးဆွတ်သည်ကို ကြည့်ရင်း သူ့ လီးကြီးကို လျက်နေသယောက် ဒေးဗစ် လီးက ရွထလာသည်။ သူမသည် သူ့ကို စ နေပုံရသည်။ လက်ကို ပါစပ်ထဲ ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်နေသည်။ ထွေးသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံနိုင်။ လက်ချောင်းများကို လီးလိုစုတ်မိနေသည်။ နောက် နို့သီးများကို အသာပွတ်သည်။ စိုသောလက် အထိအတွေ့ကြောင့် ပို စိတ်လှုပ်ရှားသည်။ အဖုတ်ထဲမှာ ပို စိုလာပြီ။ ရေချိုးရမှာ မို့ တော်သေးသည်။ သူမနို့များ ဤမျှတင်းလာသည်ကို မကြုံဘူး။ ခုတော့ ပေါက်ကွဲတော့မတတ်ပင်ဖြစ်နေသည်။ နို့သီး အခြေ လေးများကို ပွတ်ပြီး အရသာပိုတွေ့လာသည်။ သူမ၏ ဏှာအိပ်မက်သည် ဒေးဗစ်၏ အသံကြောင့် ဆုံးသွား သည်။ “အောက်ခံဘောင်းဘီကို
ချွတ်စမ်း။ ငါ စောက်မွှေးနီနီလေးတွေ ကြည့်ချင်တယ်” ဒေးဗစ် သည် ချွတ်နေသည်ကို ကြည့်ရင်း ဂွင်းတိုက်နေသည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ချွတ်ရင်း စောက်မွှေးလေးများကို ကြည့်ကာ ပြီးတော့မလိုပင် ဖြစ်သွားရ သည်။ ဒါမျိုးသူတစ်ခါမျှ မမြင်ဘူးသေး။ သူ စိတ်ကူးဘူးသည်။ သို့သော် တစ်ခါမှ မကြုံ။
ဦးဖေခင်၏ ဖုန်းဖြင့် သတင်း ပေးမှုကြောင့်ပင် ထွေး အကြောင်းကြားရင်း လီးတောင်ခဲ့ဘူးသည်။ ဈေးတော့ကြီးသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် သူ့ အနေနှင့် လက်လွတ်မခံနိုင်။ ခုတော့ တော်တော်တန်သည်ဟု ဆိုရမည်။ စောက်မွှေးလေးများသည် ဆံပင်များကဲ့သို့ ပင် နီညိုရောင်တောက်လျက်။ တော်တော်လည်း ထူသည်။ သူ့ ပျော်တော်ဆက် မိန်းကလေးများကို အမွှေးရိတ်ပေး လေ့ရှိသော်လည်း ဒီတစ်ယောက်တော့
မပါနိုင်ပေ။ ထွေး လက်ကျန်အ၀တ်ကို ကြမ်းပေါ်ပစ်ချပြီး သူ့ရှေ့တွင် တုံးလုံးရပ်နေသည်။ သူ့ကိုကြည့်သောအခါ သူမမျက်နှာ ကို ကြည့်မနေ။ ပေါင်ကြားကိုသာ စူးစိုက်နေသည်။ အလွန်အမင်း ရှက်ဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ လက်နှစ်ဖက် ဘေးချကာ နောက်ထပ် ဘာခိုင်းမလဲ စောင့်သည်။ “လှတဲ့ အမွှေးနီလေးပဲ။ ဒါပေမယ့် ငါ အထဲကို ကြည့်ချင်သေးတယ်။ ရှုးပေါက်သလို ဖြဲပြစမ်း။ ပေါင်ကို ကားလိုက်။”ပေါင်နှစ်ဖက်ကို
နှစ်ပေခန်းရောက်အောင်ကားလိုက်သည်။ လက်ကို အဖုတ်ပေါ်တင်ပြီး အသာပွတ်လိုက်သည်။ သူမလက်များက အမွှေးနုလေးများကို သပ်တင်ကာ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းလေးများကို အသာဖြဲပြ သည်။ အခန်းတွင်းလေအေးကြောင့် ရွှဲစိုနေသော
အဖုတ်အတွင်းသား လေးများ အေးကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ အဖုတ်ကို ဖြဲပြရင်း မျက်နှာသည် ရဲတွတ်လျက်။ သူမလက်များက သူမ၏ အလျှို့ဝှက်ဆုံးနေရာကို သူတပါးကို
လုံးဝဖွင့်ပြ နေရသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်” “ချစ်စရာလေးပဲ ထွေး၊ ပန်းရောင် အတွင်းသားလေးကို အနီရောင် ချုံပုတ်လှလှလေးနဲ့ ၀ိုင်းထားတာပဲ” ဒေးဗစ်၏ လက်များက သူ့လီးကို ဂွင်းဆက်တိုက်နေသည်။ “ရေချိုးကန်ထဲဝင်လိုက်တော့။ ချိုးတာငါကြည့်ချင်တယ်”ရှက်လွန်းနေသော ထွေး သည် ရေချိုးကန်ထဲသို့ ၀မ်းသာအားရ နှစ်စိမ်လိုက်သည်။ ဆပ်ပြာကို ယူကာ ဘေးခုံမှာ ထိုင်နေသော ဒေးဗစ် ကို လှည့်မကြည့်တော့ပဲ တကိုယ်လုံးတိုက်နေသည်။ ဒေးဗစ်ကတော့ လီးကိုကိုင်ပွတ်ရင်း ငေးနေသည်။ ရေချိုးရင်း သူ့ကို စိတ်ထဲကထုတ်ထားသည်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ အမိန့်တွေ ထပ်ကျလာသည့် အခါ သတိက ပြန်ပြန်ဝင်လာသည်။ ထပြီး အဖုတ်ကို ဆေးပြစမ်း၊ နောက်လှည့် ဖင်ဖြဲပြီး နှိုက်ဆေးစမ်း၊ စသည်ဖြင့်..။ ခိုင်းတိုင်း သူမက ချက်ခြင်းလုပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး ရေချိုးခြင်းအမှုပြီးသည်။ ရေကို ဖွင့် ထုတ်လိုက်ကာ မတ်တတ် ထရပ်သည်။.
“ဒီကိုလာ ထွေး” ဒေးဗစ်၏ လက်များ လှုပ်ရှားလာသည်။ သဘက်စောင်ကို ဆွဲဖယ်လိုက်ကာ
သူမကို သူ့ခြေထောက်များ ကြား ဆွဲယူလိုကသည်။ လက်တစ်ဖက်က သူမနောက်ကျော။ နောက်တစ်ဖက်က ရှေ့မှာ ထားသည်။ “ပေါင်ကားအုံး။ ဒီတစ်ခါ ပိုကျယ်အောင်ကားနော်”
သူ့မျက်နှာသည် အဖုတ်မှ လက်မ အနည်းငယ်သာ ကွာတော့သည်။ ရေချိုးဆပ်ပြာနံ့ ချိုချိုကို ရသည်။ လက်တစ်ဖက်က ရင်အုံကို အုပ်ကိုင်ရင်း နို့သီးလေးများ ပြန်ထောင် လာအောင် ပွတ်သည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပွတ်သောအခါ သူမ ကိုယ်မှာ တုန်ရီလာသည်။ နို့သီးခေါင်း ကို နီရဲလာအောင် ညှစ်သည်။ အနည်းငယ်ညည်းမိသည်မှအပါ သူမ ဒီတိုင်းခံနေသည်။ နို့ကို လိမ်ဆွဲလိုက်သလို
ဖြစ်ညှစ်သောအခါ သူမအံကြိတ်ထားရသည်။ အရမ်းကိုနာသည်။ သို့သော် သူမ မလှုပ်။ ညကျ လျှင် ဒဏ်ပေးခံရအုံးမည်ဖြစ်ရာ ဒဏ်တွေ ထပ်တိုးလို့မဖြစ်။ “အမ်း…..” ညည်းတွားမိသည်။ လက်တစ်ဖက်က ဗိုက်သားများကို ပွတ်ဆင်းကာ နီညိုရောင်စောက်မွှေးလေးများပေါ်ရောက်လာသည်။ မွှေးနုလေးများကို ဆွဲမွှေသည်။ တချို့ အမွှေးတွေ ကြွတ်ထွက်သဖြင့် သူမ နာကျင်စွာ ညည်းသံကို ကြားရသည်။ အဖုတ် အုံ တစ်ခုလုံးကို ဘောလုံးလို ဆုတ်ကိုင်သည်။ သူမ တင်ပါးဆုံကို နောက်ဆုတ်ပြီး
လွတ်မလားကြိုးစား သည်။ နောက်လက်တစ်ချောင်းက ဖင်ကြားမှ စောင့်နေသည်။ ဖင်ထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးဝင်လာသည်။ သူမ တုန်တုန်ရင် ရင် ဖြစ်နေသည်။ ထွေး
သည် သူ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ဒေးဗစ် သိမ်းပိုက်လိုက်သလို ခံစားရသည်။ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းက သူမဖင်ထဲထိုး နေသည်။ ဖင်ကို လျှော့ဖွင့်ထားသဖြင့် ဆန်းပြားသော အတွေ့ကိုခံစားနေရသည်။ ဖင်ဝကြွက်သားကို လက်ချောင်းက ပွတ်ပေးနေသည်။ နောက်လက်တစ်ချောင်းက စောက်ရည်များ ဖုံးလွှမ်းနေသည့် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းများကို ပွတ်နေသည်။ သူမကိုယ်ခန္ဓာက သစ္စာဖောက်နေပြီ။ နောက်လက်တစ်ချောင်းက အစေ့ကို အထက်အောက် ပွတ်ပေးသည်။ အစေ့မှ သည် အဖုတ်ကြပ်ကြပ်ထဲအထိ။ ဒေးဗစ် က ထွေးကို စပြီး လက်နဲ့လုပ်နေပြီ။ ထွေးတစ်ကိုယ်လုံး ပေါက်ကွဲထွက်တော့မည်။ သူမကိုယ်က ရှေ့တိုး နောက်ငင် ဖြစ်နေသည် မှာ မဖုံးမဖိနိုင်။ ဖင်ထဲက လက်ချောင်းက ပို၍ ပို၍ ၀င်သွားသည်။ အဖုတ်က စိုရွှဲနေပြီ။ သူ့လက်ချောင်းမှာ စောက်ရည်တွေ လူးလို့။ အဖုတ်နံ့က တစ်ခန်းလုံး ထောင်းနေသည်။ သူ့လက်များက အပျိုစင်ကိုယ် ထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည်။ မိန်းမကိုယ်၏ တုန့်ပြန်ညှစ်အားကြောင့် ကြပ်ကြပ်လေး ဖြစ်နေသည်။ ဖင်ဝက ချောဆီမပါသော်လည်း သူမက ရှေ့ပေါက် ထိုးချက်ကို တုန့်ပြန်လိုက်တိုင်း နောက်သို့ ဆုတ်သွားရသည်ဖြစ်ရာ ပို၍ တိုးဝင်ခံရပြီး နှစ်ဖက်ညှပ် လက်သွင်းလိုးမှုမှာ နာကြင်စွာညည်းမိသည်။ ထွေး ဏှာစိတ် အမြင့်ဆုံးထိ စတက်နေပြီ။ သူမကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြီးအောင် လက်နှင့်လုပ်ဘူးခြင်းနှင့် သိသာခြားနား သည်။ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး သူမ၏ရတနာများကို ဒေးဗစ်၏ မျက်လုံးနှင့် လက်များထံ ဖွင့်ပေး ထားရသည်။ ဖင်ထဲက လက်ချောင်းသည် သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို ဆုတ်ဖြဲလိုက်သလိုဖြစ်ကာ မစဉ်းစားဘူးသည့် အကြမ်းဖက်မှုကို ခံနေရသည်။ ဖင်ထဲကို မြွေတစ်ကောင်လို တိုးဝင်လိုက် ပြန်ထွက်လိုက်နှင့် ဆက်တိုက်ပင် လှုံ့ဆော် နေသည်။ နာကျင်သော်လည်း သူ့ကြောင့်ပင် အဖုတ်က ပိုရွှဲရသည်။ လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းက သူမကိုယ်ကို ဆုတ်ဖြဲ ကာ ဖင်ခေါင်းနှင့် စောက်ခေါင်းကြားရှိ အရေပြားကို ဖြဲချလိုက်သလို ခံစားမိပြီး “အန်း……” နာကျင်မှုနှင့် အရသာ ပေါင်းစပ်ကာ ညည်းတွားသည်။ဒေးဗစ် ရှေ့တိုးလာပြီး ထွေးလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူကာ သူ့လီးပေါ်တင်ပေးသည်။ “နင့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးနေတုန်း ငါ့ကိုလည်း ထုပေးအုံး” ခိုင်းတော့သည်။ လက်ဖ၀ါးနုနု က သူ့လီးကြီးကို စုန်ဆန် ပွတ်သတ်သည်။ လထစ်ကို အသာ ညှစ်ရင်း လက်သည်းက လထစ်အောက်ပိုင်းကို ချစ်မိသောအခါ လီးက တုန်တက်သွားသည်။ “အား။ ကောင်းတယ်။ လုပ်၊ ထွေး” လက်ချောင်းတစ်ချောင်းက သူမဖင်ထဲသို့ ထပ်တိုး လာသောအခါ နာကျင်မှုဖြင့် သူမရှေ့ကို ရုတ်တရက် တိုးလိုက်ပြီး ရှေ့ပေါက်က လက်က အပျိုမှေးကို ဖောက်တော့မလိုပင်ဖြစ်သွားသည်။ “သတိထား ထွေး၊ ငါ နင့် ကို အပျိုရည် မဖျက်ချင်သေးဘူး။ အဲဒါက ညကျမှ ငါ့လီးက လုပ်ပေးမှာလေ”ရေနွေး၏ အပူငွေ့နှင့် သူမကို နှိုက်နေသော လက်ချောင်းများ၏ ပြင်းထန်သော လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ထွေးကိုယ်မှာ ချွေးသီးချွေးပေါက်များကျလာသည်။ လက်မက သူမ စောက်စေ့ကို ပွတ်သည်။ သူမ တင်ပါးဆုံက ဘယ်ညာယိမ်း လာသည်။ လက်ချောင်းများ က သူမတစ်ကိုယ်လုံး ၏ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို လွှင့်ပစ်လိုက်ကာ သူမ ခြေချောင်းများ က ဆန့်တက်လာသည်။ ကားထားရ၍ နာနေသော ပေါင်တွင်း နာကျင်မှုနှင့်အတူ အဖုတ်က လိုးနေသော လက်ချောင်းကို ညှစ်လိုက်ရာ ကော့တက်သွားပြီး ဖင်ဝကို လက်နှစ်ချောင်းပူးအတွက် အစွမ်းကုန်ဖွင့်လိုက် ရင်း
“အိုး…အန်း… ဘုရား ဘုရား” ထွေး ထပ်ပြီးသွားပြီ။ လက်များက ဆက်လိုးနေဆဲ။ စောက်စေ့ကိုလည်း လက်မဖြင့် ပွတ်ချေခံနေရဆဲ။ ဒေးဗစ် သည် ထွေး ပြီး တာတွေကိုကြည့်ရင်းပြုံးနေသည်။ သူမ၏ စောက်ရည်များသည် သူ့လက်တွင် စိုရွှဲလျက်။
သူမအပေါ် သူ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကြောင့် ပိုထန်လာသည်။ ဖင်ထဲကို နာကျင်စွာ ကလိခြင်းခံနေရသည်။ သူမလက်ကလည်း သူ့ လီးကြီးကို ပွတ်တိုက်ပေးနေသည်။ လက်ကလည်း
ပိုကြပ်ကြပ်ညှစ်ရင်း ပို၍ ပို၍ မြန်မြန် ထုသည်။ ပြီးမသွားအောင် ဒေးဗစ် က သွားကို ကိုက်ထားသည်။ သူမ ပြီး သွားသည်နှင့် ပါးစပ်ထဲသို့ လရည် ပန်းထဲ့ရန် ဖြစ်သည်။ သူမပြိုယိုင်လဲသွားသဖြင့် သူက ထိန်းကိုင်ပေးထားရသည့် အချိန်တွင် အနည်းဆုံး ၃ ကြိ်မ်လောက် ပြီး သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူမ ဖင်ပေါက်ထဲက လက်များကို ညှစ်ထားသည့် စအိုကြွက်သားများကြားမှ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ အဖုတ်ထဲကလက်များကတော့ စောက်ရည်များဖြင့် ပွနေသည်။ အဖုတ်မွှေးနီနီလေးများပေါ်တွင် အရည်များ နံနက်ခင်းနှင်းပွင့် ပမာ လက်နေသည်ကို
မြင်ရသည်။ သူ ထွေးငယ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်အသာချလိုက်သည်။ သူမသည် ဘာကိုမှ မငြင်းဆန်နိုင်လောက်အောင် နွမ်းလျနေလေပြီ။ ဒီအချိန်သည် ဒေးဗစ်လိုသလို အမြတ်ထုတ် ရမည့် အချိန်ပင်တည်း။သူမရှေ့ကြမ်းပြင်တွင် ခေါင်းအုံးတစ်ခု ချထားသည်။ ဒေးဗစ်က ဒူးတက်ထောက်စေလိုက်သည။ သူ မတ်တတ်ရပ် သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရစဉ် သူမလက်များက သူ့လီးကြီးပေါ်တွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒေးဗစ် လထိပ်ဖျားမှ ထွက်သော အရည်ကြည်များဖြင့် စိုရွှဲနေသည်။ သူမမျက်နှာနှင့် သူ့လီးကြီး တပြေးညီဖြစ်သွားသောအခါ ဒေးဗစ် ဘာလုပ်စေချင်သည်ကို သူမရိတ်စားမိသွားသည်။ သူ့လီးကြီးကို စုတ်ခိုင်းတော့မှာ သေချာသည်။ ပိုသေချာ သည်က ထွက်လာသောအရည်များကို သောက်မျိုခိုင်းတော့မည်။ သူမ
မငြင်းဆန်နိုင်မီ သူမ နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းများ တွင် လက်ချောင်းများဝင်လာပြီး ပါးစပ်ကို ဆွဲချဲ့ခံလိုက်ရသည် နှင့်မရှေးမနှောင်း ဒေးဗစ်၏လီးကြီးက တိုးဝင်လာသည်။ ပူနွေးသော လီးကြီးတွင် ပွဲကြိုရည်များဖြင့် ပေကျန်နေသည်။ သူမလျှာက လထစ်ကို ရမ္မက်ဖြင့် လျက်ယူလိုက်သည်။ ငံကျိကျိ အရသာ ကို ရလိုက်စဉ် လရည်တချို့ပန်းဝင်လာသည်။ သူမပါးစပ်က ရုတ်တရက် စေ့သွားမိသည်။ သွားက လထစ်ကို ကိုက်မိသွားသည်။ “အိုး” ဒေးဗစ် နာကျင်စွာအော်သည်။ “ခွေးမ” လီးကို ပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ထွေး၏ ပါးနှစ်ဖက်ကို လက်ဝါးဖြင့် ဘယ်ပြန်ညာပြန် ရိုက်လိုက်သည်။ ပါးများမှာ ရဲရဲနီသွားရသည်။ ထွေးဆံပင်ကို ဆွဲစုကိုင်လိုက်ပြီး မျက်နှာကို မော့စေ လိုက်သည်။ “မင်းဒီည တွေ့မယ် ထွေး” သူမ မျက်ရည်များကျလာသည်။ “နင့်သွား ကိုသိမ်းထား။ လုံးဝမထိစေနဲ့” ပါးရိုက်ချက်ကြောင့် သူမ ခေါင်းမှာပြာဝေနေသည်။ ဒေးဗစ်၏ လီးကြီး ပါးစပ်ထဲသို့ တိုးဝင်လာပြန်သည်။ ညဖက် ဘာ လုပ်ခံရမှာမှန်းမသိတာကို ကြောက်လှသဖြင့် ပါးစပ်ကို အသာလေးဖွင့်သည်။ သူ့လီးကြီးက အရှုံးပေးသွားသော သူမပါးစပ်ထဲသို့ တစ်ဆုံးထိုးဝင်သွားသည်။ သူမ သွားများကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ကာလိုက်ကာ လထစ်ကို ချောချောမွတ် မွတ် ၀င်စေလိုက်ရသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်
သူမ တုန်ယင်နေသည်။ လီးကြီး၏ တိုးဝင်တိုးထွက်မှုကြောင့် ခက်ခဲစွာ အသက်ရှူနေရသည်။ “လထစ်ကို ဒီတိုင်းပဲထား။ လိမ်လိမ်မာမာနေ။ ငါ နင့်ကို လရည် ကျွေးမယ်” သူ ရယ်နေသည်။ အပြစ်ကင်းသော မိန်းကလေး၏ လျှာက သူ့လထစ်ကို ရစ်ပတ်နေတာကို သဘောကျနေသည်။ သူမမျက်လုံးများက အနားခံနေသည်။ လရည်တွေအားလုံး ဗိုက်ထဲရောက်သွားရင်တော့ လွှတ်ပေးပေလိမ့်မည်။ “ကဲ လျှာနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းလျက်။ ထိပ်ဝကို ထိုးပြီး သုတ် ကို အရသာခံစမ်း” လက်များက သူမခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ထားဆဲ။ “အမ်း…၊ အတော်ကောင်း လာပြီ။ ထွေး နင်က ပါရမီရှိတဲ့ လီးစုတ်မလေး ပဲ။ နည်းနည်း သင်ပေးပြီး ဒဏ်နည်းနည်းပေးခံလိုက်ရရင် အိုကေသွားပြီ။ ငါ က နှစ်မျိုးလုံး ပေးနိုင်တယ်။ ကဲ နည်းနည်း ပို မြိုလိုက်စမ်း” သူမ၏ ခေါင်းကို ဆွဲထားရင်း သူ့ခါးကို ရှေ့တိုးလိုက်သည်။ လီးကြီးက စိုနေသော လျှာပေါ်မှ ဖြတ်ကာ ပိုနက်အောင်ဝင်သွားသည်။ “လထစ်အောက်နားကို လျှာနဲ့လျက်စမ်း အိုး..ရေး။ ကောင်းလိုက်တာ ထွေးရယ်”လီးကြီးသည် သူမ၏ ပါးစပ်တွင်းသို့ ပိုနက်အောင် တိုးဝင်လာသည်။ အာခေါင်တွင်းသို့ရောက်လာမည်ကို သူမ စိုးရိမ် နေမိသည်။ မတားနိုင်ရင်တော့ ဒုက္ခပါပဲ။ နာကျင်မှု မှ သက်သာစေရန် လီးပေါ်ရှိ အဖုအထစ်အားလုံးပေါ်သို့ လျှာကို ကစားပေးနေသည်။ ငံကျိကျိ လရည်များ စိမ့်ထွက်လာကာ လျှာပေါ်တွင်တင်နေသည်။ ဒေးဗစ်က ခေါင်းကို ဆွဲ တည့် ပြီး လည်ချောင်းကို ဖြောင့်တန်းအောင်ပြင်ဆင်ရင်း လီးကို သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်လုပ်သည်။ လီးကို အ၀င် ကြပ်အောင် ကြိုးစားမှုကြောင့် လျှာဖြင့် တပြတ် ပြတ် စုတ်သံက ဆူညံနေသည်။ “နက်နက်လေး ထွေး၊ အတော်လေး နက်နက် သွင်းရရင်ကောင်းမယ်။ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူစမ်း” ဒေးဗစ် သည် နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားနေသော ထွေး၏ ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ဆွဲချုပ်ပြီးလိုးနေတော့သည်။ “အ ..အ.. အား” လထစ်ကြီး အာခေါင်ထဲသို့ဝင်လာသောအခါ ထွေး အော့ချင်လာသည်။ လယ်ချောင်းကို စစ်ဆေး မည့် ဆရာဝန်က တုတ်ချောင်းဖြင့် ထိုးနေသလို တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်နေသည်။ ယခု တုတ်ချောင်းကား ပို၍ကြီးမား သော အသားနွေးနွေး လီးတံကြီးတည်း။ ဆွဲထုတ်သွားသည်။ ရုတ်တရက်ပြန်ဝင်လာသည်။ “ဂ……လု” လထစ်ကို မျိုခိုင်းသလိုဖြစ်မှုကြောင့် ပို၍ အော့ချင်လာပြီ “အွမ်..” နှာခေါင်းမှ အသက်ကြိုးစားရှုသည်။ လယ်ချောင်းထဲမှာ ချွဲ လာသည်။ လယ်ချောင်းအတွင်းသားတို့ကို ဆွဲယူသည်။ အာသီးကို ကော်ဖြင့်သုတ်သည်။ ဗိုက်ထဲမှ လေဆန်သည်။ “အဲလိုဟုတ်တယ် ထွေး၊ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ကို ရအောင်ရှူ။ ပြီးတော့မှာ” ဒေးဗစ်က သူမ ကိုယ်ခန္ဓာ တုန်ခါလာသည် ကိုသိသည်။ အသက်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရှူနေသည်။ လီးကြီးကို လထစ် လျှာပေါ်ရောက်သည်ထိ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး “အသက် ကို တစ်ချက် ၀၀ရှူလိုက်စမ်း၊ ပြီးရင် မျိုချတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်” ခါးကို ရှေ့ပြန်တိုးလိုက်သည်။ အာသီးကို ပြင်းထန်စွာထပ်ထိသည်။ လရည်များရွှဲနေသော လီးကြီးသည် ချောမွတ်စွာပင် ၀င်လာသည်။ ထွေး အော့ သော်လည်း ယခင်လောက်မဆိုးတော့။ “ညည်းတော်တော် တတ်လာပြီ”
သူ့လက်ချောင်းများက ကိုယ့် လီး၏ အခြေကို ကိုယ်ကိုင်ထားသည်။ မျက်နှာကို ဆက်လိုးရင်း တစ်ဖက်က ထုနေသည်။ လယ်ချောင်းထဲသို့ နှစ်လက်မ လောက်ဝင်သွားအောင်
ဆောင့်သွင်းသည်။ထွေး ရုန်းကန်ကြိုးစားသော်လည်း ခံရမသက်သာပါ။ ဒေးဗစ်က ဆံပင် ကို ဆွဲထားသည်။ သူမပါးစပ်သည် ခုတော့ လီးထည့်စရာနေရာ တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။
သူမ မည်မျှခံနိုင်ဦးမည်ကို ကိုယ်တိုင်မမှန်းနိုင်။ မျက်နှာကို အဖုတ်လို သဘောထား သုံးခံနေရ၍ လယ်ချောင်းမှာ မီးတောက်နေသည်။ မြန်မြန်ကျော်သွားစေချင်လှပြီ။ သူ မြန်မြန်ပြီး သွားစေချင်လှသည်။ လရည်များ သူမ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်မည်ကို မုန်းတီးလှသော်လည်း မျက်နှာကို အလိုးခံနေရ ခြင်း ရပ်တန့်သွားဖို့က ပိုအရေးကြီးသည်။ သို့ဖြစ်၍ လျှာကို ကြိုးစားပြင်ဆင်ကာ ၀င်လာသော လီးကို လှည့်ပတ် လျက်သည်။ လက်တစ်ဖက်က ပူလောင် လေးလံနေသော လဥများကို ဆုတ်ကိုင်သည်။ အသာညှစ်ပေးသည်။ မြန်မြန်ထွက်စေဖို့ရာတည်း။ “လရည်ထွက်အောင်လုပ် ထွေး …အား.. ကောင်းတယ်။ ငါ့ဥထဲကလာမည့် သုတ်တွေကို စုတ်စမ်း” လက်ဖ၀ါး နုနု လေးများက ဥကို နှိပ်နယ်ပေးနေသည်ကို ဖီးလ်ယူသည်။ လီးကို လျှာနှင့် လှည့်ပတ် လျက် နေမှုကြောင့် သူ ကြာကြာ မထိန်းနိုင်တော့။ သူမ လရည်အရသာ ခံလို့ရအောင် လယ်ချောင်းထဲက လထစ်ကို ထုတ်ယူလိုက်သည်။ “နင့်လက်နဲ့ ထုပြီး ပါးစပ်ထဲကို သုတ်တွေပန်းဝင်အောင် လုပ်စမ်း” သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က လီး အခြေကို ကိုင်ကာစုန်ချည်ဆန်ချည် အမြန်ပွတ်သည်။ တစ်ဖက်က ဥများကို သာသာ ညှစ်သည်။ လထစ်ကြီးသည် လျှာပေါ်တွင် ဖိတင်နေသည်။ လထစ်ပတ်လည်ကို
လျှာနှင့် လှိမ့်ပေးနေသည်။ ဥထဲတွင် လရည်များ လှုပ်ရှားနေသည်ကို စမ်းမိသည်။ လီးထိပ်ကြီး တုန်ခါသွားသည်နှင့် အတူ လည်ချောင်းထဲထိ တန်းဝင်လာ အောင် ပန်းလိုက်သော လရည်များကို ခံစားလိုက်ရသည်။ “အ ..အ..ဂ” ပါးစပ်အပြည့် လရည်များဝင်လာသည်။ အမြန် ပြည့်လာသဖြင့် အတင်းမျိုချသည်။ လက်က ဆက်ညှစ်ပေး ထုပေးနေသဖြင့် နောက်တစ်သုတ် က လာတော့မည်။ ဒေးဗစ် က တင်ပါးဆုံကို မြှင့်ပြီး တွန်းထည့်လိုက်သည်။ ဥထဲမှ သုတ်များကို အပျိုစင် နှုတ်ခမ်းများအတွင်းသို့ ပန်းသွင်း သည်။ ပါးစပ်ထဲတွင် လရည်များ ချက်ခြင်းပြည့်သွားသဖြင့် သူမမျက်လုံးတွေ ပြူး ၀ိုင်း လာသည်ကို မြင်ရသည်။ အရည်တွေက မယုံနိုင်လောက်အောင် များလွန်းသည်။ သူမမျက်ရည်များကျလာသည်။ လက်များက မူ အလုပ်ရှုပ်လျက်။ နောက် လရည် တစ်သုတ်က ပါးစောင်ကို ပန်းသည်။ သူမ အမြန်မျိုချရပြန်သည်။ လျှာက သေးပေါက် တံကြီးကို လျက်နေသည်။ လထစ်က ခုန်နေသည်။ နောက်ထပ် တစ်သုတ် ပန်းပြန်ပြီ။ဒေးဗစ်မှာ ဒါလောက်များသည့် လရည်တွေ ရှိသည်ကို ထွေးမယုံနိုင်။ ပါးစပ်ထဲမှာ မဆန့်သဖြင့် ဆက်တိုက်မျိုချနေ သည်။ ချွဲပျစ် ငံကျိသော အရည်တွေက အာသီးကို ခို နေသည်။ နှုတ်ခမ်းက လီးကို တင်းတင်း စေ့ စုတ်ထားသည်။ လီး ကြီးက လျှာကို ဖိထားသဖြင့် မလျက်နိုင်တော့ “ဂု ..ဂု.. အု…” ပျို့တက်လာသည်။ ပါးစပ်ထဲက လီးကြီး စတင် ပျော့ ကျသွားသည်ကို ခံစားမိသည်။ သူမသရေတွေနှင့် သူ့ သုတ်တွေလိမ်းထားသော ရာဘာချောင်းကြီး ကို ငုံထား ရသလိုဖြစ်သွားသည်။ “ငါ ပြန်ထုတ်လိုက်ရင် စင်အောင် သေချာ လျက် ပေး။ ငါ လိုးတဲ့အခါတိုင်း ပြီး ရင် လီးကို အဲလို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေး ရမယ်။ မှတ်ထားနော်” ခိုင်းသည်။ လီးကြီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ်သောအခါ နှုတ်ခမ်းကို စေ့ပေးထားရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ပါးစပ်ထဲက ပြွတ်ကနဲထွက်သွားသည်။ ဒေးဗစ်က သူမကို ငုံ့ကြည့်နေသည်။ မျက်ရည်များ လိမ်းကျန် ထားသော မျက်နှာ၊ နီရဲ စိုစွတ်နေသော နှုတ်ခမ်းများတွင်
သူ့ လရည်တွေပေလျက်၊ မေးစေ့တွင် လရည် တစ်ချို့ ခြောက်လျက်။ “နင် လီးအစုတ်ကောင်းသားပဲ ထွေး” သူ ဖြေသိမ့်သည်။ “ဒါပေမယ့် နင်ဒီည ဒဏ်ပေးခံရအုံးမယ် နော်။ ငါ့လီးကို ကိုက်လို့” သူ ထ ရပ်သည်။ တံဘက်နှင့် အ၀တ်များကို ဆွဲယူ၍ ကြမ်းပြင်တွင် ဒူးထောက်နေဆဲ ထွေးငယ်ကို ထားကာ ထွက်သွားတော့သည်။ တံခါးကို အပြင်က စေ့ပေးခဲ့သည်။
ရာဂျူး သည် သူ၏ လက်ရာ “လိုး စင်” ဟု ခေါ်နိုင်သော ဒဏ်ပေးခုံကြီးအတွက် ကျေနပ်လျှက်ရှိသည်။ စာကြည့်တိုက် အလယ်တွင် ဒေးဗစ်အတွက် လုပ်ပေးထားသော သစ်သား ခုံသည် ခန့်ခန့်ညားညား။ ကြမ်းပြင်မှ ၂ ပေခွဲခန့် မြင့်သည်။ မလှုပ်အောင် ခိုင်ခန့်လေးလံသော ခြေထောက်များရှိသည်။ တင်ပြီးလိုးရန် အမြင့်က အနေတော်။ ခုံရှေ့ပိုင်းတွင် မွှေ့ယာခင်းထားသည်။ ခုံအစွန်းတွင် ပျဉ်ချပ်ကြီး ထောင်လျက်။ လက်နှစ်ဖက် နှင့် ခေါင်းကို ထိပ်တုံး လို ထည့်ထားဖို့ အပေါက် သုံးပေါက်ပါသည်။ ပျဉ် ၂ ပိုင်းကို ဆွဲလှန်ပြီး ခေါင်း၊ လက်များ ထည့်ကာ ပြန်ပိတ်လို့ရအောင် လုပ်ထားသည်။ ချုပ်ထားလျှင် ပါးစပ်က အလိုးခံဖို့ အတွက် ဟ
နေလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းက အရှင်လုပ်ထားသည်။ ခုံ၏ ခြေထောက် ၆ ချောင်း သည် ထောင့် အမျိုးမျိုးဖြင့် ကစား နိုင်အောင်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပေါင်ကို အမျိုးမျိုးကား လို့ရအောင် လုပ်ထားသည်။ ပျဉ်ချပ်ကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ခြင်းဖြင့် သားကောင် ၏ ဖင်ကို လေထဲ ထောင်နေအောင် လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ပြင်လုံးကို ကော်ဇောအုပ်ထားသည်။ ပိရမစ်ပုံ ခုံသည် နှိမ့်ခြင်း မြှင့်ခြင်း ဖြင့် ခြေထောက်ကို ကွေးစေကာ အဖုတ်ကို ဖြဲဟ အောင် လုပ်နိုင်သည်။
အလိုးခံမည့်သူ၏ ရင်အုံ အောက်နေရာလောက်တွင် စပရင် များ ထည့်ထားပြီး တွဲလောင်းဖြစ်နေမည့် နို့ကို ဆွဲဆုတ် သလိုဖြစ်အောင် စီမံထားသည်။ “သိပ်ကောင်းတယ်။
ရာဂျူး။ မင်းလက်ရာ အတော် ခန်းနားသေသပ်တာပါလား။ ထွေးတော့ ဒီည သဘောကျလောက်တယ်။ ငါ့လီးကို ကိုက်မိသွားလို့ ညကျရင် အကြွေးပြန်ဆပ်ရတော့မယ်ကွ။” စိတ်ကူးရင်းပင် ဒေးဗစ်၏ လီးကြီးက မာတောင်လာနေသည်။ မှတ်ချက်။
လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်လောက်က အချစ်ရွာသစ်တွင် တင်ခဲ့ဘူးသော Indian Sex Stories တစ်ပုဒ်ဖြစ်သော Maiden Maid ကို မြန်မာမှုပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Posted by